Uploaded by awsayar
ကျွန်တော်နှင့် ထူးဆန်းသော သစ်သားရုပ်ထုလေး
kya naw. nat tha mee
​www.apyarbooks.club မြေ​ခွေးအပြုံး.. www.apyarbooks.net.pdf
Million Billion 9matsofSand(1)
ပဉ္စမံ တပ်သား2full.pdf
Esquema Estudio en Escarlata
290565754 Informe 1 Simulacion Caracteristica Lookup VACA CORELLA
REKAPITULASI PERSEDIAAN Incl.Pusk.xls
rezultate etapa judeteana toti.pdf
Refarat Radiologi Anisa - Queen
Thu Nar Pyu Sayarma Lay
About Ma Ma Phyu
A Chit Ta Say Nya
Post by: channko on June 12, 2013, 08:22:18 AM
ုး! ဇာတ်လမ်းပြန်စမယ် ပိတ်သတ်ကြီးရေ။
် တွ့ထဲမယ် ကျုပ်မှမရေး ဘယ်သူမှ ရေးမယ့်လူ မရှိတော့ ဘူးလားတောင် ထင်နေရတယ်။ ဒါကြောင့်
ဒီနေရာလေး မခြောက်ခမ်း သွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်စုံနဲ့ ကျနော့် ရင်ဘတ်ကြီးကို ဇစ်ဖွင့်သလို တဇွိဇွိ ဆွဲဖွင့်ရင်း
ဒဏ်ရာ အနာတရတွေကို လှစ်ဟ (ဟယ်! သောက်ရူး ချမ်းကို နင်ဘာတွေ ပြောနေတာလဲ ငါတို့ ဒီနေရာကို
၀င်ဖတ်နေတာ နင့်အမူးစကားတွေ ဖတ်ချင်လို့ မဟုတ်ဘူး တော် .. တန် .. တိတ်) ဟီဟိ :D အူရွှင်နေလို့ပါဂျာ။
ရှေးဦးစွာ ဇာတ်လမ်း မစခင် စကားချီးလေး အရင် ပြောကြား ခွင့်ပြုပါလို့။ ...
ရေးလက်စ ဇာတ်လမ်းတွေ ကို ဆက်ရေးဖို့ရာ အာရုံ ဘယ်လိုမှ မလာဘူး ဖြစ်နေတယ်ဗျ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေရာ မှာပဲ
် တွ့လေး ဆက်ဆွဲမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ လူဖတ်များတာ မများတာထက် ဒီနေရာမှာ
လာဝင်ဖတ်တဲ့ လူတွေကြတော့ ကျနော့် ညီအကို အစစ်တွေ (ပရိသတ်လို့ မပြောဘူးနော်) လို့ယူဆ တာကိုးဗျ။ လုံးဝ
ခင်မင်ရတဲ့ လူတွေလောက်ပဲ လာ အားပေး ကြတာ မလား။ အောဇာတ်လမ်းလည်း မဟုတ်တော့ လောင်တီးတဲ့
အခန်းတွေ ကလည်း သိပ်မပါဘူး ဆိုတော့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ရေးရတာကော အပြန်အလှန်
အာလူး ဖုတ် ရတာကော ရေလည် အရသာ တွေ့နေတယ်။ နောက်တစ်ခုက မှန်ရာ ပြောရရင် ကျနော် ဒီနေရာမှာ
ရေးနေတာတွေက ဘာမှ အားထုတ်စရာ မလိုဘူးဗျ။ တကယ်ပြောတာ။ ကျနော် အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ သလိုပဲ ချမ်းကို
ဲု့ ချိန်းလိုက်တယ် ၁၉လမ်းမှာ ဆိုပါတော့ (ဂလု :P ) လုံးဝ ညီညွှတ်ရေး တည်ဆောက်ပီး
"ဖွဲ့ စည်း" လိုကြ် ကရော။
အရှိန် နည်းနည်း တက်စပြုလာတဲ့ အချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့ထဲက တစ်ယောက်က စကားစတယ်။
“နင့်ရည်းစား ၇၆ ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဘယ်လို ကြုံတယ် ဘယ်လိုဆုံတယ် ဘယ်လို
သံဝါသပြုခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ပြောပြစမ်းဘာအေ (ကျန်တဲ့ ညီအကိုတွေကလည်း ကွဲကွဲနဲ့ ထအော်တယ်
အုဝု၀ု! အဲလေ.. ၀ုတ်ပါတယ် ၀ုတ်ပါတယ် ပြောပြပါ နားထောင်ချင်ပါတယ်)”
“အို ရှက်စရာကြီး ဟိ!”
“ပြောမှာပေါ့.. တစ်ပက် လောက် အရင် လုပ်လိုက်ဦးမယ် ခဏ..ဟီဟိ”
ပြောရချည်သေးရဲ့ဆိုပီး အူမြူးသွားတဲ့ ချမ်းကို တစ်ယောက် ၀ီတစ်ဝက်လောက် ဖြည့်ထားတဲ့
ဖန်ခွက်ကို တစ်ရှိန်ထိုး မော့ချ လိုက်တယ်။ ရုံးပတေသီးကင်ကို ၀ါးတူနဲ့ညှပ်ပီး အချဉ်ရည်ထဲနစ်၊ ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပီး
၀ါးလိုက်တယ်။ ဆိတ်သားကင် ပန်းကန် ဆီကို လက်လှမ်းပီး နည်းနည်းယူမြုံ့လိုက်တယ်။ ရက်ဒ်ရူဘီ
ိ်လောက် မီးညှိပြီး ၀ိုင်းထဲက လူတွေရဲ့ အခြေနေကို အကဲခတ် လိုက်တယ်။ အေဘေးလေးက ပြောမှာကို
မပြောသေးပဲ ဂိုက်ပေးနေတယ် ဆိုတဲ့ ခင်ညားတို့ မျက်နာပေးကို မြင်လိုက်မှ စီးကရက် မီးခိုးတွေကို ခပ်မျှင်းမျှင်းလေး
မှုတ်ထုတ် လိုက်ရင်း ဇာတ်လမ်းကို စ လိုက်တယ်။
ဒီလိုဗျာ ခင်ညားတို့ ဘ၀မယ် တခါတလေ ခရီးသွား ဟန်လွှဲ လျှောက်သွားရင်း လူတွေကြားထဲ ထင်းကနဲ ဖြစ်နေတဲ့
မိန်းကလေး မျိုး မြင်ဖူးကြမှာပေါ့။ ကုလားဖြူလို ပြောရင် စတန်းနင်းဖြစ်တဲ့ ရူပကာမျိုးဗျာ။ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်
လုပ်ထားလို့ ထင်းနေတာမျိုး ပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော်။ ဘာမှ မဖီးမလိမ်း မပြင်မဆင် ထားပဲနဲ့ကို မြင်လိုက်ရတာနဲ့ ..
ဟယ်! ရုပ်ကလေးကကွာ ... ဆိုပီး ထင်းကနဲ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး။ ပမာပြောရရင် the matirx reloaded:
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲက မာယာရှင် ပါစီဖုန်း(Monica Bellucci) လို ရုပ်ရည်မျိုးဗျာ။ (မူးမူးနဲ့ လျှောက်ပြောပစ်တာ
များကုန်ပီ ထင်တယ် ဟီ ဟိ) ကျနော့်မှာ အဲ့လို ရုပ်ရည်မျိုးပိုင်ရှင် သူငယ်ချင်းမလေး တစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဗျ။
ကျနော်ရယ် သူရယ် နောက်ထပ် ကောင်မလေး၂ယောက်ရယ်က ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့
ဖူးတာပေါ့ဗျာ။ အခု ပြောပြမယ့် ဇာတ်လမ်း ထဲက ကောင်မလေးက တစ်ခုလပ်မလေး။ ပြောရရင် တစ်ခုလပ် ကလေး
တစ်ယောက် အမေ လောကကြီးကို အံတင်းတင်း ကြိတ်လို့ တစ်ယောက်ထဲ ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ကောင်မလေး
တစ်ယောက်ပေါ့။ ငယ်ငယ် ရွယ်ရွယ်နဲ့ ကျောင်းမပီးခင် မှာ အိမ်ထောင် ကျတယ်။ ကလေး ပေါက်စန ကလေး
မွေးပီးတဲ့ အချိန်မှာ ယောက်ျားနဲ့ကွဲတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ သူ့မိဘတွေကလည်း မရှိရှာတော့ဘူးရယ်။ တစ်ကောင်ကြွက်
တစ်မျက်နာ လို့ တောင် ဆိုရမလားပဲ။ ဆွေမျိုးနီးစပ် ကြီးဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်တော့ ကျန်ရှာသေးတယ်။
ဒီလောက်ဆို ကျနော် ဘယ်သူ့ကို ပြောနေမှန်း ခင်ဗျားတို့ ရိပ်မိလောက်ပါပီနော့်။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။
ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း "ကျနော့် ပန်းချီဆရာမလေး" ထဲက တစ်ခုလပ်မလေး "မေ" အကြောင်းပါပဲ။
သူ့အကြောင်းကို ရေးရတာ ခပ်လန့်လန့်တော့ ခပ်လန့်လန့်ပဲ .. ဟီး။ သူက အင်တာနက်ထဲ ဟိုမွှေ ဒီမွှေ လုပ်တတ်တဲ့
ု ကြာင့် channko: ဟုခေါ်သည် .. ရေးခဲ့တုံးက
အကျင့်ရှိလေတော့ ပါးယားတယ် ဗျာ။ ဒါကြောင့် အရင်တစ်ခါ ထိ့ေ
တောင်းပန်ခဲ့သလိုပဲ အခု ကျနော်ရေးမယ့် ကိုယ်တွေ့လေး ကိုလည်း ဘယ်မှ လျှောက်မကူး ယူသွားကြဖို့
တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ အောဝတ္ထုတွေလို ဖတ်လို့လည်း ကောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အတွေးပင်လယ်ပြာထဲက
ညီအကိုတွေ အပျင်းပြေ ဖတ်ဖို့ သက်သက် ရေးတာလို့ပဲ မှတ်ယူကြပါ။ အဲဒ
့ါလေးတော့ မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်။
် တွ့ထဲမှာ ဘာတွေပါမလဲဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ရိပ်မိချင် ရိပ်မိနေ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
အရွှန်း ဖောက်ပီး ခင်ဗျားတို့ကို အားလူးဖုတ်ရင်း ရေးပြသွား ပါ့မယ်။
နိဒါန်းကတော့ ဒီလောက်ဆို ရပီ ထင်တယ်။ နက်ဖန်မှ အမှန်ကန် စ ရေးမယ်နော် :P
p.s အိုင်ဆေးချမ်းကို ဆိုတာ အိုင်တွေ့တိုင်း ခြေဆေးသူလို့ အစွပ်အစွဲခံရတဲ့ ချမ်းကိုလို့ ဆိုလိုသည် 8)
ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာ အီဖေကိုယ် မောင်ချမ်း အူတူတူကြီး ကျန်ရစ်ခဲ့ပါလေ ကော။ ဘယ်သူမှကို မကျန်ရစ် ခဲ့တာဗျ။ ဘုန်းမောင် တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်သွားတယ်။ မန်းလေးက အဲ့ဒီခြံက ဆောင်းတွင်းပိုင်း ကျနော့် ဇာတိ ဖက် မယ် တအားအေးတဲ့ အချိန် ကာလလောက်ပဲ အအေးဒဏ် ရှောင်တဲ့ အနေနဲ့ ကျနော့်အိမ်က လူကြီးသူမတွေ တစ်လ၊နှစ်လ ဆိုသလို လာနေတတ်တာ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့အချိန်ဆို တံခါးပိတ် ဂျိတ်ပဲ။ လူတွေ တရုန်းရုန်းနဲ့ ဆူညံ ပွက်လောရိုက်နေတဲ့ အိမ်နဲ့ ခြံဝင်းကြီး တစ်ယောက်ထဲ ကျန်ခဲ့လေတော့ ဘယ်လောက် ကြောင်စီစီ ဖြစ်နေမလဲ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပေတော့။ ဟဲဟဲ! အဲ့ဒီကြားထဲ အသည်းကွဲတဲ့ ပြဿနာလေးက ခင်ဗျားတို့ သိတဲ့အတိုင်း ရှိနေလေတော့ ကာ မခံနိုင်ဘူး ရူးမှာပဲ ဆိုတဲ့ အခြေနေ ဖြစ်လာတာပေါ့လေ။ လူကလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ အူကြောင်ကြောင်ကြီး ဖြစ်စ ပြုလာတယ်။ နေ့ခင်းဖက်ဆို အပြင်မထွက်ပဲ တနေကုန် စာထိုင်ဖတ်၊ ညနေစောင်းမှ အပြင်ထွက် အာလူးဖုတ်လို့ ရတဲ့ ဘော်ဒါတွေ လိုက်ရှာ၊ ဘီယာဆိုင် ခေါ်ထိုင် သောက်၊ တောင်စဉ် ရေမရတွေ လျှောက်ပြော၊ ညဉ့်နက် တော့မှ အိပ်ပြန်အိပ်၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ လုံးချာလည် လိုက်နေတော့ တာဗျ။ အဲ့လိုကြီး အချိန်ဖြုန်း နေလိုက်တာ တစ်လလောက် နေတော့ အဲ့ဒီအိမ်မှာ ကျောင်းသားဘ၀က စုဆောင်းထားသမျှ စာအုပ်တွေ ကလည်း ဖတ်စရာ ကုန်သလောက် ဖြစ်သွားတယ်။ နေ့လည်ဖက်ဆို ဖတ်စရာ စာအုပ်မရှိတော့ သလို ဖြစ်လာပီး အရည်ထွက်အောင် ပျင်းလာပါ လေရော။ ဒါနဲ့ ဘော်ဒါ တစ်ယောက်ကို သတိရသွားတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀မှာ တုံးက သူ့တ့အိုမ်က စားအိမ် သောက်အိမ် ဖြစ်ခဲ့လေ တော့ကာ အမြဲဝင် ထွက်နေရင်း ကျနော် ကောင်းကောင်း မှတ်မိနေတာ တစ်ခု ရှိတယ်။ ဆုံးသွားရှာပီ ဖြစ်တဲ့ သူ့မိဘတွေ၊ တိတိကျကျ ပြောရရင် သူ့အဖေကြီးက စာအုပ် အဟောင်းတွေ စုတာ အင်မတန် ၀ါသနာပါလေ တော့ကာ သူတ့အိုမ်က ဧည့်ခန်းမှာ စာအုပ်တွေကို စင်တွေ၊ နံရံကပ် ဘီရိုတွေနဲ့ အများကြီး သိုမှီး ထားတာကိုးဗျ။ ကျနော် အင်မတန် သဘောကျတာက ရှေးခေတ်က ရှုမ၀၊စန္ဒာ ဘာညာ အဲ့လို ဖတ်စရာတွေ အပြည့်ပါတဲ့ မဂ္ဂဇင်း အဟောင်းတွေ ကိုလည်း အထပ်လိုက် သေသေသပ်သပ် စုထားတာဗျ။ အဲ့ဒါလေး တွေးမိတာနဲ့ ရေမိုးချိုး အ၀တ်အစား ကောက်လဲ လိုက်ပီး ကျောပိုးအိတ် တစ်လုံး ကောက်လွယ်ပီး အိမ်က ထွက်လာခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။ ရည်ရွယ်တာက သူ့ဆီသွားမယ် တခြား စာအုပ်တွေထက် အဲ့ဒီခေတ်ဟောင်း မဂ္ဂဇင်းတွေ အထပ်လိုက် အိမ်သယ်ပီး ဖတ်မယ်၊ နောက်နေ့ ပြန်ပို့မယ်၊ ထပ်ငှားမယ်၊ အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ .. .. ခုဇာတ်လမ်းကို စပြောဖိ့ကုအရင်ခေါင်းစဉ်က အကြောင်းအရာနဲ့ ပြန်ဆက်စပ်မှ ရမယ်နဲ့ တူတယ်ဗျ။ အဲ့မှာဗျာ ကျနော် ပြောခဲ့တယ် မလား။ ဟိုဇာတ်လမ်း နောက်ဆုံးပို့စ်မှာ ကျနော် နာရေးကိစ္စကြောင့် တိုင်ပတ်တယ် ဆိုတာလေ။ စိတ်မော လူမောကြီးပေါ့။ အဲ့ဒီလူနာ ဆုံးသွားတော့ အသုဘရှင် လုပ်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဆုံးသွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက အမျိုးထဲက အင်မတန် ပေါက်ရောက်တဲ့ သူဆိုတော့ကာ တောင်ပေါ်က အမျိုးတွေ တစ်အုပ် တစ်မကြီး ဆင်းချ လာကြတာကိုး။ တစ်ရက် တစ်ရက် ရက်မလည် မချင်း အိုးကြီးအိုးငယ်နဲ့ ခြံထဲမှာ ချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးရေးက အစ၊ အလောင်းမြေကျတာ ဘာညာ အပါအ၀င် အားလုံး ကိစ္စ ငြိမ်းသွား ပြန်တော့ အဲ့ဒီအမျိုးတွေ ဘုရားဖူး ဟိုပို့ ဒီပို့ ခေါင်းကို နောက်နေ တာပါပဲ ဆရာတို့ရာ။ အဲ! အားလုံးလည်း ပီးသွားကော အကုန် အလျှိုလျှို ပြန်ကြလေသတည်း . .
ဟိုင်း! အချစ်ဆုံးလေး ဆိုပီး ပြောင်စပ်စပ် မျက်နာလုပ် ပြလိုက်မိတယ်။ ဖာဂေါင်း! ဆိုတဲ့အသံနဲ့ လက်သီး၂လုံးလောက် နံကြားထဲ ပြေးဝင်လာတာ အသက်ရှူတောင် ကြပ်သွား တယ်။ .... ဟီး) ဈေးဝယ်တွေကို အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ ဧည့်ခံနေတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ သူ့ဖာသူ အာရုံများ နေတာနဲ့ ကျနော့်လည်း မြင်ဟန် မတူဘူး။ ဒါနဲ့ အနားကပ်လာတဲ့ အရောင်း စာရေးမလေးတွေကို ဟိုမေး ဒီမေးတွေ လျှောက်မေး... ခုနစ်သိန်းပါ . ဒါလေးက .... ဟား။ မုန်းတယ်. မိန်းမတွေများ ပက်ဆံ အတော်ဖြုန်းပါလား ... ကျမ ဆိုင်ရှင်ပါရှင်” ဆိုပီး အနား ရောက်တာတယ်။ ဒင်းက ကျနော့်ကို မမှတ်မိဘူးရယ်။ ဘယ်မှတ်မိ မတုံး။ ဆံပင်ရှည် ကြိုက်တဲ့ ကျနော် စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ရှေ့တစ်လက်မ နောက်ပြောင်လို့ ခေါ်တဲ့ ဂတုံး ဆံတောက် ဆံပင် ညှပ် ထားတာရယ်၊ မျောက်မှန် အနက်ကြီး တပ်ထားတာရယ် ကြောင့် ရုတ်တရက်ကြီး (ကွဲနေတာကလည်းကြာပီဆိုတော့) ဘယ်မှတ်မိ ပါ့မလဲ။ ပြုံးစိစိနဲ့ လက်ပိုက်ပီး မျက်နာချင်းဆိုင် လိုက်တာတောင် ဇဝေဇ၀ါ မျက်နာလေးနဲ့ ပြုံးပြနေတာ။ အဲ့ဒီတော့မှ မျက်မှန် ချွတ်ပြလိုက်ရင်း . နင့်ကို ငါ ... ဟား . ငါ အရက် ၀ယ်သောက်ရင် ဘယ်လောက်ခံမလဲ ဆိုပီး စိတ်ထဲ တွက်ကြည့် နေမိ သေးတယ် . (စိတ်ထဲမှာ အော်မိတာ) . ငါအလုပ်များနေလို့ လာမတွေ့တာ ပါဟာ ဆိုပီး ချော့နေရတယ်။ သူ့အလုပ်သမ လေးတွေတော့ မျက်လုံးလေးတွေ ပြူးပီး ၀ိုင်းကြည့် နေကြတာပေါ့။ ဘာတွေများ ဖြစ်ကုန်တာလဲ ဆို တဲ့ အကြည့်တွေန့။ဲ ဒီလောက်ဆို ခင်ဗျားတို့ ကျနော်နဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ ရင်းနှီးမှု အတိုင်းအတာကို သဘောပေါက် လောက်ပီ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ စိတ်လိုလက်ရ ရှိတဲ့ အခါမှာ နူးနူးညံ့ညံ့ လေသံနဲ့ "မေလေး" လို့ ကျနော် ခေါ်လေ့ရှိပီး၊ တခါတလေ တခြား သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်သလို "ဗျိုင်း" လို့ ခေါ်တတ်တဲ့ ကောင်မလေး ဆိုတာ သူပါပဲ။ လူတွေတော့ ဘယ်လိုထင်မယ် မသိဘူး။ ကျနော့်လက်ကို မလွှတ်တော့ဘူး အသေကိုင်ထားတာ။ သူ့အလုပ်စားပွဲဆီ ခေါ်သွား တာတောင် ခါးကို အတင်း ဘေးတိုက် ဖက်ထားရင်း ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ မျက်နာ အမူအရာက အစ ချက်ချင်း ပြောင်းသွားပီး ချာတိတ်မလေး တစ်ယောက်လို ... ခုနစ်သိန်းဆို .. . ဟီး။ တော်တော်လေး ကြာသွားတော့မှ လူရှင်းသွားတယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော့်ကို ဟိုဟာ ဒီဟာတွေ မေးသမျှ ရှင်းပြနေတဲ့ အရောင်း စာရေးမ လေးကို မန်နေဂျာရှိလား စကားပြောချင်လို့ ဆိုပီး ခပ်တည်တည် မေးလိုက်တော့. ဆိုပီး ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို လက်သီးနဲ့ တဖုန်းဖုန်း ပိတ်ထိုးနေတာကို အတင်း ဖမ်းချုပ်ထားရင်း.အမှန်တိုင်း ပြောရရင် ကျနော်စိတ် လေလွှင့်နေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိသေးဘူး။ လောလောဆယ် ပျင်းရိနေတာကို ဖြေဖျောက် ချင်နေတာ သက်သက်ပဲ။ အိပ်တယ် စားတယ် စာဖတ်တယ် လောလောဆယ် ဒါပဲ။ နေ့လည် ၂ချက်တီး လောက် ဆိုတော့ အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ မရှိဘူး ဆိုတာ သိထားလေတော့ကာ သူ့အလုပ် တိုက်ကိုပဲ လိုကသ်ွားတာပေါ့။ ရောက်သွားတော့ အပြင်ကနေ အကဲခတ် လိုက်တယ် ရှိမရှိပေါ့။ အရောင်းပြခန်းလို လုပ်ထားတာ ဆိုတော့ကာ သောက်ကျိုးနဲ များလိုက်တဲ့ မိန်းမတွေဗျာ။ ဒါနဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ အထဲဝင်သွားပီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လျှောက်လုပ် နေလိုက်တယ်။ ကျနော့် သူငယ်ချင်း ကိုတော့ မြင်ပါ့ဗျာ။ အသံလေးစာစာ စာစာနဲ့ သူ့ဖောက်သယ်တွေ ကို အမျိုးမျိုး လိမ်လည်ပီး သူ့ပစ္စည်းတွေ ရောင်းဖြို့ ကိုးစား(မှားလို့ ..... ဂိန်! ... အကို. “ဘာများ အလိရှုိပါသလဲ အကို .. ဘယ်လောက်လဲဟင်? . ... မုန်းလိုက်တာ..
.. ၀လား မ၀လားတော့ မသိဘူး စားပွဲပေါ်မှာ ဘီယာခွက် အလွှတ်တွေ စီထားတာ အခွက် ၃၀ကျော် လောက် ရှိမယ်ဗျ။ ကျနော် တိ့ရဲု့ သောက်ကျင့်က သောက်ပီးသား ခွက် အလွတ် တွေကို .. အမေ” အမေ နှစ်ခုလုံး စီးမယ် သမီး လို့ ပြန်နောက်ရင်း ကျနော် ရယ်နေမိတယ်။ အမေဆိုတာ ကျနော်တို့ အချင်းချင်း နောက်နေကြ စကားပါ။ သူတို့နဲ့ စကားပြောတိုင်း ကျနော်က နတ်ဝင်သယ် လေသံနဲ့ သမီးလေးတို့ရေ အမေဟေ့ အမေ ဆိုပီး ပေါက်ကရ လျှောက်ပြောတတ်တာကိုး။ ကရ၀ိတ်စီးတယ်၊ ကျားစီးတယ်ဆိုတာ . ငါ့ကောင်! .. ဟီးဟီး . တော်စို့လား .. လို့ ကျနော် သူ့ကို သတိပေးလိုက်တော့ သူက နင်သောက်လို့ဝပီလား ဟ? တဲ့။ ... မြန်မာဘီယာ(ကရ၀ိတ်ပုံ) နဲ့ တိုင်းဂါး ဘီယာတို့ ကို ဆိုလိုတာ။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ အင်မတန် ချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြန်ဆုံရလို့ အူမြူးနေတဲ့ အဲ့ဒီဟာလေး ကျနော့် ဆိုင်ကယ်နောက်က ပါလာတယ် ဆိုပါတော့။ အနောက်ကနေ ကျနော့်ခါးကို အသေ ဖက်လိုက်၊ ကျောပြင်ကို တဖုန်းဖုန်း ထုလိုက်၊ ခါးကို ကလိထိုးလိုက်နဲ့ ကျနော့ နားရွက်နားကို ကပ်ပီး ပေါက်ကရတွေ အော်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတော့ ငယ်မူ ပြန်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက်ကို တင်ဆောင် လာတဲ့ ဆိုင်ကယ်လေးက ဟိုယိမ်းဒီယိမ်းနဲ့ မြွေလိမ် မြွေကောက်ကို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဘ၀မှာ အင်မတန် ချစ်တဲ့သူ ၂ယောက် ပြန်ဆုံရတာ ဘယ်လောက် ပျော်စရာ ကောင်းတယ် ဆိုတာ ကြုံဖူးတဲ့ လူတွေပဲ သိလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့၂ယောက် ဘီယာဆိုင် ကောင်းကောင်းမှာ ထိုင်မယ်။ အကင်တွေ တနင့်တပိုးစား၊ ဘီယာခွက်တွေ တစ်ခွက်ပီး တစ်ခွက် စားပွဲပေါ် ပြည့်သွားတဲ့ အထိသောက်မယ်၊ သောက်တင်းတွေ ချကြမယ်။ မူးလာတော့မှ ငယ်ငယ်ကလို လေတိုက် ခံတယ်ကွာ ဆိုပီး ကျနော့်ကို အနောက်ကနေ ခပ်တင်းတင်း ဖက်ခိုင်းထားရင်း ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပတ်မောင်းမယ်။ ကျနော်တို့တတွေ လောလောဆယ် ၁၀နှစ်လောက် ပြန်လည် နုပျိုလိုက် ကြမယ်လေ။ အဲ့ဒီညက ဘီယာဆိုင်ထိုင်ရင်း မိုးတော်တော်ချုပ်စ ပြုလာတဲ့ အချိန် ရောက်လာတော့ ..... ဆိုပီး ရယ်လိုက် မိတယ်။ ခုနက စတိုင်နဲ့ မတူတော့ ဘူးလေ။ ခုနက ဆံထုံး ကစ်ကစ်မှာ ဆံထိုးတွေ ဘာတွေ စိုက်၊ အပေါ်အောက် ကျောက်စိမ်းရောင် ၀မ်းဆက်နဲ့ ခန့်ခန့်ကြီး ကနေ. ကျားစီး မှာလား ကြိုက်တာကို ရွေးတော့ ...ခုန်ဆွဆွ ဖြစ်သွားတယ်။ ကျနော့်ကို အအေး တစ်ဗူး တိုကပ်ီး သူ့စားပွဲမယ် ငုတ်တုတ် ထိုင်ခိုင်း ထားတယ်။ သူ့ဖာသာ အလုပ်တွေ များလိုက် ကျနော့်ကို တတွတ်တွတ် လှမ်း စကားပြောလိုက် ဗျာကို များနေတာပဲ။ နေနည်းနည်း စောင်းသွားတော့မှ သူ့ အလုပ်သမ လေးတွေကို မှာစရာရှိတာ မှာပီး ကိုင်း! ခဏစောင့် အ၀တ်လဲ လိုက်ဦးမယ် ဆိုပီး အနောက်ခန်းထဲ ၀င်သွားလိုက်တယ်။ ပြန်ထွက် လာတော့ သူ့ကို လှမ်းကြည့်ပီး ... အဟီး . ခု ဆံပင်ရှည်တွေကို မြင်းမြီးပုံစံ နောက်စေ့မှာ စုချည်၊ အပေါ်က တီရှပ် ကြပ်ကြပ် အပြာရောင်၊ အောက်က စကပ် ဒူးဆစ်လောက်နဲ့ ကလေးမလေး စတိုင် ဖြစ်သွားတာကိုး။ လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတာ ကလည်း ပိုက်ဆံအိတ် လက်ဝါးလောက် ကလေး။ ကျောင်းသူလေး စတိုင်ပေါ့။ နှုတ်ခမ်းကို ခပ်ထော်ထော်လေး လုပ်(အထဲဝင်ပီး နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးလာတာ သိသာတယ်) ရင်း လှမ်းမေး လာတယ်။ “ဘာဟီးဟီးလဲ? ကရ၀ိတ် စီးမှာလား...
. အဟိ ..” “အို! ကလေး အမေကြီးကိုများ . အမှန်တိုင်း ပြောရရင်တော့. အဲ့လိုမျိုးဗျ။ ငယ်ထဲက အကျင့်တွေ ဆိုပါတော့လေ။ လောလောဆယ်တော့ ၂ယောက်လုံးကွဲနေပီ . ဆိုပီး ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ ကြိုးစားတော့ . အမေ! ... မောင်းမောင်း . ဖိုးသက်နဲ့ဗျိုင်း၂ယောက်အတွက် ဘီယာလေးအခွက်၃၀ဆိုတာ နာသာဂီရိဆင်ပြောင်ကြီးကို စပါကလင်တိုက်တဲ့ အဆင့်လောက်ရှိတာ အဟစ်ဟစ်” “ဒါဆို လူတွေက ဘာလို့ ငါတို့ဝိုင်းကိုပဲ လှမ်းလှမ်းကြည့်နေကြတာတုံးဟ?” “ဘာဖြစ်မှာတုံး.ဟီးဟိ။ စကားတွေလည်း ဟောင်ဖွာ ဟောင်ဖွာ ပြောရလွန်းလို့ မေးရိုးတွေ တောင်ညောင်းလာသလိုပဲ။ “ဟရောင်. နင့်ကို ဘီယာနဲ့ မြည်းနေကြတာ ဟီဟိ နဂိုက ချောချောလေးပါ ဆိုနေ ခုဘီယာ တန်ခိုးနဲ့ မျက်လုံးတွေက အရောင်တွေလက်၊ ပါးတွေက ပန်းသွေးရောင်တွေ တောက်. အသိုင်းအ၀ိုင်း ညီအကို မောင်နှမ ကလည်း မရှိလေတော့ ကာ . လာထား နောက်ထပ် တစ်ခွက်စီ.... အမေ့သမီး သူဌေးမလေး ရှင်းမယ် . တော်ရုံ စိတ်ဓာတ် ခိုင်မာမှု မျိုးနဲ့ ဘ၀ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ မလွယ်လောက်ဘူးဗျ။ သူ့ဘ၀မှာ ခု ကျနော်နဲ့ ပျော်နေသလို မပျော်ရ ရှာတာ ဘယ်လောက် ကြာပီလဲ မသိဘူး။ အဲ့လိုတွေးမိပီး ကျနော့် စိတ်ထဲ ဂရုဏာသက်မိ သွားလို့ သူ့ကို ငေးကြည့် နေမိတယ်။ ပိုက်ဆံရှင်းပီး ဘီယာဝိုင်းက ထတော့ သူက နည်းနည်း ယိုင်ချင်နေတယ်။ အသာလေး မသိမသာ တွဲပီး အပြင်ကို ခေါ်ထုတ်လာတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကို သူ မောင်းမယ် ဆိုပီး ပြဿနာ စ ရှာတယ်။ နင် မူးနေတယ် ဟ ဆိုပီး ရှိခိုးဦးတင် တောင်းပန် တာလဲ မရဘူး... ငသက်” “ဂျာ!” “အေဘေး. ဆိုပီး ကျသင့်ငွေကို လုပီး ရှင်းနေတာကို ရယ်ပီး ထိုင်ကြည့် နေမိတယ်။ အားကိုးအားထား မိဘတွေလည်း မရှိရှာတော့တဲ့ သူငယ်ချင်း မလေးဗျာ ....... ကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ယောက်ျားကလည်း သောက်ကျင့် မကောင်းတော့ .... ရှက်စရာကြီး ဒါဆို ငါက အတော် ဆွဲဆောင်မှု ရှိသေးတာပေါ့ နော် ခစ်ခစ်” “အင်း .လာထား .....အသိမ်းမခံပဲ စားပွဲမှာ ဒီတိုင်းစီထား တတ်တယ်။ ဒါမှ ငါတို့ သောက်ထားတာ ဘယ်နှစ်ခွက် အနည်း အများ လစ်မစ် ချိန်တာပေါ့လေ။ နို့မို့ရင် ဘယ်လောက် သောက်လို့ သောက်မိမှန်းမှ မသိတော့ တာကိုး။ ဘီယာကို ခရားနဲ့လည်း မမှာဘူး။ တစ်ခွက်ချင်းမှာပီး ခွက်တိုက်၊ သူလည်းကုန် ကိုယလ်ည်းကုန် မှ. သူတို့ နင့်ကို အရက် ပရိုမိုးရှင်း လိုက်လုပ်နေတဲ့ ကလေးမလေးလို့ ထင်နေပုံ ရတယ် ဟ” “ဘာပြောတယ်!!!” “:D :D :D” ၂ကောင်သား မူးမူးနဲ့ အဲ့လို ပေါက်ကရတွေ လျှောက်ပြောရင်း တဟီးဟီး အူမြူးနေရာက ကျနော်က . ကွဲ.....သမီးရှင်းမယ်. ငါတိ့၂ုကောင် အတော် ရုပ်ပျက် နေပီ ထင်တယ် ဆိုင်ထဲမှာ ထိုင်နေတဲ့ လူတွေ အကုန်လုံး ငါတို့ဝိုင်းကိုပဲ ရှိုးနေကြတယ်ဟ” “ရုပ်ပျက်စရာလား.. ဒင်းက . သောင်းကျန်း ပစ်ရမလား နင် ငါ့အကြောင်း သိတယ်နော် ဘာညာနဲ့ အော် လာလို့ ပါးစပ်ကို လက်ဝါးနဲ့ အမြန်လှမ်းပိတ် လိုက်ပီး အေးအေး ....... မူးမူးနဲ့ ...... ပြန်မယ်ကွာ . နင့်ကို ကြည့်နေ ကြတာလေ.
ခဏလေးနော် ဒီဆိုင် ရှေ့က နေတော့ ငါပဲမောင်းမယ် ဆိုပီး အတင်း ခေါ်ထုတ် လာခဲ့ရတယ်။ အနောက်ကနေ ကျနော့်ကျောကို ဖက်ထားပီး ဆိုင်ကယ်နောက်က လိုက်လာရင်း မောင်းရတော့မလား .. ဒါမှမဟုတ် အကုန် ချွတ်ပစ်မှပဲ တက်ခွပီး မောင်းလို့ရမှာလေ . ရောက်ပီလား ... ကစ်ပီး နိုးမှ ရတဲ့ ဟာမျိုး ဆိုတော့ သူဘာလုပ်လို့ ရမှာတုံး။ စကပ်ကို ဖင်ပေါ် အောင်လှန်တင်.. ဟား။ မရမက အတင်း တက်ခွ လိုက်တော့ ခွလို့တော့ ရသွားတယ်။ စကပ်ခံနေတော့ ခြေထောက်က လေထဲမယ် တန်းလန်း... ဟား . မောင်းမယ် မောင်းမယ် ဆိုပီး ကျနော့်နားရွက် နှစ်ဖက်စလုံးကို လက်ဖ၀ါးတွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင်ပီး ဆွဲလိုဆွဲ၊ ခါးကို အတင်းဖက်ပီး ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ်တေ လုပ်နဲ့ သောင်းကျန်းရင်း ပါလာတာပေါ့။ သစ်ပင် အုပ်အုပ်တွေ မိုးနေတဲ့ လူရှင်းတဲ့ လမ်းကြားလေး တစ်ခုထဲ ရောက်သွားတော့မှ ဆိုင်ကယ် ရပ်ပေး လိုက်တယ်။ ဒေါက်ထောက်ပီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်း ကဲ! ဒီလောက် တောင် မောင်းချင်နေတာ မောင်းစမ်းကွာ ဆိုပီး လွှတ်ထား ပေးလိုက်တယ်။ စီးကရက်ဖွာရင်း ထိုင်ကို ကြည့်နေတာ ဒင်းဘာလုပ်မလဲ ဆိုပီး။ ဆိုင်ကယ်က ယောက်ျားစီးဗျ။ သူဝတ်ထားတဲ့ စကပ်နဲ့ ဘယ်လို တက်ခွပီး မောင်းမှာတုံး။ သူ့ဖာသူ အတင်းတက်ခွဖို့ လုပ်နေတာကို ထိုင်ကြည့်ပီး ရယ်နေလိုက်တယ်။ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဟာဗျာ။ လူမြင်ကွင်းမှာဆို ရုပ်ပျက်တော့မှာမို့ တမင်အမှောင်ထဲကို ခေါ်လာတာ။ ပီးတော့ ကျနော့်ဆိုင်ကယ်က အစုတ်ကြီး. အဲ့ဒါကို စိတ်မလျှော့ဘူး နင်လာခဲ့ အနောက်ကနေ တက်ခွ၊ နင့် ခြေထောက်က စက်နှိုး၊ ဂီယာ ထိုးပေး၊ ငါက လက်ကိုင် ကိုင်ပီး မောင်းမယ်တဲ့။ တကယ့် ဟာဗျာ။ ရတယ်လေ ဆိုပီး သူ့အနောက်ကနေ တက်ခွ၊ ကစ်တံကို နင်းပီး စက်နှိုး ပေးလိုက်တယ်။ ဂီယာ ထည့်လိုက်ပီ ထွက်တော့ ဆိုတာနဲ့ ကလပ်ခ်ျကို ဆောင့်လွှတ် လီဗာကို ဖြဲပီး ဆောင့်ထွက်တယ်။ ဂီယာတောင် ထပ် မချိန်း လိုက်ရဘူး အနောက်ကနေ သူ့ကို သိုင်းဖက်ထားရင်းက လက်ကိုင်ကို ဖမ်းကိုင်ပီး ခြံဝင်း တစ်ခုထဲကို ချိုးဝင်ပေးလိုက်တယ်။ တစ်ထပ် တိုက်ပုလေး အရှေ့ကို တန်း ရောက်သွားရော။ အဲ့ဒီတော့မှ ဟမ်! ဒါငါ့အိမ်ပါလား တဲ့ဟီးဟီး။ ညာတာ ပါတေးနဲ့ သူ့အိမ်ရှေ့ထိ ခေါ်လာ တာတောင် မူးနေတဲ့ ဒင်းက သတိမထား မိဘူးလေ။ ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ပွစိပွစိနဲ့ ရစ်နေသေးတဲ့ သူ့ကို ပွေ့ချ၊ အိမ်ထဲ တွဲခေါ်၊ ဟဲ့! ဒီသူငယ်ချင်း ၂ယောက် ဘာတွေ ဖြစ်လာ ကြတာလဲ လို့ အလန့်တကြား လှမ်းမေးလာတဲ့ ကျနော့်ကို မှတ်မိ နေသေးတဲ့ ..
. ငါ့ဆီလာခဲ့ ... ဟုတ်ပါပီ! ......... မနက်ခင်းထပီး .........။. လို့ . မနက်စာ တူတူစားပီး ....... တဲ့။ ....... ဂတိ ပေးရင်း သူ့ကို သိပ်ခဲ့လိုက်တယ်။ အပြင်ထွက်လာပီး မတွေ့တာကြာတဲ့ သူ့ ကြီးဒေါ်ကြီးနဲ့ အလာပ သလာပ လေးတွေ ထိုင်ပြော၊ အိပ်ပျော် နေရှာတဲ့ သူ့သမီးလေးကို ၀င်ကြည့်ပီး ပြန်လာခဲ့ရော ဆိုပါတော့ဗျာ။ နောက်နေ့ မိုးလင်း မနက်ခင်း ၈နာရီလောက် ကျနော် သူ့ဆီ ရောက်သွားတယ်။ မနေ့ညကနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တော့ သလိုပဲဗျ။ ရေမိုးချိုး ဖီးလိမ်း ပြင်ဆင် ထားလိုက်တာ ကျော့လို့ မော့လို့ ဂုဏ်သရေရှိ အမျိုးသမီးကောင်း ချောချောလှလှလေး ရုပ်နဲ့ ဟားဟား။ ငါမနေ့ညက တော်တော် ကွဲသွားတယ် ထင်တာပဲ တဲ့။ သူ ဘယ်လို သောင်းကျန်းတာတွေ ကျနော် ဟာသ လုပ်ပီး ပြန်ပြောတော့ တခွိခွိနဲ့ သဘောကျနေ ပြန်ရော။ တောက်တောက် . မငှားပေါင် တဲ့။ ဒါတွေသာ ငှားပေးလိုက်ရင် နင် ပေါ်လာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး ... အလုပ်တိုက်မှာ ငါ့ ကား ထားခဲ့မိတာ မနက် အလုပ်သွားလို့ မရဖြစ်မယ် .... ဒီတော့ ဒီလိုလုပ် ..။.. ငါမပြန်မချင်းပေါ့လို့ ပြောလိုက်မိတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော့် သံယောဇဉ် အမျှင်တန်းတဲ့ ဇာတ်တစ်ခုဟာ စ လာ ပြန်ပါရောလား ဆရာတို့ရယ်။ ။....သူ့ကြီး ဒေါ်ကြီးကို နှုတ်ဆက်ရင်း အဲ့ဒီ အရက်သမား ကို သူ့အိပ်ယာ ထဲအထိ တွဲပ့လိုက် ရတယ် ပေါ့ဗျာ။ လူကသာ မျက်လုံး ကောင်းကောင်း မဖွင့်နိုင်တော့ အောင် မူးနေတာ ကျနော့်ကို သတိတရ လှမ်းပြော လာသေးတယ်..။ ........ နက်ဖန် မနက် စောစော .......... ငါနဲ့ မနက်စာ တူတူစား၊ အလုပ်ကိုလိုက်ပို့၊ ပီးမှနင်သွားချင်တဲ့ နေရာကိုသွား၊ နေ့ခင်းဖက် အားပီဆို ဒီကိုပြန်လာ ဒေါ်ကြီးနဲ့ငါ့သမီးလေးပဲ အိမ်မှာရှိတာ။ ဒေါ်ကြီးကို ကလေး ကူထိန်းပေးရင်း ကြိုက်တဲ့ စာအုပ်ဖတ်ပေတော့။ နေ့လည်စာပါ ငါ့အိမ်မှာစား။ ညနေစောင်းရင် အလုပ်မှာ ငါ့ကို လာကြို ချေ။ နင်မပြန်မချင်း ဒီလိုပဲနေရမယ်. . တောက်တောက် . လို့ အမိန့်တော် ချမှတ်လိုက်တယ်။ ဟိုးငယ်ငယ် ကလည်း ဒီလိုပဲ ၀င်ထွက် သွားလာ နေခဲ့တာ ဆိုတော့ ကျနော်လည်း အေးပါ. နဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်စ သူ့သမီးလေး ကိုလည်း တွေ့ပါ့။ ချစ်စရာလေးဗျာ။ အမေတူလေး ချောလိုက်တာ။ ဖြူဥဥလေး ကျနော်တော့ မြင်မြင်ချင်းကို ချစ်လွန်းလို့ လက်ထဲက မချတော့ဘူး အတင်းပွေ့ ထားနေမိတယ်။ မနက်စာ သူ့အိမ်မှာ မနက်စာ စားသောက် ကြပီးတော့ သူ့အလုပ်ကို လိုက်ပို့ပေးဖို့ ပြင်တယ်။ ဧည့်ခန်းထဲက စာအုပ်တွေကို လက်ညှိုးထိုးပြပီး ငါ့ကို စာအုပ်တွေ ငှားလိုက်ဦးဟ လိ့ခွုင့်တောင်းတော့ ...... ဒီကိုလာ..................... ငါ့အလုပ်ကို လိုက်ပို့ဦး ..... ကြားသလား ..
.. ကိုကြပ် ပြောသလို ဆွဲလို့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဘယ်မှာတုံးဗျ? ဒီလူကြီးတွေ နဲ့တော့ ခက်တယ်နော့်။ ထစ်ကနဲရှိ ဆန်းဆန်း ပြားပြားတွေ သိပ်တွေးတာပဲ .. ဟီ ... . ဒါပေမယ့် ဟိုဘူဒါးကြီးတွေ ပြောသလို တွေ့တာနဲ့ ကောက်ဆွဲ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောချင်တာ။ မှန်ရာပြော သစ္စာဗျာ။ ကျနော် အဲ့ဒီ အချိန်ထိ လိင်နဲ့ပတ်သက်ပီး သူ့အပေါ် ဖောက်လွှဲ ဖောက်ပြန်စိတ်ကို .... ငါတို့ အဟုတ် မှတ်ပီး ဖတ်လာတာ သေရောလို့ . ကိုဇော်ဦးကြီး ပြောသလို အဲ့လို သူငယ်ချင်းမျိုး မရခဲ့တာ မနာလိုတယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုလား? .... အဟီး။ ..... ဟဲ . ညီအကိုတို့? . ဘာမှလည်း မပါဘူး . ဟဲ။ ဟမ်! .. တွေးနေကြပီ . ဘယ်လိုလဲ .. ဒီလိုန့ပဲ လေလွှင့်သလိုလို ဖြစ်ချင်နေတဲ့ ကျနော် တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့အိမ်ကို ၀င်ထွက်ရင်း မာလီ လိုလို၊ နာနီလိုလိုတွေ ဖြစ်လာတယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ နာနီ လုပ်တာ ကတော့ သူ့သမီးလေးကို ထိန်းတယ်ပေါ့လေ။ အင်မတန် ရွှံတတ်တဲ့ ကျနော် ဒီချစ်စရာ သမီးလေးကို ထိန်းရင်းနဲ့ အီးတည်၊သေးတည်တွေက အစ ကောင်းကောင်း တတ်လာတယ်။ ကလေးကို အစားအသောက် ချော့ကျွေး၊ တူတူဆော့နဲ့ တော်တော် ပျော်တတ်လာတယ် ပေါ့။ ကလေး တရေးတမော အိပ်နေတဲ့အချိန်၊ ဒါမှမဟုတ် ဒေါ်ကြီး တစ်ယောက် ချက်ပြုတ် လျှော်ဖွတ် ပီးစီးလို့ ကလေး ကြည့်ပေး နိုင်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ကြတော့ ခြံထဲက မြက်တွေ ဓားရှည် တစ်လက်နဲ့ ရမ်း၊ ပစ်ထားတာ ကြာလို့ ပေါက်ချင်သလိုတွေ ပေါက်နေတဲ့ သစ်ပင် ပန်းပင်တွေ ကတ်ကြေးနဲ့တိ၊ မြင်မကောင်း ဖြစ်နေတဲ့ ဟာတွေ ခုတ်ပစ် အစရှိ သဖြင့်ပေါ့လေ။ သူတို့ တစ်ထပ်တိုက် ကလေးထဲမှာ အိမ်မှုကိစ္စ နိုင်နင်းတဲ့ ကြီးဒေါ်ကြီးကြောင့် အမြဲ သန့်ရှင်း သပ်ရပ် နေပေမယ့် အဲ့လို ကိစ္စတွေကြတော့ မိန်းမသားတွေချည်းပဲ ရှိတော့ ဘယ်လုပ်နိုင်မှာတုံးဗျ။ တစ်လ နီးပါးကြာလာတော့ တစ်ထပ် တိုက်ပုလေး ရဲ့ ခေါင်မိုး ပေါ်က သစ်ရွက်ကြွေတွေ မရှိတော့ဘူး။ သင်္ဘောဆေး အနီရင့်ရင့် သုတ်ပီးသား ဖြစ်နေပီ။ အိမ်ဘေး နံရံတွေလည်း ရေဆေး ကောင်းကောင်းနဲ့ ၂ထပ် ၃ထပ် သုတ်ပစ်ထားတော့ အိမ်အသစ် ကလေး တစ်လုံးလို လှတ ပတ လေးဖြစ်သွားပီ။ အိမ် အတွင်းပိုင်းက လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်သမျှ ၀ါယာကြိုးတွေ၊ ဖန်ချောင်းတွေ၊ မီးခလုတ်ခုံတွေ၊ မိန်းခလုတ်တွေ အားလုံးလည်း အသစ်ချပ်ချွတ် လဲပြုပီးသား ဖြစ်နေပီ။ နေချင့်စဖွယ် ခြံဝင်းလေးထဲက တစ်ထပ် တိုက်ပုလေး ဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။ အဲ့ဒါတွေ အကုန် ကျနော် လျှောက်လုပ်နေတာ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်လေနေတာ ပြေပျောက်ချင်လ့။ို ပီးတော့ ကိုယ့်မိသားစုလို ဖြစ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ကိုယ်အနား ရှိနေတုံးလေး လုပ်ပေးနိုင်တာ လုပ်ပေးခဲ့တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ စီးကရက်လေး ခဲရင်း အဲ့လို အိမ်အလုပ်လေးတွေ တနေကုန် လျှောက်လုပ်လိုက၊် နေ့ခင်းဖက် နေတအားပြင်းတဲ့ အချိန် ခဏနားရင်း ဧည့်ခန်းထဲက စာအုပ်တွေနဲ့ ဇိမ်ယူလိုက်၊ ကလေး ထိန်းလိုက်နဲ့ ကျနော့်ဘ၀မှာ တော်တော် တည်ငြိမ် အေးချမ်းလွန်းတဲ့ ကာလတစ်ခု လိ့ေုတာင် ပြောရမယ် ထင်တယ်။ ကဲ! ... ဖတ်ရတာ ပျင်းနေကြပီလား.. ဒါဖြင့် ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့ ...... .... ထင်တယ်။ ဖြစ်တော့ ဖြစ်တယ်ဗျ . ဟိ။ ....
. အေးလေ ... ခင်ဗျားတို့ကော . ငါတို့ ဒီလောက် မူးချင်ယောင်ဆောင်ပီး အကုန် အသင့် လုပ်ထား ပေးတာတောင် မလုပ်ရဲဘူး ...... အမ်! . ဟီ .. ယောက်ျားစစ်ရင် ...မရှိခဲ့ပါဘူး။ တကယ်ပြောတာ ဘုရားစူး။ ဟိုကမ္ဘာကျော် ၀တ္ထုထဲက သစ္စာတရားကို လိုက်ရှာရာက ဂင်္ဂါမြစ်ကို ထိုင်ကြည့်ရင်း ငြိမ်းချမ်းသွားတယ် ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲ ကျနော့် ဘ၀ အတော်လေး ငြိမ်းချမ်းနေတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့လဲ . တစ်ချက်လောက် သေချာ လေ့လာ လိုက်သေးတယ်။ ဒါက ဘယ်သ့ဖူင် ကာလာက ဘာအရောင်ပေါ့။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ သောက်ရှက်ကို မရှိတဲ့ ဟာမတွေလို့ တွေးမိလာတော့ မူးမူးနဲ့ အဲ့ဒီ ဖင်ပြောင်တွေ ကို မတ်တပ်ရပ်လျှက် ကနေ ခြေဖ၀ါးနဲ့ တဖန်းဖန်း မြည်အောင် ဆောင့်ကန် ပစ်လိုက်တယ်။ . ဘ၀မှာ အဲ့လို သူငယ်ချင်းမမျိုး မရှိခဲ့ဖူး ဘူးလား။ ရှိခဲ့မှာပါ။ အသေချစ်တယ်ဗျာ။ ရည်းစားတွေ ဘာတွေ ထက် တောင် ချစ်သေး။ လက်ချင်းချိတ်၊ ခါးဖက်ပီး လျှောက်သွားချင်သွား၊ မကျေနပ်ရင် ကလော် ဆဲလိုက်ကြ၊ ရည်းစားတွေ၊ ကိုယ့် မိဘတွေကို မပြောတာတောင် အကုန် ဖွင့်ပြောရဲတဲ့ ဟာမျိုး . အသံပေးရင်း မှောက်အိပ် နေရာက ပက်လက်လှန်တွေ ဘာတွေ ပြောင်းအိပ် လာတော့ . တကယ်ပြောတာ။ .. အမေ့! . ဆိုပီး တစ်ယောက် ကတော့ ထထိုင် လာတယ်။ ခြေကျင်းဝတ် ရောက်နေတဲ့ ထမီလေးကို ပြန်ဆွဲယူပီး ကွေးကွေးလေး ထမီခြုံရင်း ပြန်အိပ်သွားတယ်။ ကျန်တဲ့ ၂ကောင် ကတော့ ....ဒီကောင် ........... ဖင် . ၀ါးဟားဟား! အဲ့လိုတွေဗျ။ ..... သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ထပ်ကန်လို့ မဖြစ်တော့ဘူးဗျာ။ ..... ဟီး။ ဖင်ပြောင်ကြီး ၃ခုဗျာ။ ပထမတော့ သတိမထားမိပါဘူး။ ရေဆာနေတော့ ရေလိုက်ရှာပီး အားရပါးရ သောက်လိုက် သေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ရေသောက်လိုက်တော့ အမူး ဒီဂရီက ပြန်ဆောင့် တက်လာတယ်။ ယိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ ပြန်လာတော့ ... လိင်ကိစ္စ။ တွေးတောင် .. အင်း ...... ဆိုပီး .. ဒုက္ခ! .... ဟိုဖက်ကို တက်မြည်း လိုက်၊ ဒီဖက်ကို တက်အုပ်လိုက် လုပ်ပီပေါ့ ရှင်းနေတာပဲ .... လေလံ တင်နေကြတယ် .. ဟီး။ .... ဒုက္ခ! .. ဟိ ....... လို့ ရေရွတ်ရင်း သူတို့ ဘေးမှာ ခွေခွေလေး ၀င်အိပ် လိုက်ရတာပေါ့။ မနက်မိုးလင်းတော့ ရှက်နေကြမယ် ထင်သလား? ဝေးသေး ဆရာရေ့။ သူတို့ လျှောက်ပြောနေတဲ့ စကားတွေ ကြောင့် ရှက်လွန်းလို့ နားပိတ် ထားရတာက ကျနော်ပါဗျာ။ . ဂျီပုန်းကြီးလား .. အဲ .. ဟီး။ . ရှိခဲ့ကြမှာပါ ဟုတ်တယ် မလား။ ဒီကောင်မ ၃ကောင်ဆိုရင် ကျနော်နဲ့ တစ်အိပ်ယာ ထဲတောင် တူတူ အိပ်တာဗျ။ ကျနော် သူတို့ အပေါ် မယ် ဘယ့်နှယ့်မှ မဘယ့်နှယ်ဘူးဆိုတာ သူတို့ ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့။ သူတို့၃ကောင်ကို တခါတလေ ကျနော် ၃ရောင်ခြယ် လို့ ခေါ်တယ်ဗျ။ ကျောင်းသား ဘ၀က ခရီး တူတူ ထွက်ကြရင်း တနေရာ ရောက်သွားတော့ တည်းခိုတဲ့ နေရာမှာ ၄ယောက်သား အရက်တူတူ သောက်ကြရော၊ မူးမူးနဲ့အကုန် အိပ်ပျော် သွားကြတယ် ဆိုပါတော့။ ရင်ပူလွန်းလို့ ည သန်းခေါင်ကြီး လန့်နိုးလာတော့ အမယ် သူတို့ ၃ကောင်စလုံး မှောက်လျှက် ကလေးတွေ အိပ်ပျော် နေကြတာ ဆရာရေ့။ ထမီတွေ ဘာတွေ ကျွတ်လို့ . ဒီကောင် ပန်းသေနေတယ်။ . သောက် . ဟီး .. ကောင်မတွေ ... မသိဘူးဟဲ့! . မတွေးမိဘူး။ . ဆိုပီး ဖြစ်သွားတယ်။ လေးပေ မီးချောင်း အလင်းရောင် အောက်မှာဗျာ ဖင်ပြောင်ကြီး ၃ခု အစီအရီလေးတွေ ဖြစ်နေတာ။ ဖင်ညို ဖင်ဖြူ ဖင်ဝါ ၃ခုဗျ။ အရောင်တွေကို လက်လက်ထ နေတာပဲ..
လေး .........။ .ကျနော်လား? အမလေး .. လျှောက်ပြောရင်းနဲ့ လိုရင်း မရောက်တော့ဘူး ဖြစ်နေတယ် ...... မကြားတကြားနဲ့ "မောင်" တွေ ဘာတွေ စွတ်ခေါ်ပစ်တာ ..။...... မှီ၊ ပါးကိုင် နားကိုင်တွေ လုပ်လိုလုပ် . အဟီး။ .. အဟီး။ ။...........။.... နော်။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲက ဟိ၂ုကောင်က အဝေးကြီးမှာဗျ။ ခုလောလောဆယ် ရှိနေတာ သူနဲ့ ကျနော်ပဲ ဆိုတော့ တွေ့တုံးလေး အရူးအမူး ချစ်ကြရတာပေါ့ လေ။ မိသားစုရယ်လို့ မယ်မယ်ရရ မရှိရှာတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေး ခမျာလည်း လောလောဆယ် ကျနော် အနားမှာ ရှိနေတာကို အင်မတန် ပျော်နေ ရှာမှာပဲ။ သူ့ကို အလုပ်က သွားသွားကြိုတိုင်း ကျနော် ရောက်လာပီဆို မျက်နာလေးက ၀င်းကနဲ ဖြစ်သွားတာမျိုး၊ သူ့ခြံလေးကို ကျနော် တတ်နိုင်သလောက် ပြုပြင် ပေးထားတာကို မြင်ရတဲ့ အခါ အင်မတန် ကျေနပ်ပီး ကျနော့်ကို အတင်းဖက် တော်လိုက်တာ ဆိုပီး ပြွတ်ကနဲနမ်း (နဖူးကိုပါ) နဲ့ တော်တော် ကျေနပ်ဟန်လေးပေါ့။ နည်းနည်း ကြာလာတော့ အလုပ်အပြန် လာမကြိုနိုင်ဘူး အပြင်ခဏ သွားနေတယ် လို့ ဖုန်းဆက်လိုက်ရင် ............................... နောက်နေ့မနက် ပြန်တွေ့ရင် မျက်နာက ခပ်ပျက်ပျက် ဖြစ်လာတယ်။ သမီးလေးက အမေ့ကို စိတ်ကောက် နေတာလားဟေ့! လို့ နောက်လိုက်မှ ပြုံးစိစိဖြစ်ပီး ပြေသလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ဒါနဲ့ မရသေးဘူး ဆရာ ညနေဖက်သွားကြိုတဲ့ အခါ သူ့အကြိုက် ဆိုင်က ပဲပလာတာနဲ့ လက်ဖက်ရည် ဖန်ချိုလေးဝယ် သွားလိုက်မှ ငါ့တပည့်ကြီး တော်တယ်ကွာ ဆိုပီး စိတ်ကောက် ပြေတော်မူတယ်။ ဖတ်ရတာ စိတ်မရှည် ကြတော့ဘူး ထင်တယ်။ လာတော့ မယ်နော်။ ဘာညာ သာရကာ ဖြစ်တဲ့ အခန်း။ မတော်တဆ ကနေ တွယ်ငြှိကုန်တဲ့ ဟာလေး။ ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲ။ လက်ညောင်းလာလိ့။ု နက်ဖန်မှ ဆက်ရေးတော့မယ် .. ဆက်ပြောမယ် . အဲ့လိုတွေ သောက်ကျင့် ယုတ်တော့တာ .. ကျနော့် ပုခုံးပေါ် မေးတင် ပီး . ဘာမှကို ပြန်မပြော ရဲ ပါဘူးဗျာ။ ပွစိပွစိနဲ့ ခပ်တိုးတိုး ဆဲရင်း မျက်နာလွှဲ ထားရတာပေါ့။ မမူးနေရင် ကျနော်က တော်တော် အရှက်ကြီးတာ ကလား။ ကျနော် ခုလိုတွေ ပြောပြတော့ အဲ့ဒီ ကောင်မလေး ၃ယောက်ကို အော့ကြောလန် တွေလို့ ထင်ရင်လည်း မှားမယ်ဗျ။ တခြားသူတွေနဲ့ ကြတော့ ရုပ်တည်ကြီးတွေနဲ့ ဆက်ဆံတာ။ ယဉ်ကျေးပျူငှာ ဗိုင်း ကောင်း ကျောက်ဖိ လေးတွေပေါ့။ ကျနော့်ကြမှ သားပြော မယားပြောတွေ ပြောလိုပြော လုပ်ချင်သလိုတွေ လျှောက်လုပ် ကြတာလေ။ လမ်းသွားရင်း ကျနော်နဲ့ ချိတ်တိတ်တိတ် ဖြစ်နေတဲ့ စော်လေးက ကျနော့်ဘေးမှာ ပါလာတဲ့ သူတ့ထိဲုက တစ်ယောက် ယောက်ကို မကျေနပ်သလို ဘုကြည့် ကြည့် လာတယ် ဆိုပါတော့.. အဲ့လိုဟာတွေဗျ။ ဒီလောက်ဆို ကျနော်တို့ ဆက်ဆံရေးကို ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်လောက်ပါပီ။ သူတ့ထိဲုက အ၀ါရောင် ဖင်ပြောင်ကြီး ပိုင်ရှင်က အခု ပြောနေတဲ့ "မေလေး" ဆိပုါတော့လေ။ .....
. နောက်ပိုင်းရက်တွေမှာ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျနော် အိမ်ပြန် မအိပ်ပဲ သူ့အိမ်မှာ အိပ်ဖြစ်တာတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ အဖိတ်နေ့တွေ ဆို သူ့အလုပ်တိုက် ပိတ်တယ်လေ။ နက်ဖန် အလုပ် မသွားရဘူး ဒီည အိမ်မယ် တစ်ခုခု လုပ်စားရအောင် ဘာညာဆိုပီး အဖော်စပ်တဲ့ အခါမျိုးဆို ကျနော်ကလည်း လုပ်လေဟာ ဆိုပီး နေ့ခင်းပိုင်း ကထဲက လိုအပ်တာတွေ အကုန်ကြိုပြင် ထားလိုက်တော့ တာ ကိုးဗျ။ အဲ့ဒီနေ့ ညနေ သူပြန်ရောက်လာပီး ရေမိုးချိုး သနပ်ခါး ရေကြဲလေး ပွတ်၊ ဆံပင် ဖားလျားလေး ချ၊ အိမ်နေရင်း စွပ်ကျယ် အဖြူ ထမီ တစ်ပတ်နွမ်း လေးနဲ့ ခြံထဲဆင်းလာတဲ့ အချိန်ဆို ကျနော်က ဘာဘီကယူးတွေ ဘာတွေ အသင့် အနေအထားနဲ့ မီးဖိုပေါ်မှာ စကင် နေပီ။ အစားအသောက် တင် မကဘူး အလင်းရောင် ပျောက်စ အချိန် အကင်တွေ ကင်နေတာ မန်ကျည်းပင် အောက်မှာ ဆိုတော့ ရောင်စုံ မီးပုံးလေးတွေ ၄-၅လုံးပါ ထွန်းပီး ကိုင်းကျနေတဲ့ မန်ကျည်း ကိုင်းတွေမှာ ချိတ်ထား လိုက်သေးတယ်။ ဒါတင် မကသေးဘူး ဆရာ .... . . ဆိုပီး ကင်ပီးသား အသားတုံး လေးတွေကို ခက်ရင်းနဲ့ထိုး အချဉ်ရည် စိမ်တို့ပီး ကျနော့် ချစ်သူငယ်ချင်းလေးက လာလာ ခွံ့ ကျွေးတာကို အာဝု! ဆိုပီး လှမ်းကိုက် ဆွဲလိုက်နဲ့ ဘယ်လောက် ဇိမ်ကျတဲ့ ညနေခင်းလေး လဲပေါ့။ စကားတွေ ဖောင်ဖွ့ေဲနတဲ့ ကျနော့် သူငယ်ချင်းမ လေးရယ်၊ ကျနော်တို့ ဘေးမှာ တတောက်တောက်နဲ့ ပြေးလွှား ဆော့ကစား နေတဲ့ သမီးလေးရယ်နဲ့ ရောင်စုံမီးပံုး ကလေးတွေ အောက်က ပျော်စရာ ဘာဘီကယူးပါတီ ပေါ့ဗျာ။ နည်းနည်း မိုးချုပ်သွားတဲ့ အခါ ဆော့ကစားရတာ မောသွားတဲ့ သမီးလေးကို ဒေါ်ကြီးလက်ထဲ ထည့်ပီး အိပ်ယာထဲပို့ သိပ်ခိုင်း လိုက်ပီး၊ ဗိုက်တင်းစ ပြုလာတဲ့ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက် အစား စားတာရပ်၊ ကော့တေးလ်က ဗိုက်အင့်တယ်ကွာ ဆိုပီး ၀ီစကီကို ဆော်ဒါ နည်းနည်းရော ရေခဲစိမ်ပီး တစိမ့်စိမြ့် မုံ့ရင်း ရောက်တတ် ရာရာတွေ လျှောက်ပြော ကြတော့ တာပဲ။ . မီးဖိုထဲက ဒေါ်ကြီး လာ လာ ပို့တတ်တဲ့ ... သင်္ဘောသီး လက်သုတ်တ့၊ို ဆတ်သားမွှတွေ ထည့် သုတ်ထားတဲ့ လက်ဖက်သုတ်တို့ ပါသေးတယ်။ မတ်တပ် စားပွဲလေး တစ်လုံး ဘေးမှာ ချထားလိုက်ပီး စားစရာတွေ အစီအရီ ပေါ့ဗျာ။ နည်းနည်း မှောင်စ ပျိုးလာတဲ့ အချိန်လောက်ဆို အားလုံး ရယ်ဒီ ဖြစ်ပီပေါ့။ အဲ့ဒီတော့မှ အိမ်ထဲ ၀င်ပီး ကျနော့် လက်နက်ပုန်းတွေ သွားထုတ် လာတယ်။ စတီး ဇလုံကြီးထဲ အကုန် ပစ်ထည့်ပီး စပ်လိုက်တာပဲ။ ရေခဲတုံး၊ ဖျော်ရည်၊ နာနတ်သီးစိတ် သေးသေး လေးတွေ (သံဗူးထဲက ဟာ)၊ လှီးထားတဲ့ သရက်သီး စိတ်ကလေးတွေ အဲ့လို သစ်သီးဝလံ လေးတွေပစ်ထည့် နောက်ဆုံးမှ ဂျေဒီ ၀ီစကီ တစ်ပိုင်း လောက် ဖောက်ထည့် လိုက်ပီး မွှေနောက် လိုက်ရင် မွှေးတေးတေး ချိုတိုတိုနဲ့ အင်မတန် သောက်ကောင်းတဲ့ ကော့တေးလ် ရလာ တာပေါ့ဗျာ။ ကိုင်း! ဘာလိုသေးလဲဗျာ။ အကင်လေးတွေ ကင်လိုက်၊ ရလာရင် အသင့်စောင့်နေတဲ့ ဟိုမမလေးရှေ့က စားပွဲပေါ် ချပေးလိုက်၊ ဇလုံထဲက အာရွှင်စေတဲ့ ဖျော်ရည် အေးအေးလေးတွေ ခွက်နဲ့ ခပ်ပီး ဂလုလိုက်၊ . ဟ! ..
... ဘာလဲဟ? . ဆိုပီး ပြောလာလို့ . မှတ်မိတယ် .. အိပ်ဖ့သို င့်ပီ . ငါ ..... မိုးအေးအေးနဲ့ နှပ်လိုက်ဦးမယ် .. လာကြည့်တာ ငါလည်း ငိုက် သလိုလို ဖြစ်လာတယ် . ကိုင်း! .............ညဉ့်နက် သွားတော့မှ . နင်စောင်မခြုံပဲ .. လို့ ပြောလာတယ်။ ကျနော်ကလည်း . သိလား .... အေးကွာ ........ ဆိုပီး ကျနော် အိပ်နေကြ အခန်းထဲဝင် စောင်အပါးလေး တစ်ထည်ခြုံရင်း နှပ်နေလိုက်တယ်။ မှေးကနဲဖြစ်စ အပြုမှာ ကျနော့် ကုတင်ပေါ် တင်ပါးလွှဲ လူတစ်ယောက် တက်ထိုင် လိုက်တာ ရိပ်ကနဲ မြင်လိုက်ရလို့ မျက်လုံး ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ သူဖြစ်နေတယ်။ .... ကျနော် အိပ်ပျော်သွားတယ်။ ၁နာရီခွဲလောက် ကြာသွားမယ် ထင်တယ်။ တမှေး ကောင်းကောင်း မှေးလိုက်ရလို့ ကျနော် လန်းလန်း ဆန်းဆန်း ပြန်နိုးလာတယ်။ နိုးနိုးလာချင်း သတိထား မိတာက သူ ကျနော့်ကို ကျောပေးပီး အိပ်နေတာကို အနောက်ကနေ သိုင်းဖက်ထား မိတာဗျ။ ပိုဆိုးတာက သူ့ ဖင်တုံးကြီးကို ကျနော့် ဟာနဲ့ ထောက်ထား မိတာ။ အိပ်ယာက နိုးစဆိုတော့ လိင်စိတ်ကြောင့် မဟုတ်ပဲ ... မနေ့ညက အင်မတန် စိတ်ချမ်းသာတယ် . လို့ ပြုံးစိစိနဲ့ ပြန်ပြောတတ်တယ်။ အဲ့လိ်ု ပိတ်ရက်မျိုး တနေကုန် သူ ချက်ကျွေးသမျှ လေးဝါးလိုက်၊ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ၂ကောင်သား စာအုပ် ကိုယ်စီနဲ့ ငြိမ့်လိုက် တော်တော် ဇိမ်ကျတယ်ဗျ။ ညနေ စောင်းဖက် ရောက်လာရင် သမီးလေးနဲ့ ဒေါ်ကြီးကိုပါ ခေါ်ပီး ဘုရားလေး ဘာလေး သွား၊ ကား လျှောက်မောင်း၊ သွားရည်စာလေး ဘာလေး လျှောက်စား ပေါ့ဗျာ။ ဒီလိုပဲ နေလာ လိုက်တာ ခြေလွန် လက်လွန် ဖြစ်တဲ့နေ့ကို ရောက်လာ ပါလေရော ဆိုပါတော့။ ခုနက ပြောသလို ပိတ်ရက် တစ်ခု နေ့လည်ခင်း ဖက် အိမ်မှာ ဇိမ်နဲ့ နှပ်နေကြရင်း မိုးဦးကျဆိုတော့ မိုးတွေ တဂျိမ်းဂျိမ်း ရွာချ လာပါလေရော။ ရာသီဥတုက အေးစိမ့်စိမ့်လေး ဖြစ်လာတယ်။ ဒေါ်ကြီးနဲ့ သမီးလေးက နေ့လည်စာ စားသောက်ပီးတော့ အခန်းထဲဝင်ပီး အိပ်သွားကြတယ်။ ကျနော်က နေ့လည်စာ စားထားတာ များတော့ ဗိုက်အင့်အင့် နဲ့ ဧည့်ခန်းထဲက ပက်လက် ကုလားထိုင်မှာ မဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ် နဲ့ နှပ်ရင်း ငိုက်လာရော။ "မေ" က သူ့ဖာသာ .. အလုပ်ရှုပ် နေရင်း . မေးလိုက်တော့ ဘာမှ မဟုတ်ဘူး.. ..... ဟိုကောင်! . ဆိုပီး ၂ကောင်သား ယိုင်တိုင်တိုင်နဲ့ ထ၊ ပစ္စည်းပစ္စယတွေ မသိမ်းနိုင်တော့ဘူး။ ဒီအတိုင်း ပစ်ထားခဲ့ပီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တွဲရင်း အိမ်ထဲ ၀င်ရတော့ တာဗျ။ ပြန်လ့လို ည်း မဖြစ်တော့ဘူး လူလည်း အတော် ကွဲနေပီ ဆိုတော့ကာ သူ့အိမ်က အခန်းလွှတ် တစ်ခုထဲ ၀င်ထိုး အိပ်လိုက်တော့ တာပါပဲ။ နောက်တနေ့ မနက် အိပ်ယာ စောစော နိုးလာတော့မှ မနေ့ညက ဖွ ထားခဲ့တဲ့ ခြံထဲက ဟာတွေ ဆင်းပီး သိမ်းရတော့ တာပေါ့။ ကျနော် သိမ်းဆည်း လှဲကျင်းပီးလို့ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာ ရေမိုးချိုး ကိုယ်လက် သုတ်သင်ပီးတဲ့ အချိန်ဆို ကျနော့် သူငယ်ချင်းမလေးရဲ့ လက်ရာ မြီးရှည် မွှေးတေးတေးက မီးဖိုထဲမှာ ရယ်ဒီ ဖြစ်နေပီဗျ။ ဒီကောင်က ဟင်းချက် ထမင်းချက်လည်း ကောင်းကောင်း ကျွမ်းကျင်တာကိုး။ သူ ပြင်ထားပေးတဲ့ မြီးရှည်ကို တရွှတ်ရွှတ် စားနေတဲ့ ကျနော့်ကို စိုက်ကြည့်ရင်း . ဟိုဖက်ကို တိုးစမ်း . အိပ်နေသလား . ငိုက်နေရင် အခန်းထဲဝင်အိပ် .. လို့ ... အေး! ငါလည်း တူတူပဲဟ . ဆိုပီး ကျနော့် ဘေးမှာ လာဝင် လှဲ အိပ်ချ လိုက်တယ်။ ဒီအထိလည်း ဘာမှ မထူးဆန်းသေးဘူး ဗျ။ ကျနော် ပြောခဲ့ဖူး သလိုပဲ ဟိုး အရင်ကထဲက ကျနော်နဲ့ အဲ့ဒီ သူငယ်ချင်းမတွေ ခုလို မိုးအေးအေးဆို စောင်တူတူ ခြုံပီး အိပ်ဖူးခဲ့တာ ဆိုတော့ ကျနော့် ဘေးမှာ လာလှဲ အိပ်လိုက်တာကို ဆန်းတယ် လိ့လုည်း မထင်မိဘူး။ နံရံဖက်ကို ကပ်ပေး လိုက်တာပဲ ...
... ဟိုက်! မဖြစ်သေးပါဘူး ဆိုပီး သိုင်းဖက်ထား မိတဲ့ လက်ကို အသာလေးရုတ်၊ အောက်က ထောက်မိနေတာကို အသာလေးခွါ၊ သူ့ကို ကျော်ခွပီး ကုတင်အောက် ကို ဆင်းလိုက်တယ်။ အခန်းပြင်ထွက်ပီး အိမ်သာဖက်ကို လစ်လာခဲ့တယ်။ ရှူးပေါက် လိုက်တော့မှ ဟိုကောင်က ပြန်ပျော့ သွားတော့တယ်။ မိုးကလည်း တ၀ုန်းဝုန်းနဲ့ ရွာချနေတုံး ရာသီဥတု ကလည်း ပိုတောင် အေးစ ပြုလာတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲက ပက်လက် ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ချလိုက်ရင်း ဖတ်လက်စ မဂ္ဂဇင်းကို ပြန်ဖတ် နေမိသေးတယ်။ ပီးမှ ဟိုကောင်မလေး အိပ်နေတာ စောင်လေး မခြုံထားဘူး အေးနေတော့မယ် စောင်ခြုံ ပေးလိုက်ဦးမှ ဆိုပီး အခန်းထဲ ပြန်ဝင် သွားလိုက် မိတယ်။ အခန်းထဲ ရောက်တော့ မှန်ပြူတင်းပေါက်က မှုန်မှိုင်းမှိုင်း အလင်းရောင်နဲ့ အိပ်ပျော်နေတဲ့ သူ့မျက်နာ ၀ိုင်းစက်စက် လေးကို တစ်ချက်ငေးရင်း ကလေးလေး နဲ့တောင် တူသေးတယ်လို့ တွေးရင်း စောင်ကို ခြုံပေးဖို့ အိပ်နေတဲ့ သူ့ကိုယ်လုံးလေးပ်ါကနေ ကိုင်းမိုးရင်း လှမ်းယူလိုက်တဲ့ အချိန်........။ ..။.... ချမ်းတယ် ငါ့ကို ဖက်ထားပေး ဆိုပီး ချွဲလာတော့ အလိုက်သင့် ကျနော်ပါ မျက်နာချင်းဆိုင် ကုတင်ပေါ် လှဲအိပ်ရင်း ဖက်ထား ပေးလိုက်ရတယ်။ စောင်ကိုဆွဲယူပီး ၂ယောက်လုံး ကိုယ်ပေါ် ခြုံထား လိုက်တယ်။ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ အတင်း ခေါင်းထိုး ထားရင်း ကိုယ်လုံးလေးကို ကျုံ့ပီး ၀င်လာတာကို တင်းတင်း ဖက်ပီး ငြိမ်နေရင်းက ငံြု့ ကည့် လိုက်တော့ သူ ဆက်မအိပ်ပဲ ကျနော့်ကို ရီဝေေ၀လေး မော့ကြည့်နေတာ ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အိပ်ချင်မူးတူး ကပိုကရို မျက်နာလေးက ဆံနွယ် ရှုပ်ပွပွလေးတွေ ကြားထဲမှာ ချောချော လေးရယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း ဘာရယ် မဟုတ် သူ့ကို ငေးနေ မိတာပေါ့။ ။...........................။..... အင်းး ဆိုပီး သူနိုးလာရော။ စောင်ကိုဆွဲယူပီး ခြုံပေးဖို့ ပြင်နေတဲ့ ခပ်ကိုင်းကိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ကို သိုင်းဖက်လာရင်း ချမ်းတယ်ကွာ! ဘယ်ရောက်သွားတာလဲ...........သေးပေါက်ချင်သလို ဖြစ်ပီး အဲ့ဒီဟာက တောင်နေတယ်။ ၀တ်ထား မိတာကလည်း ပုဆိုး၊ အောက်ခံ ဘောင်းဘီကလည်း မပါဘူး။ မတော်မနန်း အခြေနေကြီး ဖြစ်တာပေါ့။ ....
. ဟောဗျာ! . .. ဟာ.. ဆူဆူဖြိုးဖြိုး ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လှတ ပတလေး . ကျနော့်ကို ငေးကြည့်နေတဲ့ သူ့မျက်လုံး ၀ိုင်းစက်စက် ကလေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိကပ်ပီး နမ်းပေး လိုက်မိတယ်။ မျက်လုံးလေး မှိတ်ပီး ငြိမ်ခံ နေရှာတယ်။ မျက်နာချင်း အပ်လိုက်မိတော့ . .... ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲ ......” အဖျား ခတ်နေတဲ့ အသံ တုန်တုန်လေးနဲ့ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲကို မျက်နာ အပ်ထားရင်း တိုးတိုးလေး ရေရွတ်နေတယ်။ ကျနော့်ကို အတင်း ဖက်ထား တာကိုတော့ မလွှတ်ဘူး။ ချမ်းလွန်းလိ့လုား ဒိန်းဒလိန်း နတ်ပူးသလို ဖြစ်နေလို့လား မသိဘူး ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲက သူ့ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေးလေး ခမျာ ဆတ်ဆတ်တုန် နေရှာတာဗျ။ ကျနော် သူ့ကျောပြင် ချောအိအိလေးကို အင်းကျီ အောက်က လျှိုပီး ပွတ်သပ် ပေးနေရင်းက သူ့နဖူးလေးကို မေးစိနဲ့ ဖိပီး ပွတ်ပေး နေမိတယ်။ အဲ့ဒီ အခြေနေမှာ စိတ်ထဲတစ်ခု တွေးလိုက် မိတယ်ဗျ။ ... ဖတ်နေရင်း ဖီးလ် တက်သလို ဖြစ်လာကာမှ မဟုတ် တရုတ်တွေ လျှောက်ပြော တော့မယ် လို့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော့် စိတ်ထဲ အဲ့ဒီ အချိန်က တွေးမိ သွားတာလေး အမှန်တိုင်း ပြောပြချင်တာပါ။ တကယ် ပြောတာပါ ကျနော် အဲ့လိုကြီး တွေးမိ တာဗျ။ သြော်! ငါ့ သူငယ်ချင်းမလေးလည်း ငတ်နေရှာမှာပေါ့. ... သူ့ဆံနွယ်တွေ ဆီက အနံ့ ယဉ်ယဉ်လေးတွေ ရလာတယ်ဗျာ။ မွှေးတေးတေး ချိုအီအီလေး။ တချို့မိန်းမတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ ဘာမှန်း မသိတဲ့ အနံ့မျိုးဗျာ။ ရှန်ပူန့၊ံ ရေမွှေးနံ့ အဲ့ဒီလိုမျိုး အနံ့တွေလည်း မဟုတ်ဘူး ရယ်။ ကျနော့်ကို ကျနော် ဘာလုပ် နေမိမှန်း မသိခင်မှာကို နဖူး ပြောင်တင်းတင်းလေး (ဆံနွယ်တွေ ပေါက်နေတဲ့ နေရာ အစပ်နားမယ် အစိမ်းရောင် စစလေးတွေ ဖြစ်နေသေးတယ်) ကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ လျှောက်ပွတ် နေမိတယ်။ ပါးဖောင်းဖောင်းလေး ၂ဖက်ကို နှာခေါင်းနဲ့ တေ့ပီး လျှောက်လှိမ့် ပေးနေမိတယ်။ ရင်ဘတ်ထဲမှာ လှိုက်ဖိုနေတဲ့ ခံစားချက်က ဟိုးအမြင့်ကြီး ကနေ ပြုတ်ကျလာသလို တွေဖြစ်ပီး ကျနော့် တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ခါ သလိုတောင် ဖြစ်လာတယ်။ မျက်နာချင်း အပ်ပီး ပွတ်နေကြ သလို ဖြစ်နေရာက ရုတ်တရက်ခွာပီး သေချာ ကြည့်လိုက်တော့ နှုတ်ခမ်း ရဲရဲလေးက တဆတ်ဆတ် တုန်နေတာ ကို ဖုံးကွယ် ထားဟန်နဲ့ အောက် နှုတ်ခမ်းကို သွား ချွန်ချွန် လေးတွေနဲ့ ဖိကိုက် ထားတာ တွေ့လိုက် ရတယ်။ ဘာစကားမှ မဆိုပဲ အဲ့ဒီ ချစ်စရာ နှုတ်ခမ်းအိအိ ရဲရဲလေးကို ကျနော် ငုံလိုက်မိတယ်။ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ ရောက်နေတဲ့ ကိုယ်လုံးလေး တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတဲ့ အပြင် ကျနော့် ကျောပြင်ကို ခပ်တင်းတင်း သိုင်းဖက် လာတယ်။ တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းကို တစ်ယောက်က ငုံပီး စုပ်နိုင်ဖို့ အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားနေသလိုမျိုး ကျနော်က ငုံပီး စုပ်လိုက်၊ သူက ခေါင်းကို စောင်းငဲ့ရင်း ကျနော့် နှုတ်ခမ်းကို ပြန်ငုံပီး စုပ်လိုက် အဲ့လို အပြန်အလှန်တွေ လုပ်နေကြရင်း အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာတဲ့ အပြင် စောင်ခြုံထဲက ၂ယောက် စလုံးရဲ့လက်တွေက လည်း အင်းကျီတွေ အောက်ကို လျှိုပီး ကျောပြင် တွေကို ပွတ်သပ် မိကုန်တယ်ဗျာ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အဲ့လို နင့်နင့် သည်းသည်းကြီး နမ်းနေရာက သူက သတိ ၀င်လာဟန်နဲ့ ကျနော့်ကို အသာလေး တွန်းဖယ် လိုကတ်ယ်။ “ဘာ.. သန်တုံး ..
... ဘာ... တော်တော့နော်. လက်လွန် ခြေလွန်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့မယ်” “ ငါနင့်ကို နမ်းပဲနမ်းမှာပါ "မေလေး" ရ .. ဟီး .. အဟိ) သိထားတာကိုး။ အဲ့လို လျှောက်လုပ် ပေးနေရင်း နည်းနည်းလေး ကြာလာတော့ အောက်ကို လျှော လျှော ဆင်းလာမိတယ်။ စောင်ကို ဆွဲဖယ်ပီး ရင်ညွှန့် အပေါ်ပိုင်း တစ်ဝိုက်ကို လျှာအဖျားလေး တွေနဲ့ တရုတ် စာရေးသလို လျှောက်ကစား နေလိကု သေးတယ်။ နို့၂လုံးကြားက အမြောင်းလေးကို မြင်ရတယ် ဆိုရုံလေးကိုး၊ သူ ၀တ် ထားတာက စွပ်ကျယ် လက်စက အဖြူလေးဗျ။ အထဲမှာ ဘော်လီ အင်းကျီ လိုလို၊ရှင်မီး အင်းကျီ လိုလိုဟာ တစ်ထပ်ပါသေးတယ်။ တော်တော်ကြာတဲ့ အထိ အဲ့ဒီ မပေါ့်တစ်ပေါ် နေရာလေးတွေမှာ လျှာကစားနေရင်းက စွပ်ကျယ် ကြပ်ကြပ်လေးကို လှန်တင်ဖို့ လုပ်တယ်။ စွပ်ကျယ်က လှန်လို့ ရပေမယ့် အဲ့ဒီအောက်က အတွင်းခံက ကြပ်ကြပ်ကြီး လှန်လို့ကို မရတာဆရာ။ ဘရာလိုလည်း မဟုတ်ဘူးရယ်။ တအားကြီးကို ကြပ်နေတာ။ ဘာလုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး။ အဲ့မှာ မျက်လုံးမှိတ်ပီး ငြိမ်နေတဲ့ သူက မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပီး အရှက်သည်းနေတဲ့ ဟန်လေးနဲ့ . “. ယောက်ျားနဲ့ မတွေ့တာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်နေရှာပီ သနားပါတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဗျ။ (နင်သနားတာ ငါသိတယ်လို့ ၀င်မဖောက် ကြနဲ့နော် . ကျွတ်!” အဲ့လို ညည်းညည်း ညူညူလေးနဲ့ ဘေးတိုက် အိပ်နေရာက ထထိုင်လိုက်ရင်း လက်ကို နောက်ပစ် တဖောက်ဖောက်နဲ့ ချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပီး ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်။ စွပ်ကျယ်လေးကိုပါ ခေါင်းပေါ်ကနေ ကျော်ပီး ချွတ်ချ ပစ်လိုက်တော့ အပေါ်ပိုင်း ဗလာအတိ ဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ သိတာဗျ။ နဂိုက အသားအရည်က အ၀ါရောင် လဲ့လဲ့လေး ဆိုတော့ ၀ါဝင်းဝင်း ချိုဗူးကြီး၂လုံးက ဘွားကနဲ ပေါ်လာတာ လှလွန်းလို့ ကျနော် လှဲနေရာ ကနေ အံ့သြ မှင်တက်ပီး ငေးနေမိ သေးတယ်။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းမလေးပါ ဆိုပီး အရင်က သိပ် သတိမထား မိလိုက်တာလားပေါ့။ သူ အဲ့ဒီလောက် ထွားမှန်း မသိဘူးရယ်။ ...ဘာလုပ်ဦးမလို့လဲဟာ...မြန်တုံးအရွယ် . ဒါကြီးက ဘယ်လိုချွတ်ရတာလဲ..... ငါတော့ ရှက်လွန်းလို့ သေချင်နေပီ ..... ဟီး) တကယ်ပြော တာ ကျနော် ဘာ လုပ်ပစ်ချင်တဲ့ စိတ်မရှိဘူးရယ်။ သူ့ကို ကျေနပ် သွားစေချင်တဲ့ စိတ်ကလေးပဲ ဖြစ်လာတာ။ သင့်တော်၏ မသင့်တော်၏ တော့ မတွေးမိ တော့ဘူးဗျာ။ မကောင်း တာတော့ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဟာကို သေချာ မစဉ်းစား မိတော့ဘူး။ ဟာ.. တဟာဟာနဲ့ အဲ့လို အော်သံလေးတွေပဲ ဆက်တိုက် ထွက်လာတယ်။ ရင်ခွင်ထဲက သူ့ကို ဆွဲခွါ လိုက်ပီး လည်တိုင် ဖော့ဖော့လေး တစ်လျှောက် တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ လျှောက်နမ်းပစ် လိုက်တာဗျ။ သူ ကျနော့် ခေါင်းက ဆံပင်တွေကို အတင်း ဆုပ်ကိုင် လာတယ်။ မိန်းကလေး တော်တော် များများ လည်တိုင်၊ ဂုတ်ပိုးနဲ့ ရင်ညွှန့်တွေကို အနမ်းခံရ ရင် ချားရဟတ်စီး ရသလို ဖြစ်တယ်လို့ (ကျနော့် အတွေ့အကြုံအရ ... ဟာ.” “ အာကွာ ....
... အာ့” အနုလုံ ပဋိလုံ လေ့လာ နေတဲ့ ကျနော့်ကို အရှက်သည်း ဟန်နဲ့ ပြောလာတာမှ မဆုံးသေးဘူး ကျနော် အတင်း ဖက်ပီး အိပ်ယာပေါ် ဆွဲလှဲ ချလိုက်တာ ပါလာတယ်။ အကြမ်း ပတမ်းကြီး မဟုတ်ပဲ လက်ချောင်း တွေနဲ့ ဆုပ်ကိုင် ကစားရင်း နို့သီး ခေါင်းတွေကို လျှာနဲ့ လျှောက်လှိမ့် ပေးနေလိုက်၊ တပြွတ်ပြွတ် နဲ့ လျှောက်စို့လိုက် . အဟီး။ . ဟိ) ထမီကို ချွတ်ချပစ် လိုက်တယ်။ ဂွင်းလုံးကို ကျွတ်ကရော။ ပေါင်တံလေး တွေကို လျှောက် နမ်းလိုက်၊ လျှာလေးတွေနဲ့ လျှောက်လိုက် လုပ်နေလိုက်တော့ စိတ်ချ သွားဟန်နဲ့ ခေါင်းထောင် ကြည့်နေရာက ပြန်လှဲ အိပ်သွားတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဇာတ်လမ်း စ တော့တာ. ဒီဖက် ပေါင်ပေါ် မျက်နာ အပ်ထားလျှက် ကနေ ....... အဲ့လိုတွေ လျှောက်လုပ် ပစ် နေမိတော့ တာပေါ့။ အရမ်းလှတဲ့ နို့ကြီး၂လုံးကို အားရပါးရ ဆော့ကစား၊ စို့ပီးတော့မှ အောက်ဖက်ကို ဖြေးဖြေးချင်း နမ်းရင်း ဆင်းလာခဲ့တယ်။ ခါးကျင်ကျင်လေးမျာ တင်းတင်း စည်းထားတဲ့ ထမီလေးကို ဖြေလျှော့လိုက်တော့ . ဆိုတဲ့ ... ဟီး) ဟိ်ုဖက် ဒီဖက်ပြောင်းတာ အခေါက် ရေစိပ် လာရင်း သတိဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ သူ့အဖုတ်ကို ကျနော် အပိုင်စီးထား မိပီဗျ (ပါးစပ်နဲ့ ပြောပါတယ်) သူလည်း ထွန့်ထွန့်လူး၊ ကျနော်လည်း အသားကုန် လျှက်ပေးနေမိ ပီ။ အရည်တွေကို ရွှဲရွှဲစိုနေတာပဲ ..... ဆိုပီး သက်ပြင်း ချသံနဲ့ ပြန်လှဲအိပ် သွားရင် ဒီဖက် ပေါင်ကို ပြန်ပြောင်းရင်း လျှာက မတော်တဆ သွားထိပြန်တယ် (ဥာဏ်များ ချက်ပြောပါတယ် . ဟီ. မာန်မဲသံလေး ကြားလိုက် ရတယ်။ မောဟိုက်နေတဲ့ အသံလေးနဲ့ အသက်ကို ပြင်းပြင်း ရှူနေရင်း မလုပ်ရဘူး ဆိုတဲ့ ဟန်နဲ့ ခေါင်းခါ ပြနေတယ်။ “. ဆိုပီး ခေါင်းထောင် ကြည့်လာရင် ...” လို့ ....... ဟုတ်ပီလား .. ဟင်းး! .လုံးဝ မထိဘူး! ပေါင်တံလေးတွေနမ်းမလို့ . ဘာမှ မဖြစ်ပူး ... ဟဲ့! .. ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ ... ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်းပါ ......(အမှန်က အပြင်ထွက်ရင် လူတွေ အာရုံစိုက်တာ ခံရလွန်းလို့ ရှက်လို့ ဆိုပီး ရင်စည်း လိုမျိုး အဲ့လိုဟာ ခပ်ကြပ်ကြပ်တွေ ၀တ်ထားလိ့တဲု့ နောက်မှ သူပြန်ပြောပြတယ်) ကျနော် ငေးနေတာကို ရှက်လွန်းလို့ ထင်တယ်ဗျ။ ကျောလယ်လောက်ရှိတဲ့ ဆံပင် အရှည်တွေကို ရင်ဘတ် အရှေ့ဖက်ကို ဆွဲယူပီး သူ့ချိုဗူး၂လုံးကို ဆံပင်တွေနဲ့ ဖုံးထားလိုက်ရင်း အောက် နှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ထားတယ်။ အဲ့လို ရှက၀်ဲဝဲ ဟန်လေးက ကို ချစ်စရာလေးဗျာ။ ဆံပင်တွေ ဖုံးထားတာကို အသာလေး ဆွဲဖယ်ပီး တုန်နေတဲ့ လက်ချောင်း တွေနဲ့ အသာလေး အုပ်ကိုင် ကြည့်တယ်။ စေးပိုင်ပိုင်လေး။ လက်ဖ၀ါး ၂ဖက်နဲ့စုံ ပင့်ပီး မ ကြည့်တယ်။ နည်းတာကြီးတွေ လားဗျာ။ သွေးကြော အစိမ်းလေးတွေ ယှက်လို့။ “ဟေ့! တော်ပီကွာ... ဟဲ့! . လို့ ...... ဆောရီး! မတော်တဆ သွား ထိမိတာ . တင်ပါးနဲ့ ကုတင် ... ခပ် တည်တည် ပြန်ပြောရင်း (မာယာ များချက် ပြောပါတယ် .... ဒီဖက် ပေါင်ကို နမ်းနေရာက လျှာကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ ဟိုဖက်ပေါင်ကို မျက်နာ သွားအပ်ဖို့ အကူးမှာ ထုတ်ထားတဲ့ လျှာကြီးက မတော်တဆ လိုလို ပေါင်၂ချောင်း အလယ် တည့်တည့်က ဖုတ်ဖုတ်ကို ခရီးသွား ဟန်လွှဲ ပလပ်ကနဲ ပွတ်တိုက် သွားတယ်။ ..
မထိတော့ဘူး။ .... ဟီး။ အမူအရာတွေနဲ့ ပြောနေကြတာဗျ။ .... ရမလား . ထားသွားလို့ .” အပေါ်ပို့စ်က နောက်ဆုံး စာကြောင်း ၄ကြောင်း (စကား အပြန်အလှန် ပြောခန်း) ကိုခရေဇီဖိုး ဟိုဖက်မယ် ပြောထား သေးတယ် လေ။ အဲ့ဒါ ကျနော်တို့ ၂ယောက် ပါးစပ်ကနေ အပြန်အလှန် ပြောနေကြတာ မဟုတ်ဘူးရယ်။ ဟမ်! ပါးစပ်က မပြော ဖင်က ပြောတာလားလို့ မေးချင်လာ သလား .. ကော့ တက်ပီး လေထဲမှာ မြှောက်နေတာဗျာ။ ၂ခေါက်လောက် မြှောက်တက် ပီး ပြုတ်ပြုတ် ကျသွားတယ်။ ကိုယ်လုံးလေး ကလည်း တွန့လ်ိမ်ပီး တဆတ်ဆတ် ခါနေတယ်။ ကျနော်လည်း ဂျာရတာ တော်တော် မောသွားပီ။ ဒါပေမယ့် သူ ကျေနပ်သွားအောင် ဆက်လုပ်ပေးတဲ့ အနေနဲ့ အဖုတ်ထဲ လက် နှိုက်လိုက် မိတယ်။ အဖုတ်ထဲ လက်ခလယ် အသွင်း အထုတ်လေး လုပ်နေရင်း၊ လျှာက အစိကို ၀ိုင်းပေးနေမိတယ်။ သိပ် မကြာလိုက်ဘူး အဖုတ်အတွင်းသား နံရံတွေက ကျနော့် လက်ချောင်းကို အတင်း ဆုပ်ပီး ရှုံ့ပွပွ လုပ်ရင်း၊ သူ့ ပါးစပ်က အင်းးးး ဆိုတဲ့ အသံရှည် ဆွဲပီး အော်ရင်း အဆုံးထိ ရောက်သွား ရှာတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ကျနော်ရပ် လိုက်ပီး သူ့ကို စောင်လေး ပြန်ခြုံ ထားပေးလိုက်တယ်။ အခန်းပြင်ထွက် ရေချိုးခန်းထဲသွား ပလုတ်ကျင်း လက်ဆေး မျက်နာသစ်ပေါ့။ အားလုံး ပီးစီးသွားတော့ အခန်းထဲ ပြန်မ၀င်တော့ပဲ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်ရင်း စီးကရက်တစ်လိပ် ဖွာနေမိတယ်။ ငါတော့ သောက်တလွှဲတွေ လျှောက်လုပ် လိုက်မိပီ ထင်တယ် ဆိုတဲ့စိတ်က ၀င်ချင် သလိုလို ဖြစ်လာတယ်။ ခြေလွန် လက်လွန်တော့ မဖြစ်ဘူး ထင်တာပဲ။ အင်း ဖြစ်တော့ ဖြစ်တယ် ထင်တယ်။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းကို ဘာသွား လုပ်မိလိုက်ပီလဲပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အခန်း တံခါးဝကနေ ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်နေတဲ့ မေ့ ကို တွေ့ လိုက်ရတယ်။ တစ်ဝက်တပျက် ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးဝကနေ လက်ယပ်ပီး လှမ်းခေါ်နေတာ။ မျက်နာ ကလည်း တစ်မျိုးပဲ။ ငါ့ကိုတော့ ပါးချတော့မလား ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ထပီး သူ့ အနားကပ် သွားတော့ အခန်းထဲ ဆွဲသွင်းတာ ခံလိုက်ရတယ်။ “နင် လုပ်ချင်တာ လုပ်ပီး .. ဟီ .... ကိုင်း! . မေလေး . ငြိမ်ငြိမ်နေစမ်း.. တော်ပီ . ဟိ။ ကျနော့်ကို အခန်းထဲ ဆွဲသွင်းပီး တာနဲ့ တံခါးကို ချက်ချင်း ပြန်ပိတ်၊ ကျောနဲ့ ဖိကပ် ထားလျှက်ကနေ ဦးကျောက်လုံးက တင်တင်မူကို မုဒိန်း ကျင့်ခါနီး အပြုံးမျိုးနဲ့ ပြုံးပြလာတာ (ပြောင်းပြန်တွေတော့ ဖြစ်ကုန်ပီ ထင်တယ် မယုံရင် ပုံပြင်သာ မှတ်ကြပေတော့) ကျနော့်မှာ ယောကျာ်းသား အားနွ့သဲူပါရှင် ဆိုတဲ့ မျက်နာငယ်လေးနဲ့ ကြောက်အား ပိုနေတဲ့ ဟန်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ ညီလေး မောင်ချမ်းကိုရဲ့ ဟန်ပန်ကလေး မျက်စိထဲ မြင်ကြလား မသိဘူးဟီဟိ။ မျက်မှောင်လေး ကျုံ့ပီး မေးဆတ် ပြလာတယ်။ ကျနော်က မျက်လွှာလေး ချရင်း ခေါင်းခါ ပြလိုက်တယ်။ နှာခေါင်းရှုံ့ ပြရင်း သူလည်း ခေါင်းခါ ပြလာတယ်။ ဆက်တိုက် ဆိုသလိုပဲ ခေါင်းငြိမ့် ပြတယ် .... မေရာ. ယုံချင်ယုံ မယုံချင် နေဗျာ။ ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဖြစ်နေကြတာ။ ကျနော်က ရုန်းနေတာ သူက ဆွဲ နေ နေတာ ..” “စကားမရှည်နဲ့ ... ကျွတ်!” “ဟာ .. ငါလည်း လုပ်မယ်” “အာ . လျှောက်မလုပ်ပါနဲ့ . ကော့ .. ဟီး ...
ပေး . ဒေါ်ကြီး ကျနော် ချီမယ် . တာပေါ့ . ကလေးနဲ့ ဒေါ်ကြီး . နိုးလာလို့ .... ဆိုပီး . ကံသီပေလို့ .. ဟန်နဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်း ကိုက်ပီး အနားကပ် လာတယ်။ မတုန်မလှုပ် ကျောက်ရုပ်ကြီး လို တောင့်တောင့်ကြီး ရပ်နေတဲ့ ကျနော့်ကို အတင်း ဆွဲဖက် လာတယ်။ သူ့ကိုယ်ပေါ်လွှားခြုံထားတဲ့ စောင်ပါးလေးကို လွှတ်ချလိုက်တော့ ခုနက ကျနော် ထားခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဖင်တုံးလုံးလေးပဲ ဆိုတာ အထိအတွေ့ အရ သိလိုက် ရတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာပဲ ဟိုဖက် အခန်းက ကလေး ဂျီကျသံ လေးနဲ့ ဒေါ်ကြီးက ချော့နေတဲ့ အသံ ထွက်လာတယ်။ ပေါက်ကွဲခါနီး တင်းမာနေတဲ့ အခြေအနေ ရုတ်တရုတ် ပြောင်းလဲ သွားပီး ၀ရုန်းသုံးကားတွေ ဖြစ်ကုန်ရော။ ကြမ်းပြင်ပေါ် ပုံကျနေတဲ့ စောင်ကလေးကို ကောက်ပီး ပြန်ခြုံလိုက်ရင်း ကျနော့်ကို အပြင် မြန်မြန် ပြန်ထွက် ဆိုတဲ့ အမူအရာလေး ပြလာရင်း ကုတင်ပေါ်က သူ့အ၀တ်တွေကို ပြန်ဝတ်ဖို့ ကြိုးစား နေတယ်။ ကျနော်လည်း ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ စိတ်နဲ့ အခန်းတံခါးကို မြန်မြန် ဆွဲဖွင့်ပီး ဧည့်ခန်း ထဲကို လစ်ထွက် လာခဲ့ပီး ပက်လက် ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ချ လိုက်ရင်း စာဖတ် ချင်ယောင် ဆောင် နေလိုက်မိတယ်။ . ဆိုပီး သမီးကို .... ဟိ။ . ဒါက .. ဟီ ... မဟုတ်ရင် မောင်ချမ်းကိုလေး ဘ၀ နစ်မွန်းခါနီး ဖြစ်နေပီ မဟုတ်လား. လိုက်ရင်း.. အေ ဟော့ဒီမှာ လေးလေး ရှိတယ်ဟေ့ .. ဘုရား... လှမ်းယူ ..... အိမ်ပြန်မလို့လေ .. လို့ ပြောရင်း သူဘာမှ စကား ပြန်မပြော နိုင်သေးခင် လစ်ထွက် လာခဲ့တယ်။ ခြံဝင်းထဲကနေ လမ်းမပေါ်ကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ မောင်းထွက် လာခဲ့ရင်း သက်ပြင်း ရှည်ကြီး ဖူးးး ကနဲ ချလိုက် မိတယ်ဗျာ။ မနောက်ဘူးဗျာ။ အတည် ပြောတော့မယ်။ ကျနော် တော်တော် လန့်သွားတယ်ဗျ။ ကျနော့်ကို ကျနော်လည်း စိတ်ထဲမှာ အပြစ် တအားတင် နေမိပီ။ ခင်ဗျားတို့ နားလည်ချင်မှ နားလည်လိမ့်မယ်။ ကျနော် လူကောင်း မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကမ္ဘာပေါ်က ဘယ် မိန်းမနဲ့မဆို လိင်ဆက်ဆံဖို့ အသင့်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မေ က ကျနော့် အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဗျ။ ရင်ထဲ အသည်းထဲက နင့်နေအောင် ကိုချစ်တာ။ အဲ့ဒီ ခံစားချက်က ဘာကိုမှ ယှဉ်လို့မရဘူး။ ရဲဘော်ရဲဖက် ဆိုးတူ ကောင်းတိုင်ပင် ဆိုသလို ... အမိန့သ်ံ ပါပါနဲ့ .. ကျနော့် သူငယ်ချင်း ပုံစံက အသေ အုပ်တော့မယ် ပုံစံကိုးဗျ။ အချိန်ကိုက်ကလေးပဲ ဗျာ။ အိပ်ယာက နိုးလာလို့ တအီအီ ဖြစ်နေတဲ့ သမီးလေးကို ပွေ့ရင်း ဒေါ်ကြီးတစ်ယောက် အပြင် ထွက်လာတယ်။ ..... ဘာပဲ လုပ်နေ လုပ်နေ ... နက်ဖန် မနက်မှ ပြန်လာခဲ့မယ် ... ဂရုမစိုက်ဘူး ... ဆိုပီး မြှူနေ လိုက် ရတယ်။ ခဏ နေတော့ အိပ်ချင် မူးတူး လိုလို ဘာလိုလို ရုပ်နဲ့ ဟန်ဆောင်ပီး မေ တစ်ယောက် အခန်း ပြင် ထွက် လာတယ်။ ကျနော် က တော့ သူ့မျက်နာ ကို လုံးဝ မကြည့် ရဲ တော့ဘူး။ ကလေးထိန်းရင်း မသိ ဟန်ဆောင် နေလိုက်တယ်။ သူနဲ့ ဒေါ်ကြီး ညစာချက်ဖို့ မီးဖိုချောင်ထဲ ၀င်သွားမှ သက်ပြင်း ခိုးချရတယ်ဗျာ။ ညစာ စားသောက် ပီးတော့ မိုးလည်း တော်တော်စဲ သွားတော့ ကာ ကျနော်လည်း ရူးသလို ပေါသလိုနဲ့ အ၀တ်အစား ကောက်လဲပီး ဆိုင်ကယ်သော့ကို ကောက်ကိုင် လိုက်တော့ .. ဆိုတဲ့ . သမီးလေးရေ! မညောင်ပါနဲ့ . ဘယ်လဲ .. မေ က ကျနော့်ကို လှမ်းမေး လာတာကို မျက်လုံးချင်း မဆုံမိအောင် ရှောင်ရင်း . ဘာညာ . ဘုရား . ပရိသတ် :P ) ကျနော့် ဖာသာ ခေါင်းခါခါ လည်ခါခါ ..... ဟေ့ ..(လာစမ်းဆိုတဲ့ မျက်နာအမူအရာနဲ့) ကျနော်က သက်ပြင်းချပီး စိတ် မသက် မသာ ဟန်နဲ့ ခေါင်း ထပ်ခါ ပြတယ်။ အဲ့ဒီ အမူအရာ တွေကို ဘာသာပြန် လိုက်ရင် ခုနက ပြောတဲ့ အပြန်အလှန် စကားပြောတဲ့ အဓိပ္ပါယ် ထွက်လာ လိမ့်မယ်။ (သဘောပါသလား ...
နင် ခုဘယ်မှာလဲ? ...” “ငါ့ကို ပြောင်ချော်ချော် လာလုပ်မနေနဲ့ .. အလုပ်များနေလို့ပါ ဆိုနေ ... ဆို .” “အင်းးး” “အင်း .. ပွမ်!!!!!!! ပွမ်!!!!!!!!!!!! ကြားတယ်မလား . ??? ..” “ငါ . ခုချက်ချင်း .. လူခွဲမရှိဘူး . ... .. နင့်ခြံပေါက်ဝမှာ လာစောင့်နေတယ် ခုချက်ချင်း . ဒေါ်ကြီးတောက သူ့အမျိုးတွေဆီ ခဏပြန်ချင်တယ် ပြောလို့ ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်. ထွက်လာ ... ငါ စိတ်တအား တို နေ တယ်နော် . ကြားလား ............” “ ..... ငါနဲ့သမီး ခု . နင်က .” “ဟဲဟဲ . အခု . သဘောလဲ .ဟိုးငယ်ငယ်ထဲက ချစ်လာ ရတာလေ။ အဲ့ဒါကြီးကို ခုလို သွားလုပ် လိုက်မိတာ ကျနော် အင်မတန် မှားသွားပီ။ ကံကောင်း ထောက်မလို့ ကျနော် ဟိုလိုကြီး မလုပ် လိုက် မိသေးတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ပြောရမလဲတောင် မသိတော့ ပါဘူး။ ကျနော် အပြစ်ရှိသွား သလို ခံစား နေရပီဗျ။ ယူကြုံး မရလည်း ဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူ့ကိုရှောင် တဲ့ အနေနဲ့ လစ်လာတာ။ မျက်လုံးချင်း ဆိုင်ရမှာကို လိပ်ပြာ မလုံတော့တာ ဆရာတို့ရေ။ တခြားမကြည့်နဲ့ အားကိုး အားထား မရှိ၊ ကလေးလေး တစ်ယောက်နဲ့ ဘ၀ကို သူပဲ အိမ်ထောင်ဦးစီး လုပ်ပီး ရပ်တည်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းမလေးကို သူများ စော်ကား မော်ကား လုပ်လာရင် ကာကွယ် ပေးရမယ့် ဥစ္စာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်က အနိုင့် အထက် လုပ်ပေးလိုက် မိပီ ဆိုတဲ့ စိတ်ကြီးက ကြီးစိုးထားတာဗျ။ ခင်ဗျားတိ့ေုတာ့ ကျနော့်ကို ဘယ်လို မြင်မယ် မသိဘူး။ ကျနော်က တစ်မျိုးပါ။ ခေတ်စကားနဲ့ ပြောရရင် ဂေါက်သီးပေါ့။ နောက်ထပ် ၃ရက်တိတိ သူ့ဆီ လုံးဝ မသွားဖြစ်တော့ ဘူးဗျ။ ရှောင်ပုန်း နေမိတာ ပေါ့လေ။ ဘယ်မှလဲ မထွက်ဖြစ်ဘူး။ ကျနော့်ခြံထဲက ကုန်လှောင် ဂိုဒေါင်ကို ရှင်းရင်း အလုပ် ရှုပ်နေမိတယ်။ တမင်ကို အလုပ်မရှုပ် ရှုပ်အောင် လုပ်နေမိတာ။ မဟုတ်ရင် ဟိုနေ့က အဖြစ်အပျက် စိတ်ထဲ ရောက် ရောက်လာပီး နေရခက်လွန်း လိ့ေုပါ့ ဆရာတို့ရယ်။ အဲ့လိုနဲ့ အဲ့ဒီ ၃ရက်မြှောက် ညနေပိုင်းမှာ ကျနော် အလုပ် လုပ်နေတာ နားလိုက်ပီး ရေမိုး ချိုးပီးစ ရေသုတ်နေတုံး ဖုန်းလာတယ်။ ကောက်ကိုင် လိုက်တော့ သူဖြစ်နေတယ်။ “ဟရောင်! . ဟိုဥစ္စာ . နင်လာခဲ့ . ကားဟွန်းသံ.” “..” “အေး .. အိမ်စောင့် ကလေးထိန်းဖို့ .. မေလေး . ဒါပဲ.. ဘာ ....” “ငါ ညဖက်လောက် လာခဲ့မယ် လေ . ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အ၀တ်အစား မြန်မြန်ကောက် ၀တ်ပီး အိမ်သော့ခတ်၊ ခြံဝကို အပြေးထွက် လာခဲ့ ရတော့ တာပေါ့။ စူပုပ်ပုပ် ရုပ်လေးနဲ့ ကားထဲမှာ ထိုင်စောင့်နေတဲ့ သူ့ကို သေချာမကြည့်ရဲဘူး။ ကျနော့်ကိုမြင်တော့ တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်ပြနေတဲ့ သမီးလေးကို ......” “သောက်ကျိုးတော့ နဲပါ ပေါ့လား” .. ငသက် . လာခဲ့ ....” “အိမ်မှာလေ . ပြောနေတာ ........... နေကောင်းလား .....
..... ဘာညာ .... ဟောဗျာ! သမီးလေးရယ် ... အသံပဲ ကြားလိုက်ရတယ်။ လူက အောက် ရောက်သွားပီ။ သမီးကို ချီရင်း ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာ ငယ်မူပြန်ချင် သလိုလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ကျောင်းသား ဘ၀က သူနဲ့ ကျနော် ကြိုက်လွန်းလို့ အမြဲ လာစားနေကြ ရှမ်း ထမင်းဆိုင်လေးဗျ။ ဟင်းတွေ ကလည်း ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က အတိုင်း လက်ရာ မပြောင်းဘူးရယ်။ ဆန်စေးနဲ့ ချက်ထားတဲ့ ထမင်းနဲ့ မုန့်ညှင်းစောလို့ ခေါ်တဲ့ အချဉ်ရည်ဟင်း ကြောင့် ရှလွှတ် ရှလွှတ်နဲ့ ထမင်းစား မြိန်လိုက်တာဗျာ။ သူရော ကျနော်ပါ စကား တစ်ခွန်းမှ မပြောပဲ ထမင်းနဲ့ ဟင်းကို ကုန်းလွေးေ နကြတယ်။ စားလို့ ပီး ခါနီးမှာ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ထားတဲ့ သမီးလေးက ဆော့ ကစားရင်း ဟင်းရည် သောက် ပုဂံလုံးကို လက်နဲ့ လှမ်းပုတ်လိုက်တော့ ဂလွမ်ကနဲ မှောက်ကျ သွားပါ လေရော။ မှောက်သွားတဲ့ ဟင်းရည်တွေက သူ့အမေ ထိုင်တဲ့ ဖက် ကို ၀ရောကနဲ ဖိတ်ကျသွားတော့ မေ ခြေထောက်တွေ ပေါင်တွေ အကုန် စိုရွှဲ ကုန်တာပေါ့။ .. ဆိုပီး လျှောက်လုပ် နေရတယ်။ ကျနော် ကားပေါ်ရောက်တာ နဲ့ စက်နှိုးပီး ၀ူး ကနဲ ထွက်သွားတယ်။ ဒေါသဂုမ္ဘာရလေးကို ကြောက်ရ တော့ကာ ဘာမှ မပြောရဲပဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ဘေးကနေ စကား ကောင်းကောင်း မတတ်သေးတဲ့ သမီးလေးကို ဟိုပြော ဒီပြောတွေလျှောက်ပြောပီး ဖိန့်ဖိန့်တွေ လုပ်နေ ရတာပေါ့ဗျာ။ ကား ထိုးရပ် လိုက်တော့မှ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ် လိုက်မိတယ်။ မြို့ထဲမှာပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ . သိလား လာစမ်း ... လို့ .. အကိုတို့ အမတို့ ကျောင်းတက် တုံးက ဒီဆိုင်မှာ ထမင်း လာလာ စားရင် "ကလီစာ စုံတွဲ" လာပါပီ ရှင် လို့ အော်အော် နေတဲ့ .. ဟေ့! လူတွေ ကြည့်ကုန်ပီ .. လူဆိုးမလေးပဲ . အိမ်မှာ ဘာမှ မချက်ထားဘူး ထမင်းစားမယ် . ကျမပဲလေ” . စားပွဲပေါ် က တစ်ရှူးလေးတွေ ခပ်သွက်သွက် ဆွဲယူလိုက်ပီး မေ့ ခြေထောက်တွေ ပေါင်တွေကို သုတ်ပေး နေမိတယ်။ ဟင်းရည်က ဒုတိယ အကြိမ် ပြန်ထည့် ပေးထားတဲ့ ဟာ ဆိုတော့ နည်းနည်းပူ နေတော့ကာ မေ့ ခြေထောက်တွေ အပူလောင် သွားပီလား ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ စက္ကူလေး တွေနဲ့ သုတ်ပေးတာ အပြင် ကယောင် ကတမ်းနဲ့ ခြေဖမိုးလေးကို ဆွဲယူပီး တဖူးဖူး နဲ့ လေမှုတ် ပေးနေမိတယ်။ . ပေးဦးမယ် ........ကားထဲ ၀င်ထိုင်ရင်း ဆွဲပွေ့လိုကတ်ယ်။ .. ? ... စကားသံ တစ်ခု ကြားလိုက်ရတော့ ကလေး တစ်ယောက်ကို ပိုးသဘက်လေး နဲ့ ကျောမှာ ပိုးထားတဲ့ ရှမ်းမလေး တစ်ယောက်ဗျ။ “အကို နဲ့ အမ ကျမကို မှတ်မိ ကြလား .. မွှ . ငါ ဗိုက် အရမ်းဆာ လာတယ်. သူ့ဆီက ခပ်တိုးတိုး .. သတိပေးသံ ကြားလိုက် ရမှ ရှက်ကိုး ရှက်ကန်းနဲ့ ဟင်းရည်တွေ ပြောင်အောင် မြန်မြန်သုတ်ပေး လိုက်ပီး ကိုယ့်ခုံမှာ ကိုယ် ပြန်ဝင်ထိုင် လိုက်တယ်။ .. ဆိုတဲ့ ... မွှ .. ကောင်မလေးဟာ .” “အဟီး . ဆိုပီး သမီးကို ခေါင်းလေး ပွတ်ပီး ကျနော် ပြောနေရင်း မေ့ကို လှမ်းကြည့် လိုက်တော့ ဘာဖြစ်လို့ မှန်းမသိဘူးဗျ။ သူပြုံးနေတယ်။ အင်မတန် ကျေနပ် နှစ်သိမ့် ကြည်နူးသွားတဲ့ အပြုံးမျိုး။ ပြုံးရင်းနဲ့ မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝိုင်းနေတယ်။ ကျနော် အံ့သြ သွားတယ်ဗျ။ သူ ဘာဖြစ် သွားတာလဲ ပေါ့။ အဲ့ဒီမှာပဲ . ငါ့ သမီးလေးက . မသိဘူးဗျ” “ . လေးလေးက သမီးလေးကို လွမ်းနေတာ ... ရော်! . လို့ ရေရွတ်ရင်း စားလက်စ တွေ ချ သမီးလေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ခဏ ရပ်ခိုင်း ထားရင်း..
. . ကျမ စိတ်ထဲမှာ ဒီအမ ချောချောလေး နဲ့ အကို ချောချောလေးက တအား လိုက်ဖက်တာ... ဟီး . အဟီး။ အိမ်ပြန် ရောက်တော့ ဗိုက်အင့် လိုက်တာဟာ ဆိုပီး မေ တစ်ယောက် ဧည့်ခန်း ထဲက ဆက်တီ ခုံရှည်ပေါ် ခြေပစ် လက်ပစ် လှဲ အိပ်ပီး စာအုပ် တစ်အုပ် ကောက် ဖတ်နေတယ်။ ကျနော် လည်း ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ပီး ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဟိုဟာ လုပ်ရမလို ဒီဟာ လုပ်ရမလို ယောင် တောင်တောင် ဖြစ်နေတာ ပေါ့ဗျာ။ ဆိုလိုတာက ကျနော့် အသိစတ်ိထဲ ပေါက်ကရတော့ ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာ အလိုလို တွေးရင်း သိနေပီကိုး။ ဥပမာဗျာ. ၀မ်းသာလိုက်တာ ... အိမ်ထောင်ကျပီး ကလေးတောင် ရနေပီ ဟုတ်လား?” “.” “ ...... သမီးလေး ချောတာက အမနဲ့ တူလ့ပိုါကွယ် ( မေက ပြုံးစိစိနဲ့ ၀င်ပြော လာတယ် သူနဲ့ ကျနော် လင်မယား မဟုတ်ဘူးလို့ တစ်ခွန်းမှ မဟဘူးရယ် ) “ ဟီးဟီး .“ဟေ! ဆိုင်ရှင် အန်တီကြီးရဲ့သမီးလေး ပေါ့..... ” “ ... ဟား ....... ဒီ၂ယောက် ကြည့်စမ်း ဟိုး အရင်က အတိုင်း ငယ်ငယ်တုံးက အတိုင်း ဖြစ်နေတုံး လို့ ငေးကြည့် ပီး အံ့သြနေတာ” . သူတို့ ညားသွားရင် ကောင်းမှာလို့ ဘေးကနေ စိတ်ကူးယဉ် ခဲ့ဖူးတာ .. ဟီး .. ပြန်တွေ့ရလိ့လုား ... ဆံပင် နက်နက် ကလေးတွေက အစ တူတယ်နော် . ခုနက အမကို အကို ခြေထောက် သုတ်ပေးနေတာလေး ကြည့်ပီး ကြည်နူးသွားတာ အဲ့ဒါ မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ဖြစ်ပီး လာနှုတ်ဆက်တာ သိလား . ဟုတ်တယ်... ဟား ...” “ ...” “ ... . အကိုတ့ကို တွေ့ရတာ ပျော်လွန်းလို့ လာ နှုတ်ဆက်တာ . ကျမ အံ့သြတာက အကို နဲ့ အမ ဆိုင်ထဲ ၀င်ဝင် လာချင်း ဟော . အဖေကော အမေကော ချောပါတယ် အမရ......... အိမ်မှာ လူရှင်း သွားအောင် သူ့ ကြီးဒေါ်ကြီး တော ပြန်သွားတယ် ဆိုတဲ့ ဟာမျိုးက ခင်ဗျားတို့ ဖတ်ရတာ ထိုးဇာတ် ဆန်လွန်း မနေဘူးလား ဟဲဟဲ။ ဆန်တာပေါ့ဗျ။ ၀တ္ထု ရေးနေတာ ဆိုရင် စာရေးဆရာ ဂွင် ဖန်လိုက်တာပေါ့။ ခုဟာက ၀တ္ထု မဟုတ် . သမီးလေးက ချောလိုက်တာ အဖေတူ အမေတူလေး .. အကိုတို့ သူငယ်ချင်း၂ယောက် ထမင်း အမြဲ လာစားတိုင်း ၀က်ကလီစာမှာ တတ်တာ မှတ်မိတယ်လေ. ထမင်းဆိုင်က စားသောက်ပီး ထွက်လာ ကြတော့ မေ က ကားမောင်း နေရင်း ကျနော့်ကို ပြုံးစိစိနဲ့ လှမ်းလှမ်း ကြည့်နေတယ်။ ဘာကနေ ဘယ်လို အူမြူး သွားတာလဲ မသိပါဘူး ဗျာ။ ဟို ထမင်းဆိုင်က ကောင်မလေး သူ့ကို ချောတုံး ငယ်တုံး လို့များ ပြောခဲ့လ့လိုား မသိဘူးပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ပဲ မေ့ အိမ်ကို ရောက်သွား ကြရော ဆိုပါတော့ဗျာ။ ဘာဆက်ဖြစ်မယ် ဆိုတာ ကတော့ နောက်တစ်ပို့စ်ကို စောင့်ဖတ်ရင် သိမယ်ဗျား။ ခဏရပ် လိုက်ဦးမယ်။ နည်းနည်း မူးလာတော့ စာရိုက်ရတာ အဆင် မပြေတော့ဘူး ...” “ဟုတ်ပါ့ ... ခုတော့ ကလေး တောင် ရနေပီနော်..
... အိပ်ရအောင်နော် ...လေ တော့ အဲ့ဒီ ကိစ္စ နောက်ကွယ်မှာ အကြောင်း တရား တစ်ခုက ရှိနေတာ ဆိုပါတော့။ အိမ်ပြန် ရောက်သွား ကထဲက ၂ယောက်လုံး ဘာ စကားမှ မပြောဖြစ်ဘူး။ ရုပ်တည်ကြီး တွေနဲ့ လုပ်နေကြတာဗျ။ ခဏ နားပီးတော့ လှဲနေရာက ထပီး သူ ထွက်သွားတယ်။ ရေချိုးခန်း ထဲက အသံဗလံ တွေကြောင့် ရေမိုး ချိုးနေတယ် ဆိုတာ သတိထား မိပေမယ့် ကလေး ထိန်းရင်း ရုပ်မြင်သံကြားက ဘောပွဲ ဟိုက်လိုက် ပြနေတာ ဖွင့်ကြည့် နေလိုက်မိတယ်။ နာရီဝက် တစ်နာရီ လောက် ကြာ သွားတော့မှ မွှေးကနဲ ရနံ့တွေ ရလာလို့ လှည့်ကြည့် လိုက်မိတော့ ရေချိုး ခေါင်းလျှော် ပီးစ ပုံစံလေးနဲ့ စိုနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို မွှေးပွ တဘက်နဲ့ သုတ်ရင်း ကျနော့် ဘေးနားမှာ လာရပ် နေတာ သတိထား လိုက်မိတယ်။ “သမီးလေး ဆော့ရတာ မမော သေးဘူးလား .. လာ .... မြှူနေသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ကျနော့် ရှေ့မှာ ခပ်ကိုင်းကိုင်း လာလုပ် နေတာ ဆိုတော့ လူလည်း အဲ့ဒီ မပေါ့်တပေါ် ဟာကြီး ၂ခုကို မြင်ပီး စိတ်ထဲ သရိုးသရီ ကြီး ဖြစ်စ ပြုလာပီ။ သတိ တစ်ချက် ၀င်လာတော့ ဆတ်ကနဲ မျက်နာ လွှဲလိုက် ရတယ်။ ဒါတောင် ခပ်တည်တည် လုပ် နေတဲ့ ဒင့် မျက်နာက လှစ်ကနဲ ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားတာ မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက် သေးတယ်ဗျ။ ခလေးကို ချီပီး သူ့အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားတာ တော်တော်ကြာ သွားပြန်တယ်။ သီချင်းလေး တအေးအေးနဲ့ သမီးလေးကို ချော့သိပ်နေတာ ကြားနေရတယ်။ သမီး အိပ်သွား တော့မှ အပြင် ပြန်ထွက် လာပီး အိမ်ရှေ့ ဆင်ဝင် အောက်က ကားကို အိမ်ဘေး ကားဂိုထောင်ထဲ သွားသွင်းတယ်။ သူပြန်ဝင်လာပီး အိမ်ရှေ့ တံခါးမကြီး ပိတ်နေတဲ့ အချိန် မိုးတွေ တဖျောက်ဖျောက် ကျစပြုလာပီ။ မိုးပက်မှာစိုးလို့ ပြူတင်းပေါက်တွေကို ကျနော်ထပီး လျှောက်ပိတ် လိုက်ရင်း ကုလားထိုင်ပေါ် ပြန်ထိုင်မလို့ ကြည့်လိုက်တော့ သူက ခပ်တည်တည် ၀င်ထိုင်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ရုပ်မြင်သံကြားကို စိတ်ဝင်တစား ထိုင်ကြည့်နေတာဗျ။ ကျနော်လည်း ဘေးက ဆက်တီခုံမှာ ၀င်ထိုင်ပီး အတူတူဆက် ကြည့်နေလိုက် သေးတယ်။ မှန်ရာကို ၀န်ခံရရင် ဘာတွေပြနေမှန်း သေချာ မသိပါဘူးဗျာ။ သူလည်း တူတူပဲ နေမှာပါ။ ဒါနဲ့ပဲ အဲ့လို ဟန်ဆောင် ပန်ဆောင် လုပ်ရင်း မိုးချုပ်သွားရော။ အိပ်ချိန်တန်ပီ ဆိုတဲ့ ဟန်နဲ့ ထိုင်ရာ ကနေ သူထတော့ ကျနော်လည်း ပျင်းကျောတွေ ဘာတွေ ဆန့်ပီး သမ်းပြ လိုက်သေးတယ်။ လူလည်း ဘယ်လို စိတ်ခံစားမှုကြီး ဖြစ်နေမှန်းကို မသိပါဘူးဗျာ။ ကျနော့်ကို မျက်လုံးတစ်ချက် လှန်ကြည့်ပီး အောက်နှုတ်ခမ်းကို တစ်ချက်ကိုရင်း သူ့အခန်းထဲကို ဇောင့်ဇောင့် ဇောင့်ဇောင့် နဲ့ ခြေသံ ခပ်ပြင်းပြင်း နင်းပီး ၀င်သွားရော။ ကျနော်လည်း သက်ပြင်း ခိုးချရင်း ကိုယ့်အိပ်ခန်းထဲ ကိုယ၀်င်လာခဲ့ ရော ဆိုပါတော့လေ။ ဒါနဲ့ပဲ မနက်မိုးလင်း သွားပြန်တယ်။ ကိုင်း! ကျနော့် ညီအကိုတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်မရှည် တော့ဘူး ထင်တယ်။ အောဝတ္ထု မဟုတ်လေ တော့ကာ ဖြစ်ချင်တိုင်း လျှောက်မဖြစ်ဘူး ရယ်။ ကျနော်လည်း ကိုယ်တွေ့ လေးကို . ဘာညာနဲ့ ကျနော့် ပေါင်ပေါ် တင်ထား တဲ့ ကလေးကို လာဆွဲယူတော့မှ ပက်လက် ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်နေလျှက်နေ သူ့ကို မော့ကြည့် လိုက်မိတယ်။ လူကိုဖျင်းကနဲဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ ဘာဖြစ်ရမလဲ. ဒင်းက ထုံးစံအတိုင်း စွပ်ကျယ် ဂျိုင်းပြတ် လေး ၀တ်ထား တာကိုး။ လက်မောင်း ချောမွှတ်မွှတ်လေး နှစ်ဖက်က သမီးကို လှမ်းယူ လိုက်တော့ ကျနော့် ပါးနဲ့ ပွတ်တိုက် သွားတဲ့အပြင် ကိုယ်ကို ကိုင်းထားတော့ အောက်က ဘာဆို ဘာမှ မ၀တ်ထားတဲ့ ချိုဗူးကြီး၂လုံးက မီးရောင် ဖွေးဖွေးအောက်မှာ ထင်းထင်းကြီးရယ်။ ကလေး ခေါ်မှာကို ချက်ချင်း မခေါ်သေးပဲ . မေမေ ချော့သိပ်မယ်.
တတ်နိုင်သလောက် အဆင်ပြေအောင် ရေးပြနေတာပါဗျ။ ဆိုလိုတာ က ဗျာ။ မိုးရွာတဲ့ နေ့မှာ တစ်ကုတင်ထဲ တူတူအိပ် ရင်း သူ့ကို ကျနော် ချိုစိ့၊ု အဖုတ်လျှက် ပေးလိုက်မိတယ်။ နောက်ထပ် ၃-၄ရက် နေတော့ တက်အုပ် လိုက်ကော.... လို့ ငေါ့တော့တော့ အသံနဲ့ အငေါ် တူးလာတယ်။ အလုပ်သွားတယ် ထင်နေတာ အလှပြင်ဆိုင် လစ်သွားတာ နေမယ်ဗျ။ ... သူဌေးလေ သွားချင်မှ သွားမှာပေါ့ .. နင်က အလုပ် မသွားဘူးလား ... လို့ . အဲ့လို ရေးလိုက်ရင် လည်း ရတာပဲ။ ဖတ်လို့ ကောင်းမလား? မကောင်းဘူး နော့်။ ဒါကြောင့် အဖြစ် အပျက်လေး ကို အတိအကျလေး ရေးပြ နေတာ။ စိတ်ကလေး နည်းနည်း ရှည်ကြပါဦး .. လို့ ကြိုပြောထား ချင်တယ်။ ဆက်ဖတ်ကြပါဦးဗျ။ မနက်မိုးလင်းတော့ နေတောင် အတော်မြင့်နေပီဗျ။ ဒါတောင် ကျနော့် အခန်းတံခါးကို မေ က တဒေါက်ဒေါက် ခေါက်ပီး နိုးလို့ ထ လာတာ။ မဟုတ်ရင် ဘယ်လောက်ထိ အိပ်ပျော် နေဦးမလဲ မသိဘူး။ မနေ့ညက တလူးလူး တလှိမ့်လှိမ့်နဲ့ အိပ်လို့ မပျော်ဘူး။ ဆေးလိပ် ထ ဖွာလိုက် ပြန်အိပ်လိုက်၊ ဟိုတွေး ဒီတွေး လုပ်လိုက်နဲ့ မိုးလင်းခါနီးမှ အိပ်ပျော် သွားတာလေ။ ငါအပြင်သွားမယ် .. တယ် နိုင်နင်းပါလား.. သူ့ကို မကြည့်ပဲ ပန်းကန် ဆေးရင်း စကားလှမ်း ပြောလိုက်တော့ .. ငါက .. ကလေး ကြည့်ထားဦး . ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ မီးဖိုခန်း တံခါးဝမှာ မေ တစ်ယောက် ရပ်နေတာ တွေ့တော့ ပန်းကန် ဆေးနေရင်းက လှမ်းအကဲခတ်ရင်း ရယ်ချင် သွားတယ်ဗျ။ သူ့ဆံပင်ရှည်တွေကို အဖျားမှာ အလိပ်လိပ် ကလေးတွေ လုပ်လာတာဗျ။ မျက်နာကလည်း မချိုမချဉ်ရယ်။ လက်ထဲမှာ ပလတ်စတစ် ထုပ်လေးတစ်ခု ကိုင်လာတာကို တိုင်မှာချိတ်ရင်း ပြန်ထွက်သွားတယ်။ ခဏနေတော့ အဲ့ဒီ အ၀တ်အစား လဲလာဟန် တူတဲ့ အဲ့ဒီ မမလေး ခုနက အထုပ်လေးကို ယူလာပီး ပန်းကန်စင်က ပန်းကန် တစ်လုံးထဲ ထည့်ပီး ဇွန်းတပ်တယ်။ .... မီးဖိုထဲမှာ ချက်စရာတွေ ၀ယ်ထားတယ် လို့ အခန်း အပြင်ကနေ အော်သွားသံရယ်၊ ကားမောင်း ထွက်သွားသံ ရယ် ကြောင့် လူးလှဲ ထလိုက်ရတယ်။ သမီးလေးက ဧည့်ခန်းထဲမှာ သူ့ဖာသူ အရုပ်လေးတွေနဲ့ ဆော့နေ ရှာတာ တွေ့လို့ ရေချိုးခန်း ထဲဝင် မျက်နာသစ် ကိုယ်လက် သန့်စင် လိုက်တယ်။ မီးဖိုခန်းထဲက ထမင်းစား စားပွဲပေါ်မယ် ထမင်းကြော်နဲ့ ကော်ဖီချိုင့် အသင့် ဖြစ်နေတာ တွေ့လို့ မနက်စာ စားလိုက် တယ်။ စားပွဲပေါ်က ဟင်းတောင်းထဲမှာ ဈေးက ၀ယ်လာဟန် တူတဲ့ အသား တချို့ အသီးအရွက်တချို့ တွေ့တာနဲ့ စားသောက် ပီး ပီးချင်း ထပီး အကုန် လှီးချွတ် ခုတ်ထစ်ပီး ချက်ပြုတ်ဖို့ ပြင်ရတော့တယ်။ မေ က ထမင်း ပြန်စားမယ် ထင်တာပဲ။ ချက်ပြုတ်ပီး သွားတော့ ခဏနားရင်း သမီးကို ငါးနဲ့ ထမင်း ချေထား တာလေး ချော့မော့ပီး ခွံ့၊ ဧည့်ခန်း ရှင်း၊ မီးဖိုချောင် ရှင်း လုပ်နေရင်း နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ၁၁နာရီလောက် ရှိသွားပီ။ မိုးမရွာတဲ့ အပြင် နေကြဲကြဲကြီး ပူနေတော့ကာ အလုပ်ရှုပ် နေတဲ့ ကျနော် ချွေးပြန် လာတယ်။ အင်းကျီချွတ်၊ ပုဆိုးချွတ်ပီး ဘောကန် ဘောင်းဘီတိုလေး နဲ့ လဲလကိုမှ လူလည်း နေသာ ထိုင်သာ ရှိ သွားရော။ အပေါ်ပိုင်းဗလာ ဘောင်းဘီတိုလေးနဲ့ အားလုံး ရှင်းလင်းပီးစီး သွားတော့ မီးဖိုခန်းထဲက ဘေစင်မှာ ခုနက ချက်ပြုတ်ထားတဲ့ ပန်းကန် ခွက်ယောက်တွေ ဆပ်ပြာရည် စိမ်ထားတာ ဆေးကြော နေတုံး ကားသံကြားလိုက်ရတယ်။ မေ ပြန်လာပီ ထင်တယ်ဗျ။ ဒီနေရာမှာ အကုန် ပြန်ရေး ပြရတော့မယ် ထင်တယ်။ အရင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရေးခဲ့ ဖူးတဲ့ ဇာတ်ကွက်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပဲ ဒါပေမယ့် မူကွဲတယ် အဟီး။ အိမ်ထောင်မှု . အို! .
..” ( ပါးစပ်ရှေ့ ရောက်လာတဲ့ ဒိန်ချဉ် ဇွန်းကို ရှလွှတ်ကနဲ စုပ်ယူလိုက်ပီး မျိုချ လိုက်တာ နင်သလိုလိုတောင် ဖြစ်သွားတယ် အဟီး ) “ မနေ့ညက တချွတ်ချွတ်နဲ့ အသံတွေ ကြားနေရတယ် အိပ်မပျော်ဘူး မလား” “.” “ ... ရင်ပူ နေတာပေါ့ ဟုတ်လား ..... ဘာဖြစ်နေတာလဲ နင့်ရုပ်က” “...... ဘာလို့ ပြန်ခိုင်း လိုကတ်ာလဲ ကော သိတယ်မလား .. .. ဒေါ်ကြီးကို ငါ တမင်ပြန်ခိုင်းလိုက်တာ နင်သိပလား.. အပြင်မှာ သောက်ရမ်း ပူတယ်ဟ.... အဟိ... အင်း.. . . အဟမ်း!! ဆိုတဲ့ ချောင်းဟန့်သံ ကြားမှ လန့်ပီး မျက်နာလွှဲ လိုကရ်တယ်။ “ရော့! ဒိန်ချဉ် ပါးစပ်ဟပါဆိုနေ. ကဲ! ဘုရားဖြစ်မယ့် အုတ်နီခဲကြီး .” “ ... ပါးစပ်ဟ . ရော့! ငါ့ကောင်လေး အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်ထားရတာ အမောပြေလေး ... ငါ့ မျက်နာတောင် သေချာ မကြည့်ရဲတော့ လောက်အောင် ကြောက်နေတာ ဟုတ်လား? . ..” ပြောပြောဆိုဆို ဆူဆူဆောင့်ဆောင့် နဲ့ လက်ထဲက ဒိန်ချဉ် ပန်းကန်ကို ဂွပ်ကနဲ ပန်းကန် စင်ပေါ် ဆောင့် ချ လိုက်တယ်။ ကျနော့်ကို မျက်နာချင်းဆိုင် ဖြစ်သွားအောင် ပုခုံးကို ကိုင်ပီး ဆွဲလှည့် လိုက်တယ်။ “....... ငါလည်း နင့်ကို သတိရတာနဲ့ ဒိန်ချဉ် ၀င်ဝယ်လာတာ ........” “. အဲ့ဒီ စွပ်ကျယ် အဖြူတွေက တီရှပ်လို စွပ်ကျယ်တွေဗျာ။ အခုဟာက ယောက်ျား လေးတွေ ၀တ်တဲ့ စွပ်ကျယ်မျိုးဗျာ။ လည်ပင်း အ၀ိုက်နဲ့ မြင်းခေါင်း တံဆိပ် စွပ်ကျယ်လို မျိုးဟာ။ အောက်ကလဲ ဘာမှ မပါဘူး။ ရက်စက်ချက်။ အ၀ိုက် အ၀န်းတွေ အပြင်၊ နိ့သီုးခေါင်း ထောင်ထောင် လေးပါ မြင်နေရတယ်။ လုံးဝ ဗြောင်ကြီးဗျာ ခင်ဗျားတို့ မျက်စိထဲ မြင်လားတော့ မသိဘူး။ ၀ါဝင်းစိုပြေတဲ့ အသား အရည်ကြောင့် ထင်းနေတဲ့ ကိုယ်လုံး တောင့်တောင့်လေးကို ဖုံးထားတဲ့ အ၀တ်တွေက တစ်ဝက် တစ်ပျက် ဖြစ်နေပီဗျ။ အောက်ကလည်း ထမီ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော့် လိုပဲ ပေါင်လယ်လောက် ရောက်နေတဲ့ ဘောင်းဘီ အနီရဲရဲလေး ဆိုတော့ ပေါင်တံ ဖွေးဖွေး ဖြောင့်ဖြောင့် လေးကလည်း ထင်းနေတာ။ ရင်ညွှန့်သား ၀င်းဝင်းလေးနဲ့ အောက်က စွပ်ကျယ်က တအားကြပ်သလို ဖြစ်နေတော့ ချိုဗူးကြီး၂လုံးက ဆွဲမသလို ဖြစ်ထားတော့ စွပ်ကျယ် အနားစက ဗိုက်သား ရှပ်ရှပ်လေးကိုတောင် မထိနိုင်တော့ဘူး လေထဲမှာ လွှတ်နေတာ။ ကျနော် အာခေါင်တွေ ချက်ချင်း ခြောက်ပီး တစ်ကိုယ်လုံး သွေးတွေ ဆူဝေလာတယ်။ . .. အဲ့ဒါက ဘာဖြစ်နေတာတုံး .... ငါ့ရှေ့မှာ မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်ပေါက်စ ကလေးလို လာလုပ် မနေနဲ့ စိတ်တို . ဆိုပီး အနားကို ခွံ့ပေးဖို့ ကပ်လာတော့ ဘေးတိုက် အနေအထား ကနေ သူ့ကို ကြည့်လိုက် မိတယ်။ မျက်လုံးကို ပြာသွားတာပဲ ဆရာတိ့ေုရ။ ကျနော် ပြောပြခဲ့ တဲ့ အထဲမှာ မေ စွပ်ကျယ် ဖြူဖြူလေးတွေ ၀တ်ထားတယ် ဆိုတာ ခဏ ခဏ ပါတယ် မလားဗျ။ အင်း .... ဘာဖြစ်နေတာလဲ........
. နင့် အင်းကျီဟောင်း လေးတွေကို ခိုးနမ်းခဲ့ ရတာ နင်မသိပါဘူး မောင်ရာ . ဟီး .မေ့" ကိုဖက်ထားပေးကွာ .” “ .. .... နင်ရှောင်နေတဲ့ ရက်တွေက . ချစ်တယ်ကွာ ......... မောင် ပွေ့ထားတယ် လေကွာ” “ . မလွှတ်ပူးကွာ. တအား ဖက်ထား . အကြည့်တွေ ထဲမှာတင် ၂ယောက် လုံးရဲ့ ဆာလောင် တက်မက် မှုတွေ ကို မြင်သွားကြသလား မဆိုနိုင်ဘူး။ ဘာစကားမှ ပြောစရာကို မလိုတော့ပဲ ပြိုင်တူ ဆိုသလို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အတင်း ရှေ့တစ်လှမ်း တက်ပီး ဆွဲဖက် ထားလိုက်တာ လွှတ်ထွက်သွားမှာ စိုးတဲ့ အလားပဲ။ ကိုယ်လုံးချင်း ပူးကပ်သွားမှ သတိထား လိုက်မိတာက သူ့ ကိုယလ်ုံးလေးက တဆတ်ဆတ်ကို တုန်နေတာဗျ။ ၂ယောက်လုံးရဲ့ ပါးစပ် ကလည်း ကယောင် ကတမ်းတွေ လျှောက်ပြော ကုန်ကြတာဗျ။ ဘာတွေမှန်းကို မဆိုနိုင်ဘူး။ ကျနော် မှတ်မိသလောက် ပြန်ရေးပြ ရရင်. ငါဘာမှ မသိဘူး ငါ နင့်ကို ချစ်လိုက်တာ မောင်ရာ” “ .... ခဏနေဦး မေလေး ........ မေလေး . မောင့် ကိုယ်က ချွေးတွေ သံတွေနဲ့ အတင်းဖက် မထားနဲ့ ... ဟာ” “ . အဲ့ဒီမှာဗျာ. မေ့ ဒူးတွေ ပျော့လာလို့ ခွေကျ တော့မယ် ...... မောင်" ... ဟောဗျာ! .. " .” ( အခြေနေကို စောင့်ကြည့် ကာလ ပီးဆုံးသွားပီမို့ ဆက်ဆွဲမယ် ညီအကို တို့ရေ။ တမင် သက်သက်ညစ်ပီး ရပ်ထားတာ မဟုတ်ကြောင်းလေး အသိပေး ချင်ပါတယ်။ ကိုပေါနဲ့ အူးဇော်အူးတို့ ဟိုဖက်မှာ နှုတ်ခမ်း တစ်လံ ပန်းတစ်လံနဲ့ ရန်ထောင် နေတာ မြင်ကြတယ် မလား . ငါ နင့်ကို လွမ်းလို့ မလျှော်ရ သေးတဲ့ .. " .လာပီ . အဟားး .. ဟီး။ ဆက်ပါပီ ခင်ဗျာ ) မေက ကျနော့် ပုခုံးကို စုံ ကိုင်ပီး မျက်နာချင်းဆိုင် ဖြစ်အောင် ဆွဲလှည့် လိုက်ရင်း ဒေါသ သံလေး နဲ့ အပေါ်ပိ့စ်ုက ရေးခဲ့သလို ဆူဆောင့်ဆောင့်နဲ့ ရန်တွေ့လာတယ်။ အဲ့ဒီ မတိုင်ခင် ညကထဲက မိန်းမ တစ်ယောက်က ရေလာ မြောင်းပေး လုပ်နေတာတောင် အူတူတူ လုပ်နေခဲ့တာ၊ ခုလည်း ကြက်ကြီး လည်လိမ် ခံထားရသလို ငူတူတူကြီးနဲ့ တုံဏှိဘာဝေ လုပ်လွန်းလို့ သူက ပေါက်ကွဲ လာတာ တွေက ကိုဇော်ဦး ပြောသလို မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်ကြီးကိုး ဆိုတာလို သိပ်တော့ ယုတ္ထိ မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ် မလားဗျ။ ကိုယ်တွေ့ဆို ပေမယ့် မယုံရင် ပုံပြင်မှတ်ကြပါ ဆရာတို့ရယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်လည်း ခင်ဗျား တိ့လို သာမန် ယောက်ျား တစ်ယောက်ပါ။ လစ်ရင် အုပ်ချင်တဲ့ ကောင် တစ်ကောင် ပါပဲ။ သူငယ်ချင်း အပေါ် သနားတာ ရှက်တာ၊ ငဲ့ညှာတာ အဲ့လို စိတ်တွေကြောင့် ကျနော် မတုန်မလှုပ် ဖြစ်နေ ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင် ခုလို ပေါက်ကွဲ ပွင့်ထွက် လာတော့ ခင်ဗျားတို့ ကျနော့် နေရာမှာဆို ဘာလုပ်မလဲဗျ။ သူနဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင် နေရာကနေ ဘေစင် ဖက်ကို ကျနော် ပြန်လှည့် လိုက်ပီး ဆပ်ပြာမြုပ်တွေ ပေနေတဲ့ လက်ကို ရေသေချာ ဆေးလိုက်တယ်။ ခုနက သူ့ကို သေချာ မကြည့်ရဲပဲ မျက်လွှာချပီး ခေါင်းငံ့ထုားခဲ့ရာ ကနေ လက်ဆေးပီး သူနဲ့ မျက်နာချင်း ပြန်ဆိုင် လိုက်တော့ မျက်လုံးချင်း ဆုံပီး စိုက်ကြည့် လိုက်တယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းကို တအား ကိုက်ထားရင်း ကျနော့်ကို ပြန်စိုက် ကြည့်လာတယ်။ ......” “ . ဟင့်အင်း! ဟင့်အင်း! ငါ နင့်ကိုယ်နံ့ကို အရမ်းကြိုက်တယ် .” .....
အဲ့ဒီလိုတွေ ပြောနေရာ ကနေ သူက ကျနော့်ကို တင်းတင်းဖက်ထားရင်း အပေါ်ပိုင်း ဗလာဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို ပါးအပ်ပီး လျှောက်ပွတ် နေတာဗျ။ ကိုင်းဗျာ ဘယ် သကောင့်သားက တောင့်ခံ ထားနိုင်တော့ မှာတုံး။ ကျနော် လည်း သူ့ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေး လေးကို ပွေ့ပိုက်ထားရင်း ကနေ ကျောလေး ပွတ်ပေး၊ ဘောင်းဘီ အနီရဲရဲလေး အောက်က တင်ပါး အိအိကြီး တွေကို အုပ်ကိုင်ပီး ပွတ်သပ် ဆုပ်ချေ ပေးနဲ့ အလိုလို တံြု့ ပန် မိနေတာပေါ့။ အဲ့လိုတွေ ပူးကပ်ပီး တုန်တုန် ရီရီနဲ့ အချစ်ဆိပ် တက်နေ ကြရင်း ရုတ်တရက် ကျနော့် တစ်ကိုယ်လုံး ဖျင်းကနဲ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို ပါးနဲ့ပွတ်နေရာကနေ သွားချွန်ချွန် လေးတွေနဲ့ မနာအောင် ဖွဖွလေး လျှောက်ကိုက် လာတာကိုး။ လူကို ဓာတ်လိုက် သလို ဖြစ်သွားတာပဲ။ ဆစ်ကနဲ ဆစ်ကနဲ အရသာလေးကိုး။ သူ့ဆံပင် ရှည်လေး တွေကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင် ထားရင်း အသက်ရှူသံ ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ကျနော် ဖီးလ်တက် သွားတယ်။ မိန်းမတွေ ဟိုကိုက် ဒီကိုက် လျှောက်လုပ်တယ် ဆိုတာ ဘာသဘောလဲ ခင်ဗျားတို့ ကောင်းကောင်း သိကြမှာပါ။ စိတ်တအား ဖြစ်နေတာကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာပဲ မဟုတ်လား။ ရင်အုံ တစ်ခုလုံး ဖွဖွလေး လျှောက်ကိုက်တာ ခံနေရလို့ ထွန့်ထွန့်လူး နေရာကနေ ကယောင် ကတမ်းနဲ့ သူ့ဆံပင်တွေကို တင်းတင်း ဆွဲလုက်ိမိ ပြန်တယ်။ ကျနော့် နို့သီးခေါင်းတွေကို ငုံပီး တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စို့ပေးလာတာကိုး။ ( ဟယ်! ယောက်ျား နို့စို့ ခံရတယ် ဆိုပီး မျက်လုံး မပြူးသွားပါနဲ့၊ သိပ် ကောင်းတာနော့် မယုံ ခင်ဗျားတို့ ကောင်မလေးကို အစို့ခိုင်းကြည်)့ ဘယ်လိုမှ မရတော့ဘူး ဗျာ။ ကျနော့် ဒုံးပျံကြီးက ဘောင်းဘီ အောက်ကနေ ပေါက်ထွက်တော့ မတတ် ထောင်မတ် လာပီ။ ကျနော့် ရင်အုံပေါ် မျက်နာအပ်ပီး နိ့သီုးခေါင်းတွေကို ငုံစို့လိုက်၊ လျှာနဲ့ ထိုးမွှေ လိုက်လုပ် နေတဲ့ မေ့ ကို ဆွဲခွါလိုက်တော့ လိင်စိတ် တအားထနေတဲ့ ၂ယောက်စလုံး တစ်ယောက် အောက်ပိုင်းကို တစ်ယောက် အရင် ငုံ့ကြည့် ဖြစ်ကြတယ်ဗျ။ စက္ကန့်ပိုင်း အတွင်းမှာကို ကျနော်လည်း ၀တ်ထားတဲ့ ဘောင်းဘီတိုလေးကို ချွတ်ပစ် လိုက်သလို၊ သူလည်း (ရှက်စိတ်တွေ ဘာတွေကို လိင်စိတ်က လွှမ်းမိုး သွားတယ် ပြောရမလား) ဘောင်းဘီတို အနီရဲရဲလေးကို ချွတ်ချ ပစ်လိုက်တယ်။ ကုန်းကွကွနဲ့ ဘောင်းဘီ ချွတ်ပီးလို့ အထမှာ ကျနော် ကိုယ်တိုင် သူ့စွပ်ကျယ် အဖြူလေးကို ဆွဲချွတ် ပစ်လိုက်တယ်။ ခုဆို မီးဖိုခန်း ထဲမှာ သူကော ကျနော်ပါ ဖင်တုံးလုံးလေးတွေ ဖြစ်သွားပီ။ လေထဲမှာ တရမ်းရမ်း ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့် လိင်တံ မာတောင့်တောင့်၊ ထိပ်ဖူး နီရဲရဲကို သူက သေချာစိုက်ကြည့် နေသလို၊ ကျနော် ကလည်း အ၀ါရည် လဲ့နေတဲ့ အ၀တ် မပါတဲ့ သူ့ ကိုယ်လုံးလေးကို မှင်တက်ပီး ငေးကြည့် နေမိ သေးတယ်ဗျ။ အစက်အပြောက် တစ်ခုမှ မရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးဗျာ။ ၀ါဝင်းနေတဲ့ နြို့ ကီးတွေ ကလည်း တွဲမကျနေဘူး။ တင်းရင်း နေတာပဲ။ ဗိုက်သားက လုံးဝအဆီပို မရှိပဲ ရှပ်ရှပ်ကလေး (ကလေးမွေးထားတော့ ခွဲထားတဲ့ ဗိုက် ချုပ်ရိုးလေးတော့ ရှိတယ်) အောက်ဖက်က အမွှေး ရေးတေးတေးလေး ပေါက်နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်း ဖောင်းလေး။ ဆတ်ကနဲ ကျနော့်ဟာကို သူလှမ်း အကိုင် ကျနော့် လက်ကလည်း သူ့အဖုတ်ကို လှမ်းကိုင်ဖို့ ကြိုးစားတာနဲ့ ပြိုင်တူ လိုလိုတောင် ဖြစ်သွားသေးတယ်။ သူ့လက်ချောင်း ပျော့ပျော့လေးတွေက ကျနော့် လိင်တံကို အတင်း ဆုပ်မိ သွားတယ်။ .ကြောက်စရာကြီး ..... လို့ သူ့ ဖာသာ ရေရွတ် နေရင်း လက်နဲ့ အုပ်ကိုင်ပီး ပွတ်နေတယ်။ မမီ့တမီ ထိမိသွားတဲ့ ကျနော့် လက်ကလည်း သူ့အဖုတ်ကို တိ့ထို ကြည့်လိုက်တာ အရည်တွေ စို့ပီး ချွဲကျိကျိ ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတယ်။ . မာတောင့် နေတာပဲ..
အသံမြည်ပီး ချော်ချော် ထွက်နေတာ။ ကျနော့် ဂုတ်ပိုးကို လက်၂ဖက်နဲ့ ခိုစီးထားရင်း အားမလို အားမရ အသံလေးနဲ့ ၀င်မလို ဖြစ်သွားပီး . ကြမ်းကွာ .. အမေ့! ဆိုပီး ကယောင် ကတမ်းလေး အော်လိုက်၊ အဲ့လို တွေဖြစ်နေတယ်။ ကျနော် ကလည်း လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်က တစ်ပိုင်း သေနေပေမယ့် အလွှဲလွှဲ အချော်ချော်တွေ ဖြစ်နေတာဗျာ။ နောက်ဆုံး အဲ့လို မတ်တပ် လုပ်နေတာ ဘယ်လိုမှ မ၀င်တော့ တင်ပါး အိအိကြီးတွေကို စုံကိုင်ပီး ဆွဲပွေ့လိုက်ရင်း မီးဖိုခန်း အလည်တည့်တည့်က ထမင်းစား စားပွဲပေါ်ချီပီး တင်ပေးလိုက်တယ်။ အသာလေးငုံ့ပီး အရည်တွေ တစိမ့်စိမ့် ယိုနေတဲ့ အဖုတ်ကို လျှာအပြားလိုက် ထုတ်ပီး ပလပ်ပလပ်နဲ့ ၂ချက်လောက် ကုန်း လျှက်လိုက်တာ တွန့်ကနဲ တစ်ချက် ဖြစ်သွားပီး၊ ထပ်အလျှက် မခံတော့ပဲ ကျနော့် လက်မောင်း ၂ဖက်ကို အတင်းဆွဲပီး မရတော့ဘူး! မရတော့ဘူး! ထည့်ပေးတော့ ကွာ လို့ အတင်း ပြောလာလို့ မတ်တပ်ရပ်ပီး ကျနော့် လိင်တံကို အဖုတ်ဝမှာ တေ့ နှုတ်ခမ်းချင်း စုပ်နမ်းရင်း ဖိထည့်လိုက်မှ စီးကနဲ အရသာနဲ့ အတူ တစ်ဝက်လောက် ၀င်သွားတယ်။ အသာလေးပြန် ထိပ်ဖူးပေါ်တဲ့ အထိ ပြန်ဆွဲထုတ်ရင်း ဒုတိယတစ်ချက်မှာ အဆုံးထိ ဆောင့်သွင်း ပစ်လိုက်တော့ နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ အရသာနဲ့ ၀င်ချသွားတယ်။ အဲ့ဒီ နောက်တော့ အသေ ကို ဆောင့်တော့ တာပေါ့။ ခါး ကျင်ကျင်လေးကို လက်၂ဖက်နဲ့ စုံကိုင် ထားရင်း ဆီးခုံချင်း တဖောက်ဖောက် ရိုက်သံ ထွက်လာအောင်ကို ကျုံးတော့တာ ဆရာတို့ရေ။ ကျနော် သေချာ မှတ်မိ နေတာက အဲ့ဒီလို ထမင်းစား စားပွဲပေါ်တင်ပီး အသားကုန် ကြုံးနေကြတဲ့ အချိန်မှာပဲ မိုးတွေက တအုံးအုံး ရွာချ လာသေးတယ်။ မိုးသံ လေသံတွေ ကြားထဲမှာ ၂ယောက်စလုံး အော်ဟစ်ပီးမှကို လုပ်ကြတာ ( ပြန်ပြောရင်း လွမ်းလိုက်တာဗျာ)။ သူလည်း စားပွဲပေါ် လက်ပြန်ထောက်ရင်း ပြန်ကော့ပေးရင်း ............ အားး ... ကြမ်း! .“အမေ့! အာ့ မောင်. မောင်.. မရဘူး ထင်တယ်. အဲ့လိုတွေ လျှောက်အော်တာဗျ။ ကျနော်လည်း သူ့နို့ကြီးတွေ ကို ညှစ်ချေလိုက်၊စို့လိုက်၊ အောက်ကလည်း ကော့ကော့ပီး သွင်းလိုက်နဲ့ အရသာကို အတော် တွေ့နေတာပေါ့။ သူကယိုတိုင်က ဘယ် ကထဲက စိတ်ဘယ်လောက် ဖြစ်နေတယ် မသိဘူး စပီး လုပ်စ ၄၅ချက် လောက် အဆောင့်မှာကို အဖုတ်ထဲက ရှုံပွပွ ဖြစ်သွားပီး တစ်ချီပီး သွားတယ်။ ထပ် ဆောင့်လိုက်တာ နောက်ထပ် အချက်၂၀-၃၀လောက် အရောက်မှာ ကို နောက်ထပ် တစ်ချီ အဲ့လို ညှစ်ညှစ်ရင်း တစ်ချီ ထပ်ပီး ပြန်တယ်။ သူပီး ပီး နေတာကို သိနေတဲ့ ကျနော်လည်း မညှာတော့ပဲ အသေ ဆောင့် တော့တာပေါ့။ ဘယ်လောက်တောင် ကြမ်းပစ်လိုက်သလဲ ဆို ထမင်းစားပွဲက တကျွီကျွီနဲ့ နေရာတွေ ဘာတွေ ရွေ့ကုန်တာဗျ ... ပလောက်! ဆို ချော်ထွက်သွားလိုက် ..” စိတ်မထိန်း နိုင်တဲ့ ကျနော် သူ့ခါးလေးကို အတင်းဆွဲဖက်၊ နံရံကို ကျောကပ် ဖြစ်သွားအောင် တွန်းကပ်၊ ပေါင်တံလေး တစ်ချောင်းကို ဆွဲမပီး မတ်တပ် အနေထားနဲ့ ဒူးကွေးပီး ထည့်ဖို့ လုပ်တာ မရဘူးဗျ။ သူလည်း အံလေးကြိတ်၊ ခြေဖျားလေး ထောက် ရင်း ခံရှာပါတယ်။ လုပ်နေကြမှ မဟုတ်တာ မ၀င်ဘူးရယ်။ ထိပ်ဖူးတော့ မြုပ်သွား သလိုလို ဖြစ်ပီး .. ချစ်တယ် မောင်ရယ်! ... အဟိ။ စားပွဲပေါ်က ငရုတ်ဆီ ပုလင်းတို့ ဘာတို့တွေလည်း ကြမ်းပေါ် အကုန် ပြုတ်ပျက်ကျ အဲ့လိုတွေ ဖြစ်ကုန်တာ။ . ကောင်းလိုက်တာ! . ပလောက်! ကနဲ ..
ဟီး ...မိန်းမနဲ့ မထိတွေ့ ရတာ ကြာနေတဲ့ ကျနော်လည်း ကြာကြာ မခံပါဘူး။ အသားကုန် ဆောင့်နေရင်း ပိုဇေရှင်တောင် မပြောင်းလိုက်ရပဲ အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့ ကို ပီးချင် လာတယ်။ ပီးခါနီးတဲ့ အနေအထား ဖြစ်ဖြစ်လာလို့ တစ်ချက် တစ်ချက် ဆွဲဆွဲထုတ် လိုက်တာကို သူက မကျေနပ်ဘူးဗျ။ ခေါင်းခါပြတယ်။ အပြင်မှာ မထုတ်န့ေဲပါ့ အထဲမှာပဲ အပီး ခံချင်တယ် ဆိုတဲ့ အမူအရာမျိုး။ ကျနော်လည်း ကြာကြာ မအောင့်နိုင်တော့ နောက်ဆုံး အချက် ၂၀လောက်ကို တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ အသေဆောင့် ပစ်လိုက်တာ သူလည်း နောက်ထပ် တစ်ခါ တွန့်လိမ်ပီး ပီးသွားသလို ကျနော်လည်း ခပ်ပြင်းပြင်းကို သူ့အဖုတ်ထဲ အရည်တွေ ပန်းထုတ် ပစ်လိုက်ရင်း ပီးသွားကော ဆိုပါတော့။ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် တောင့်တောင့် တင်းတင်းနဲ့ ချောချော လှလှ ကောင်မလေးကို အားပါးတရ လုပ်လိုက်ရတဲ့ အရသာကြောင့်လား မသိဘူး တစ်ကိုယ်လုံးကို တဖျင်းဖျင်းနဲ့ ကျေနပ် နှစ်သိမ့် သွားတဲ့ စိတ်နဲ့ ပီတိ ဖြစ်သွားတဲ့ အပြင် နားထဲက လေတွေတောင် ထွက်သွားတယ်ဗျ။ သူလည်းကျနော့်ကို ဟီးလေးခိုပီး အတင်း ဖက်ထားရင်း တစ်ကိုယ်လုံး တဆတ်ဆတ် တုန်ပီး မော နေရှာတယ်။ မိုးတွေ တ၀ုန်းဝုန်း ရွာချလို့ အေးနေ တာတောင် ၂ယောက်လုံး ချွေးတွေ ရွှဲနစ် နေတာပဲ။ ကျနော့်ကို အတင်း ခိုစီးထားရင်း နားရွက် နားကပ်ပီး တိုးတိုးလေး ပြောလာသေးတယ်။ “. မေ ..... မ၀သေးဘူးနော် .. ဟီး။ ရှက်သလိုလို .” မေ ပြောသလိုပါပဲ ကျနော်လည်း မ၀ သေးပါဘူး ..... ကျနော်သူ့ကို အလုပ် အသွားအပြန် လိုက်ပို့ရင်း မတော်တဆ အသားချင်းထိ၊ တခါတလေ ပုခုံးဖက် လုပ်နေ ခဲ့တာတွေကို ပထမတုံးက ကြည်နုး မိတာ ကနေ အတော်ကြာ လာတော့ အနားကပ် လာရင်ကို စိတ်ထဲ တဖျင်းဖျင်း ထလာပီး ခန္ဓာကိုယ်က တောင့်တစ ပြုလာတာ .. တဲ့ .. ဟီး) သူ့ မြုံနေတဲ့ စိတ်က ပွင့်ထွက်စ ပြုလာတယ်။ ကျနော် ရှောင်နေတဲ့ ၃ရက်လောက် မှာ တအားကို နေရခက်တယ် တဲ့။ ဒါနဲ့ ဒေါ်ကြီးကို တောက အမျိုးတွေဆီ ပြန်မလား ဆိုပီး လမ်းကြောင်း ဖွင့်ပေး လိုက်တာလို့ ပြောတာပဲ။ ကျနော့်ကို အိမ်ကနေ လာခေါ် သွားတဲ့ ညက ကျနော် လှုပ်ရှား လာမယ်လို့ သေချာပေါက် တွက်ထားပီး စိတ်တွေ အရမ်း လှုပ်ရှား နေခဲ့တယ်တဲ့ . အဟီး။ ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်း သွားခဲ့တော့ ဘာမှကို သေချာ အရသာမခံ လိုက်ရ သလို ကြီး မဟုတ်လားဗျာ။ အပျိုးကလေးတောင် ကောင်းကောင်း မဆင်လိုက်ရဘူး။ ငတ်ငတ်နဲ့ ၂ယောက်သား လိုရင်းကို အရင်သွားပစ် လိုက်ကြတာကိုး။ မကောင်းဘူးလား ဆိုတော့ ကာ မကောင်း တာတော့ မဟုတ်ဘူး လေဗျ။ ခုချိန် အဲ့ဒီ အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်စဉ်းစား ကြည့်မိ တာတောင် စလိုး မိုးရှင်းလေး ပြန်တွေး ယူလိုက်ရတယ်။ ဖြစ်သွားတဲ့ အခြေနေက ရုန်းရင်း ဆန်ခတ် ဆန်လွန်း ခဲ့တာလေ။ ရမ္မက်စိတ်ရဲ့ မောင်းနှင်မှုကို အပြင်းအထန် ခံထားရတဲ့ ကျနော်တို့၂ယောက်လုံး ထူပူပီး အတင်း ဖြစ်ကုန်တာ ဆိုတော့ အရသာကို သေသေချာချာ သိစိတ်နဲ့ ကပ်ပီး ခံစားလိုက်ရ တာမျိုးကို မဟုတ်လိုက်ဘူး ဆရာတိ့ရုယ်။ နားရှုပ် သွားကြသလားတော့ မသိဘူး။ ဆိုလိုတာက ဗျာ ကျနော်နဲ့ သူ စိတ်ထဲမှာ ဖောက်ပြန် နေကြတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေကထဲက ပဲ။ ( နောက်ပိုင်းမှာ သူဝန်ခံ လာတယ်. မောင်! . တဲ့ ) တောင့်တတယ် ဆိုတာက ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သဘော ပေါက်တယ်နော်။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော် ပြောပြခဲ့တဲ့ မိုးရွာတဲ့နေ့က ကျနော် ချိုစို့ အဖုတ်လျှက်ပေး လိုက်မိတော့ (အနားမှာ လာလှဲ အိပ်ခဲ့ တာလည်း ဖီးလ် ယူတာ ... ထပ်လုပ်ကြမယ် ဒါပဲ .
လန့်သလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော်က သူ့အိပ်ခန်းထဲ လိုက်မလာ ခဲ့တော့ ဟိုဖက်ကနေ အံတကြိတ်ကြိတ်နဲ့ တစ်ညလုံး ဒေါဖောင်း နေတယ် ဆိုလားဗျာ။(သနားပါတယ် . ခစ်) အဲ့ဒါနဲ့ပဲ နောက်တနေ့ အလုပ် မသွားဖို့ ဆုံးဖြတ် လိုက်ပီး အလှပြင်ဆိုင်တွေ ဘာတွေ သွားပီး ဆက်ဆီ ဖြစ်အောင် ဆံပင်တွေ ဘာတွေ အဖျားတွေ သွားလိပ် လိုက်သေးတာ။ ပြန်လာပီး ဖြစ်တာ ကတော့ ကျနော် ခင်ဗျားတို့ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ အခုတော့ စည်းကျော် ကုန်ပီဗျာ။ အရမ်း ချစ်တဲ့ သူငယ်ချင်း၂ယောက် မဟုတ်တော့ဘူး။ အခေါ်အဝေါ် တွေလည်း ကြည့်လိုက်ဦးလေ။ မေ တွေ မောင် တွေ ဖြစ်ကုန်ပီ။ သူကျနော့်ကို လိင်စိတ် ဖြေရုံ သက်သက် မဟုတ်ဘူး။ မိန်းမ တစ်ယောက် ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပညာတတ်တတ်၊ ဘယ်လောက် ပြည့်စုံနေပါစေ၊ မာန ထောင်လွှား နေပါစေ အချိန်တန်ရင် အားကိုးစရာ ရင်ခွင် တစ်ခု လိုတယ်ဗျ။ ကျနော် ဘာကောင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ သူ့မိသားစုလေးကို စောင့်ရှောက် နေတယ်။ မိန်းမသားတွေ ချည်းပဲ ရှိတဲ့ သူ့အိမ်လေး သူ့ခြံလေးကို လှတ ပတလေး ဖြစ်အောင် ပြုပြင်ပေး၊ သူ့အလိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ပီး အနောက်ကနေ တကောက်ကောက် လိုက်ပီး စောင့်ရှောက်ပေး နေတော့ အားကိုး တွယ်တာ လာရာ ကနေ အသွေးအသားနဲ့ တည်ဆောင် ထားတဲ့ လူဆို တော့ကာ သဒ္ဒါလွန်တော့ တဏှာကျွန် ဖြစ်ကရောပေါ့။ ခုအရိုင်း စိတ်ဝင်ပီး ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း လိင်ဆက်ဆံ လိုက်မိတယ်။ ပီးသွား တာတောင် တုန်တုန် ရီရီလေးနဲ့ ကျနော့်ကို အတင်းဖက်ထား တာ လုံးဝ မလွှတ်ဘူး။ ကျနော့် မေးစိတွေကို မော့မော့ပီး နမ်း၊ ကျနော့် ရင်အုံထဲ မျက်နာအပ်ပီး တပြွတ်ပြွတ်နမ်း၊ ပါးစပ်ကလည်း မောင် မေ့ကို ချစ်လားဟင် ဆိုပီး တတွတ်တွတ် မေးရင်း မျက်လုံးရွှဲကြီး တွေနဲ့ မော့မော့ ကြည့် လာတာ။ ကျနော် ကကော? ခင်ဗျားတို့ သိပီးသားပဲ ကျနော် သူ့ဆီ မလာခင်က အသည်းကွဲ သလိုလို ဖြစ်ပီး စိတ်လေလွှင့် နေခဲ့တဲ့ ကောင်ဗျာ။ သူ့အိမ်မှာ ၀င်ထွက်ရင်း တတ်နိုင် သလောက် အရာရာကို ခဏ မေ့ထားဖို့ ကြိုးစား နေခဲ့ရင်း ကျနော် အင်မတန်ချစ်တဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်းကို ဖက်လှဲတကင်း ဒီလိုပဲ နေ နေရင်း ခုလို အခြေနေတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ ပြန်ပီ။ အမှန်တိုင်း ၀န်ခံမယ်ဗျာ။ ကျနော် သူ့ကို သံယောဇဉ် အင်မတန် ရှိတယ်။ ခု လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တပ်မက်မှုပါ ရောသွားတော့ အင်မတန်စွဲလန်းမိ သွားပီ။ တစ်ခုလပ် ကလေး တစ်ယောက် အမေ သူငယ်ချင်း မလေး ဆိုတဲ့ ဂရုဏာက သပ်သပ် ထားလိုက်ဦး ခင်ဗျား တိ့ကို သေချာ ပြန်ရှင်း ပြချင်တာ တစ်ခု ရှိသေးတယ်။ ကျနော့် ဘ၀မှာ ပတ်သက် ဖူး တဲ့ မိန်းမတွေ ထဲမယ် မေ့ ကိုဘယ်သူမှ မယှဉ်နိုင်ဘူးရယ်။ သောက်ပို ပြောတယ်ပဲ ထင် ထင်ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ သူအိမ်ထောင် ပျက်ပီးတော့ ဘာကြောင့် တခြားချဉ်းကပ်တဲ့ သူတွေ မရှိဘူး ထင်သလဲ? အင်း! သူ့ရုပ်က တော်ရုံ ယောက်ျား အနားမကပ် ရဲတဲ့ ရုပ်ဗျ။ ပထမဆုံးပို့စ်မှာ ကျနော်ပြောခဲ့ဖူးပါတယ် မတော်တဆ အပြင်မှာ သူနဲ့ ဆုံခဲ့မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ သူ့ကို ငေးကြည့် နေမိလိမ့်မယ်ဗျ။ ယုံတာ မယုံတာ ခင်ဗျားတို့ အပိုင်းပါ နော့်။ ငေးကြည့်ရုံပဲ ရမယ်။ အနားတော့ ကပ်ရဲကြမယ် မထင်ဘူး။ အရမ်းချော အရမ်းလှတာပဲ ဆိုတာထက်.... ကျနော် မပြောပြ တတ်ဘူးဗျာ။ ရှုပ်ကုန်ပီလား မသိဘူး။ တချို့မိန်းမ တွေဗျာ ချောတယ် လှတယ်၊ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုတော့ ချွင်းချက် ရှိနေ တတ်တယ်။ မျက်နာလှတယ်၊ ကိုယ်လုံးက မလှ၊ မျက်လုံး နည်းနည်းစောင်း၊ လက်တံရှည်၊ အရပ်ပု၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အရှက် အကြောက်ကြီး၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိသလို လို ရုပ်မျိုး ပေါက်ချင် ပေါက်နေတာမျိုး အဲ့လို တစ်ခုခုပေါ့ဗျာ။ မေ ကတော့ တစ်မျိုးရယ်။ သူ့ဖာသာ အိမ်နေရင်း အင်းကျီ အနွမ်းလေးနဲ့ပဲ အပြင်ထွက် သွားပါစေဦး လူတွေ ကြားထဲ အဝေးကြနေ လှမ်းကြည့် လိုက်ရင် ထင်းထင်းလေးရယ်။ မျက်နာ အကျအပေါက်၊ အသားအရည်၊ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက်၊ ဆံပင် ကောင်းတာ .
.. မောင် မေ့ကို အရမ်းချစ်တယ်ပေါ့။ အဲ့ဒီလို အချစ်နလံ ထနေရင်း ၂ယောက်စလုံး သမီးလေးကို သတိရ သွားတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ဒီတိုင်း ပစ်ထား မိတာလေ။ ဒါနဲ့မေ တစ်ယောက် အ၀တ်တွေ ကောက်ဝတ်ပီး သမီးလေးကို ပြေးကြည့် တယ်ပေါ့။ ကျနော် ကတော့ ကိုယ့် ဘောင်းဘီတိုလေး ပြန်ကောက်ပီး ရေချိုးခန်းထဲဝင် ရေတစ်ခါထဲ ချိုးနေ လိုက်မိတယ်။ ..... မေရယ် . ဆိုတော့ကာ သူ့ဖာသာ တစ်ခုလပ် ကလေး အမေ မက လို့ ဘာဖြစ်နေနေ (ကျနော်က နဂိုထဲက အဲ့ဒါမျိုး အစွဲတွေလည်း မရှိဘူးရယ်) သာမန် ယောက်ျား တစ်ယောက်သာ ဖြစ်တဲ့ ကျနော် ကြိုက်တာ ပေါ့ဗျာ။ သူငယ်ချင်း ဘ၀နဲ့ သူနဲ့ တူတူ လက်ချင်းချိတ်ပီး လျှောက်သွား ကြရင်း လူတကာက ဟာ ဒီကောင့် မိန်းမက ချောလိုက်တာ ဆိုတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့ ၀ိုင်းကြည့်တာကို သာယာ ဖူးပါတယ်။ သမီးလေးနဲ့ ကျနော်တို့ ၂ယောက် လျှောက်သွား ကြရင် လူတွေက အင်မတန် လိုက်ဖက်တဲ့ မိသားစုလေး အဖေကော အမေကော၊ ကလေးလေး ကောက ဖြူဖြူသန့်သန့် ချောချောလေးတွေဆိုပီး မကြားတကြား ပြောသွားတာ ခံရတိုင်းလည်း သာယာမိ ပါတယ်ဗျာ။ ဟုတ်ပါပီ မောင်ချမ်းလေးရာ မင်း အဲ့လောက် ညွှန်းနေ ရအောင် မင်းနဲ့ အင်မတန် လိုက်ဖက် ညီတယ်ဆိုပါတော့ ဟုတ်လားလို့ ရိသဲ့သဲ့ မေးလာရင်လည်း ကျနော်က အမှန်တိုင်း ပြောရဲပါတယ် လေ။ ကျနော်က ခင်ဗျားတိ့လို သာမန် ရုပ်ရည်ပဲ ပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။ လူချောကြီးလည်း မဟုတ်ဘူးရယ်။ မှန်ရာ ၀န်ခံရရင် သူနဲ့ဒီလိုဖြစ်တာ သူငယ်ချင်းမို့ ဖြစ်သွားတာပါ။ အပြင်မှာ သူတစိမ်း တစ်ယောက် အနေနဲ့ ချဉ်းကပ်ဖို့ ဆိုတာ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဲ့လောက်တော့ ယုံကြည်မှု မရှိလောက်ဘူး ထင်တယ်ဗျ။ ကျနော် ပြောခဲ့ဖူး သလိပုါပဲ ကျနော့်ရုပ်က ပေါက်စီ ရောင်းတဲ့ ပြည်ကြီး တရုတ်ရုပ်ပါ အဟီ့း .. ( ကိုရွှေဘက မိုက်ကမ်းတဲ့ ရှမ်းသူပုန်လို့ ခေါ်ဖူးတယ် ) ဂျစ်ကန်ကန် တရုတ် လူဆိုး ဂိုဏ်းစတားရုပ်မျိုး။ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် ကလည်း တပ်ကြပ်ကြီးလို ဆစ်စ်ပက်တွေ ဘာတွေရအောင် ကစားထားတဲ့ တောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပိုင်ရှင်မျိုး မဟုတ်ရပါဘူး။ မိန်းမ ကြိုက်လောက်တဲ့ အာလူးမျိုးလည်း ဖုတ်တတ်ဖို့ နေနေ သာသာ ထစ်ကနဲဆို ဒေါသက ထွက်တတ်သေးတာမျိုး စိတ်က လက်တစ်ဆစ်နဲ့ တစ်ဖက်သား မခံချင်အောင် လျှောက်ပြောတတ်တဲ့ သောက်ကျင့်ကလည်း ရှိသေးတယ်။ ( ဒါပေမယ့် ကျနော် ဘာပြောပြော မေ ကတော့ သောက်ဂရု ကို မစိုက်ဘူး တဟားဟားနဲ့ အော်ရယ် တတ်တယ်ဗျ) ကဲ! ကိုယ့်ဂုဏ် ကိုယ်ဖော်နေတာ များနေပီ။ ဆက်ပြောရအောင်။ အဲ့လို ဆိုတော့ကာ ကျနော်ကတော့ ဘာပြောစရာ လိုမလဲဗျာ။ ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ချစ်တယ်ဗျာ။ ခုလို လက်လွန်ခြေလွန်တွေ ဖြစ်ကုန်တာလည်း နောင်တမရမိတော့ဘူး။ စိတ်ထဲမယ် အို! မောင်ချမ်း မင့် ဘ၀ အခြေတကျဖြစ်ဖ့လို မ်းစမြင်ပီ သမီးလေးနဲ့မိန်းမ နဲ့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့ ပျော်လိုက်တာအရမ်းပဲဟီဟိ။ သူက ကျနော့်ကို အတင်းဖက်ပီး ချွဲနေတာကို ကျနော်ကလည်း ကြည်ကြည် နူးနူးနဲ့ နဖူး ပြောင်ပြောင်လေးကို မွှေးကျူရင်း ချစ်တယ် .(ဖြောင့်တာ ဖယောင်း သွင်းတာ ခောတ် မစားခင် ကာလမှာကို ဆံပင်က ဖြောင့်ပီး လှလွန်းတာ) အဲ့လိုတွေဗျာ။ ပီးတော့ စကားပြောလိုက် ရင်လည်း အသံလေး စာစာ စာစာ နဲ့ လူတကာ ကျတဲ့ အသံလေး၊ ယုံကြည်မှု ကလည်း အပြည့်ရယ်( လူမကြောက်ဘူး ဇတ်ဇတ်ကြဲလေးပေါ့ ) ..
........... ဆိုပီး ကျနော့်ကို ဖက်လာတယ်။ ကျနော့် ကိုယ်ပေါ်က ဆပ်ပြာတွေ အရင်ပြောင်သွားအောင် ရေတဗွမ်းဗွမ်း လောင်းချပီး ချိုးလိုက်တော့ သူက ကျနော့် တစ်ကိုယ်လုံး ကို ပွတ်သပ် ပေးနေပြန်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ခုနက တစ်ချီ ပီးထားလို့ ငြိမ်နေတဲ့ ကျနော့် ဒုံးပျံက တဖြေးဖြေးချင်း ပြန်တက် လာပြန်ရော။ ကျနော်လည်း ရေဆက် မလောင်း နိုင်တော့ဘူး .ဆပ်ပြာတိုက် သေချာ ပွတ်သပ် ဆေးကြောနေတုံး ရေချိုးခန်း တံခါးခေါက်သံ ကြားလိုက်ရတယ်။ “.... မောင်! တံခါးဖွင့်စမ်းပါ..။.........။ ............ တူတူ ချိုးမယ် လေကွာ ...... အော်သံနဲ့ မေ တစ်ယောက် အပျိုပေါက် မလေးလို လွှားကနဲ ခုန်ဝင်လာတယ်။ သမီးလေးကော ဆိုတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အရုပ်တွေနဲ့ ဆော့ရင်း ကွပ်ပျစ်လေးပေါ် အိပ်ပျော် နေရှာလို့ အိပ်ခန်းထဲ ပွေ့ပီး စောင်ခြုံ သိပ်ခဲ့ ပီတဲ့။ ပြောပြော ဆိုဆိုနဲ့ သူ့ ကျောလည် လောက်ရှိတဲ့ ဆံပင်တွေကို အုတ်ကန် ဘောင်ပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ဆံညှပ်တစ်ခု ယူပီး နောက်စေ့ နားမယ် ချည်ပီး ညှပ်ထားရင်း အ၀တ်တွေ ချွတ်ချပစ် လိုက်ရင်း ... ဗျို့။ ခွက်ကို ရေကန်ထဲ ဖလပ်ကနဲ ပစ်ချလိုက်ပီး မေ့ ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေးလေးကို ထွေးပွေ့လိုက်ရင်း နှုတ်ခမ်း နွေးနွေးလေးကို အသေ စုပ်နမ်း ပစ်လိုက်တာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ။ မေကလည်း ကျနော့် နှုတ်ခမ်းကို ပြန်စုပ်ရင်း လျှာနဲ့ပါ ကျနော့် နှုတ်ခမ်း၂လွှာထဲ ထည့်ပီး မွှေကရော။ အောက်ကလည်း မာတောင့်တောင့် ကျနော့် ကောင်ကြီးကို လက်ပြန် အုပ်ပီး ကိုင်ထားရင်း လျှောတိုက်ပီး ဆော့တော့ တာပဲ။ ဒီတစ်ချီတော့ ခုနက လို ဘာဖြစ်မှန်း မသိ ဆက်တိုက် ကြမ်းဖို့ထက် တငွေ့ငွေ့နဲ့ အရသာခံရင်း အုပ်ကြဖို့ ပြင်နေကြတယ် ဆိုပါတော့လေ။ ။.. ဟိတ်! ကနဲ ..။........ ဘာကိစ္စ ကလန့်ထိုး ထားရတာလဲ မေ့ ကို ကြောက်လို့လား ..............” ဆိုတဲ့ အော်သံကြားလိုက် ရလို့ ဖွင့်ပေး လိုက်မိတော့ ...... ခု ဖွင့်.
.ကျနော့် ညီအကိုတွေကို တောင်းပန်လိုက်ပါဦးမယ်။ ဒီဟာကို ရေးနေတာ ပြတ်တောင်း ပြတ်တောင်း ဖြစ်နေပီ ထင်တယ်ဗျာ။ အမှန် တိုင်း ၀န်ခံရရင် မအားတာထက် အားတဲ့ အချိန်လေး အပြေးအလွှား ကွန်ပြူတာရှေ့ထိုင် post reply: ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်ပီး စာရေးမဟဲ့ ဆိုပီး ကြံလိုက်တိုင်း တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အရေးကိစ္စ ပေါ်ပေါ်လာတယ် ဆရာတိ့ေုရ။ ကိစ္စများမြှောင် လူတို့ဘောင် ဆိုတာ ကိုးနော့်။ တစ်ခေါက်လည်း မဟုတ် နှစ်ခေါက်လည်း မဟုတ် ဒီလိုတွေချည်း ဆက်တိုက်ဖြစ် ဖြစ်နေတာဗျို့။ ဘယ်နည်းနဲ့ မဆို ဒီကိုယ်တွေ့လေးကို မပီးမချင်း အတင်း တွန်းပီး ရေးပစ်လိုက်ဖို့ အားတင်း ထားပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ လည်း ကျနော် ရေးနေတာလေးကို စောင့် ဖတ်နေ လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်း ရေးနေတာ မဟုတ်လေတော့ ရေးရတာ ဒီလောက် မခက်ပါ။ ဖြစ်ခဲ့သမျှ အဖြစ်အပျက်လေး တွေကို ခေါင်းထဲ ပြန်ဖော်လိုက်ရုံ သက်သက်မျှသာ။ ဆက်ပြော ကြစို့ဗျာ။ chann အပေါ်ကပို့စ်မှာ ပြောခဲ့သလို ပါပဲ ဒီတစ်ကြိမ် ကြတော့ ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ကုန်တယ် ဆိုတာ မျိုး မဟုတ် တော့ဘူး။ ဘယ်လို ပြောရမလဲ ဆိုတော့ ကာမ ဂုဏ်စည်းစိမ်ကို တင်းပြည့် ကြပ်ပြည့်ကို ခံစားကြတော့ တာဗျ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နမ်းတာကို အားရပါးရ၊ ကိုယ်လုံးချင်း ထိပီး အပြန်အလှန် ပွတ်သပ် ချော့မြှူတာ ကလည်း တစ်ဆင့်ချင်း .. အဲ့လိုလေး မော့ကြည့်လာတော့ ကျနော် ရေလည် ဖီးလ် ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ (အဲ့ဒီ အကြည့်တွေကို ဒီနေ့ထိ ပြန်မြင်ယောင် နေမိပါသေးရဲ့) ရမ္မက်နဲ့ သံယောဇဉ် ပေါင်းထားတဲ့ အကြည့်မျိုး။ အဲ့လို လေး တစ်ချက် မော့ကြည့်ပီးတာနဲ့ ကျနော့် ဒုံးပျံကို မိုးပေါ်ထောင် သွားအောင် မတ်ထား လိုက်ရင်း ဟိုး အောက်ခြေ ကနေ ထိပ်ဖျားထိ လျှာရဲရဲလေးကို ထုတ်ပီး စလျှက် တော့တာပဲ။ ကျနော်လည်း ရှီးး ကနဲ အသံတစ်ချက် ထွက်ပီး ငြီးလိုက်မိတယ်။ လူကို ကတုန် ကယင် ကြီးရယ်။ အသာအယာ တစ်ချက်ချင်း လျှက်တာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လျှာကိုဗျာ ဘယ်ညာ ယိမ်းပီး ဇတ်ဇတ် ဇတ်ဇတ် အဲ့လိုလျှက်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်း အရင်း ကနေ အဖျားထိ တက်လာလိုက် ပြန်ဆင်းသွားလိုက် အဲ့လိုကြီး လုပ်တာဗျ။ တက်သွားလိုက် ဆင်းလာလိကု လုပ်နေတာ။ လူကို ဘုရားပွဲ ဈေးမှာ ရဟတ်စီး နေရ သလိုပဲ .. ဆိုတဲ့ ရေရွတ် ငြီးတွားသံ လေးတွေနဲ့ ဆူညံ နေတာပါပဲ ဗျာ။ အဲ့ဒီလို နမ်းနေကြရင်းနဲ့ မေ က ရုတ်တရက် ကျနော့်ကို အသာလေး တွန်းဖယ်လိုက်ရင်း ရေချိုးခန်း ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက် ထိုင်ချ လိုကတ်ယ်။ သူ ဘာလုပ်တော့မယ် ဆိုတာ ရိပ်မိလိုက်တဲ့ ကျနော် တစ်ယောက် ရင်ထဲမှာ လှိုက်ဖို သွားတယ်ဗျာ။ ဒါမျိုး မကြုံ ဖူးတဲ့ လူပျို ပေါက်ကလေး မဟုတ်ပေမယ့် ချစ်သူ ရည်းစားလည်း မဟုတ် သူငယ်ချင်းလည်း မက တော့တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက်က ငါ့ကို ဒီလိုလုပ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အသိက တစ်မျိုးကြီးရယ်။ စိတ် တအား ထနေလို့ နီရဲ မာတင်း နေတဲ့ ကျနော့် လိင်တံက လေထဲမှာ တရမ်းရမ်းနဲ့ အငြိမ် နေဖြစ် နေတာ ကို သူ့ လက်ချောင်း ပျော့ပျော့ လေးတွေနဲ့ အသာလေး ဖမ်းကိုင် လိုက်ရင်း ကျနော့်ကို မော့ကြည့်လာတယ်။ အဲ့ဒီမှာဗျာ.. ဘယ်လိုမှန်း မသိပါဘူး။ သူ့မျက်နာ လှလှလေးက ရီဝေေ၀လေး၊ မျက်လုံး ၀ိုင်းစက်စက် လေးတွေကလည်း ချစ်ကြည်နူး နေတဲ့ ဟန်လေး..... အဲ့လိုတွေပေါ့။ ရေချိုးခန်းက အသံလုံတော့ လှိုဏ်သံ တွေ ထွက်နေတော့ ကာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နမ်းရှုံ့တဲ့ အသံ တပြွတ်ပြွတ်တွေရယ်၊ "မေ့" လည်တိုင်လေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ရွရွကလေး နမ်းနေရင်း အိထွားလွန်းတဲ့ ချိုဗူးကြီးတွေနဲ့ တင်သားဆိုင် တွေကို အဆက်မပြတ် ဆုပ်ချေ ပေးလိုက်တော့ . ဟီး။ ဒုံးပျံကို ထောင်ထား လျှက်ကနေ လက်ပြန်ကိုင်ပီး အောက်ကို စိုက်ကျ သွားအောင် ဆွဲထားရင်း ခုနကလို ဇတ်ဇတ် ဇတ်ဇတ်နဲ့ ဒုံးပျံ အပေါ်ဖက် တစ်ခြမ်းကိုလည်း ထပ်လျှက် ပေးနေ ပြန်တယ်။ .. အဟင့်! မောင်.
.. လို့ချော့ရင်း နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးလေးကို ပြွတ်ကနဲ တစ်ချက် နမ်းလိုက်ရင်း နားရွက် နားကပ် တိုးတိုးလေး ...... ဗျ။ သူ့ပါးစပ်ထဲက ပေါက်ကွဲတော့ မတတ် ဖြစ်လာတဲ့ ကျနော့် ဒုံးပျံကြီးကို ကိုယ်ကို ရို့ပီး အတင်း ဆွဲထုတ် ပစ်လိုက် မိတယ်။ ကြာကြာ ခံနေရင် ကျနော် ပီးသွားတော့မှာ လေ။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော့်ကို သောင်းကျန်း ချင်တိုင်း သောင်းကျန်းနေတဲ့ မမလေးက မျက်နာလေးကို ရှုံ့မဲ့မဲ့လေး လုပ်ရင်း မော့ကြည့် လာတယ်။ ....အဲ့ဒီလို အားရအောင် နှိပ်စက် ပီးတော့မှ ဒူးထောက်လျှက် ကနေ ခါးလေးကို မတ်မတ်ကလေး ဖြစ်အောင် အနေအထားပြင်၊ ကျနော့် ဒုံးပျံထိပ်ဖူး ဒစ်ကို လျှာနဲ့ ၀ိုက်ပီး ကစားပြန်တယ်။ လူကို ထူပူနေပီ ကောင်းလွန်းလို့ဗျာ . တဲ့။ ညောင်နာနာ ညစ်ကျယ်ကျယ် လေသံလေးနဲ့ ဆူဆောင့်ဆောင့် အော်လာတယ်။ ဘယ်လို ဟာလေး မှန်း မသိဘူးဗျာ ချစ်စရာလေး။ ကျနော်လည်း ဒူးထောက် နေတဲ့ သူ့ကို အတင်း ဆွဲထူရင်း .ချစ်ကွာ ချစ်ကွာ လို့ ပြန်ပြောရင်း နှုတ်ခမ်းကို တင်းတင်း ကိုက်ရင်း ကျနော့်ကို ကျောပေး တစ်ဖက်လှည့်၊ အုတ်ရေကန်ကို လက်လှမ်း ထောက်ရင်း တင်ပါးကို အနောက်ပစ် ကော့ပေး ထားလာတယ်။ ဒေါ့ဂီ လို လေးဖက်ထောက် တာတောင် မဟုတ်သေးဘူး၊ ကိုယ်ကို အသာလေးကိုင်း မတ်တပ်ရပ် အုတ်ကန်ကို လက်ထောက်ပီး ဖင်ကော့ ထားပေးတာကို သူ့ဖင်တုံး ၀ါဝါ၀င်းဝင်း အိအိ ကြီးတွေက အားရစရာကြီးဗျာ။ ကျနော်လည်း အသာလေး တိုးကပ်၊ ဒူးလေးကွေး၊ တင်ပါးကြီး ၂ခြမ်းကို အသာလေး ဆွဲဟလိုက်ပီး အဖုတ်အိအိ ဖောင်းဖောင်းလေး အ၀မှာ ဒုံးပျံကို တေ့လို့ ကော့ပီး သွင်းလိုက်တယ်။ အာ့! လို့တော့ တစ်ချက် အော်သံ ထွက်လာတယ်။ ကြပ်တယ်ဗျာ။ တင်းကြပ်ကြပ် စီးပိုင်ပိုင် ကြီး။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယအချက်မှာ အဆုံးထိ ၀င်သွားအောင် ထပ်ပီး အားနဲ့ ကော့သွင်း လိုက်တယ်။ အိစက် ချောမွှတ် နေတဲ့ တင်ပါး တွေနဲ့ ကျနော့်ဆီးခုံနဲ့ ထိကပ်သွားပီ။ ဆံပင်ရှည်တွေကို နောက်စေ့ နားမယ် ခေါက်ပီး ကလစ်နဲ့ ညှပ်ထားတော့ ၀င်းမွှတ်မွှတ်လေး ပေါ်နေတဲ့ သူ့ဂုတ်ပိုးလေးကို ကျနော့်နှုတ်ခမ်းနဲ့ အနောက်ကနေ ဖိကပ်နမ်းရင်း လက်နှစ်ဖက်က နို့ကြီး၂လုံးကို အားရပါးရ လှမ်းဆွဲနှိုက်ရင်း တစ်ချက်ချင်း တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်နေမိတယ်။ ရေချိုးခန်းထဲမှာ တင်ပါးကို ဆီးခုံနဲ့ ရိုက်ခတ်မိသံ ဖောက်ဖောက်ရယ်၊ အာ့ ဆိုတဲ့ မေ့ အော်သံလေးရယ်၊ ကျနော့် နှာမှုတ်သံ တရှူးရှူးရယ် က အချက်ကျကျ ဆူညံ နေတယ်။ အချက် ၃-၄၀ ဆယ်လောက် အဲ့လို ပုံမှန်လေး ကပ်ဆောင့် နေရင်း ကနေ ခုနက အစုပ် ခံထားရလို့ ပီးချင်သလိုလို ဖြစ်လာတဲ့ ဖီလင်ကို ဖျောက်လို့ ရသွားတယ်ဗျ။ ပီးချင်တယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ကို ထိန်းလို့ ရသွားပီ ဆိုပါတော့။ ....... ဟီး။ ပီးမှ နှုတ်ခမ်း နီ ရဲရဲလေးနဲ့ ငုံပီး ဖြေးဖြေးချင်း စုပ်ယူ ပစ်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော်လည်း ကယောင် ကတမ်းနဲ့ ခြေဖျား ထောက်ပီး ကော့တက်နေပီ။ တိုက်စစ် အဖွင့်ခံ ထားရ တာက လည်း တစ်နေရာထဲ မကဘူးလေ။ သူ့ လက်တစ်ဖက် က ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို မမီမကမ်းနဲ့ လှမ်းပွတ် နေသလို၊ ကျန်တဲ့ လက်တစ်ဖက်က ကျနော့် ဂွေး တွဲလဲကို ဖွဖွလေး ဆုပ်ပီး ပွတ်သပ် ကစားလိုက်၊ ကျနော့် တင်ပါးတွေကို ပွတ်လိုက် ( ချမ်းကို ဖင်အကိုင်ခံ နေရတယ် ဆိုပီး မရယ်န့ဗျဲ တော်တော် ဇိမ်ရှိတာဟီး ) ၊ ပါးစပ်ထဲ ကျနော့် ဒုံးပျံကို ထည့်ထားရင်း ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် ကလည်း လုပ်နေတော့ကာ ဘယ်လောက် ဇိမ်ရှိနေမလဲ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပေတော့ ဆရာတို့ရေ။ ခဏလောက် နေတော့ ကျနော် မခံနိုင်တော့ဘူး . မောင် မေ့ကို မလုပ်လိုက်ရပဲ ပီးတော့မယ် .. နောက်မှ အ၀စုပ်တော့ လိမ္မာတယ် ငါ့အချစ်ကလေး .. နော် . ဟ! . အရမ်း ချစ်ချင်ပီကွာ ... လို့ ခပ်ချွဲချွဲလေး ပြောလိုက်တယ်။ မေ က အင်း. ဘာလဲကွာ! သူများဖြင့် စုပ်လို့မှ မ၀သေးတာ ကြီး..
.. အမေ့! . အရမ်းဆောင့်တာ အောင့် သလားဟင်” “ကျွတ်! ဘာလဲကွာ... လုပ်ရမလားဟင်” “အင်း. ကောင်းလို့ အော်တာ ကောင်းလွန်းလို့ . တော်တော်ဒူတဲ့ . ငါပါလား .. မောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လုပ်ချင်ပီ ... အဲ့လိုတွေ ဗလုံးဗထွေး အော်ဟစ် ဆူညံ သွားတဲ့ အထိ ဆောင့်ဆောင့်ပီး ကြမ်းပစ်လိုက်တာဗျာ။ မေ့ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး၂ခြမ်းကြားထဲ ကျနော့်ဒုံးပျံက အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပီး ပီးသွားချိန်မှာ မေ့ ကိုယ်လုံးလေး တဆတ်ဆတ်တုန် နေရှာပီး မတ်တပ်တောင် မရပ်နိုင် ရှာတော့ပဲ အုတ်ကန်ဘောင်ကို တတောင်ဆစ်နဲ့ ထောက်ပီး တအင်းအင်းငြီးရင်း ပျော့ခွေ သွားရှာတယ်။ တဆစ်ဆစ်နဲ့ အရည်တွေ ကုန်အောင် ပန်းထုတ်ပီးမှ အားရ ကျေနပ်သွားတဲ့ ကျနော် သူ့ဖင်ကြားထဲက ဒုံးပျံကို ပလွှတ်ကနဲ ဆွဲထုတ်ရင်း ခွေကျခါနီး နေတဲ့ မေ့ကို ဆွဲပွေ့ရင်း ဖက်ထား လိုကရ်တယ်။ သူ့အဖုတ်လေးနဲ့ ကျနော့်ဒုံးပျံကို သွက်သွက်ကလေး သန့်ရှင်းရေးလုပ် ဆေးကြောပစ်လိုက်ပီးမှ မွှေးပွတဘက်နဲ့ ရေစိုသွားတဲ့ သူ့ဆံပင်ရှည်လေးတွေနဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို သုတ်ပေး၊ ကျနော့်ကိုယ်ကိုလည်းသုတ်သက်ပစ်လိုက်တယ်။ မေ့ ကိုယ်လုံး အိထွေးထွေး လေးကို စွေ့ကနဲ ကောက်ချီ မ လိုက်ပီး အိပ်ခန်းထဲကို ကျနော်လည်း ဖင်တုံးလုံး၊ သူလည်း ဖင်တုံးလုံး အနေအထား အတိုင်း ၀င်သွားရင်း ကုတင်ပေါ်ကို အသာအယာ ချထား ပေးလိုက်တယ်။ မိုးက တဝေါဝေါ ရွာနေတုံး ဆိုတော့ ရာသီဥတုက အေးလာပီဗျ။ ကျနော် ကိုယ်တိုင် တီရှပ်တစ်ထည် နဲ့ ပုဆိုးတစ်ထည် ကောက်စွပ်လိုက် သလို၊ သူ့ကိုလည်း အိမ်နေရင်း ၀တ်နေကြ ရှပ်လက်ရှည်လေး တစ်ထည်န့၊ဲ ဘောင်းဘီပွပွ ဒူးဆစ်လောက် တစ်ထည်ကောက်ကပ် ၀တ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ထိ ဘာ စကား တစ်ခွန်းမှ မဆိုပဲ ကျနော် လုပ်ပေးသမျှကို ကလေး .. ဘာတွေ လာ မေးနေမှန်း မသိဘူး ဒါများ သူ့ကိုသူ ဆရာကြီး တဲ့ တောက်!” ဆောင့်တာရပ်ပီး စိုးရိမ်တကြီး လှမ်းမေးမိတဲ့ ကျနော့်ကို ရမ္မက်လွှမ်းတဲ့ ဒေါသ သံလေးနဲ့ အဲ့လို အော်ငေါက်ရင်း တောက်ပါ ခေါက်လာတယ်။ ကျောပေးထားလို့ မျက်နာ အမူအရာကို မမြင်ရပေမယ့် အံလေး တင်းတင်းကြိတ်ရင်း မချိ တင်ကဲလေး ဖြစ်နေမယ် ဆိုတာ သိပါတယ်။ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း . မောင်ရယ် ကြမ်းလိုက်တာကွယ်. ခုပြန်စဉ်းစားရင်း ပြုံးနေမိတယ်ဗျ) အဲ့ဒီနောက်တော့ သူ့ဖာသူ အာခေါင်ခြစ်ပီး အော်ရုံမက ဘာပဲ အသံထွက်ထွက် အသေကို ဗျင်းတော့တာပေါ့။ သူတင် အော်တာလား ဆိုတော့ ကျနော်ပါ မာန်သွင်းရင်း အော်မိ တော့ တာဗျို့။ ဘယ်လောက် တောင် ကြမ်း ပစ်လိုက်လည်း ဆိုရင် သူ့ခေါင်းက ညှပ်ထားတဲ့ ကလစ်ပါ ပြုတ်ကျ၊ အဖျားလိပ် ထားတဲ့ ဆံပင်ရှည် နက်နက်လေးတွေ ကပိုကရို ပြေကျလာပီး ရေကန်ထဲက ရေတွေနဲ့ ထိပီး စိုရွှဲ ၊ မေ့ ပါးစပ်က .. အားး မောင်ရေ...... လို့ ... ဘာဖြစ်တာလဲ ...မောင်ရေ .. သေပါပီ ..“မေ.. သဘောကွာ” ခွင့်ပြုချက် ရသွားတာနဲ့ သူ့ကျောပေါ် မှီထားရင်း ကပ်တွန်းလေး ဆောင့်နေတဲ့ ကျနော် ကိုယ်ကို ပြန်မတ် လိုက်တယ်။ နို့၂လုံးကို လှမ်းဆွဲထားတဲ့ လက်၂ဖက်ကို မေ့ ခါးကျင်ကျင်လေး ဆီကို ပြောင်းကိုင်လိုက်တယ်။ ပီးတာနဲ့ တဖြောင်းဖြောင်း မြည်အောင် အားနဲ့ ပိတ်ပိတ် ဆောင့်တော့ တာပဲ။ ၁၀ချက်လောက် ဆက်တိုက် ဆောင့်ပစ် အလိုက်မှာ ကျော ပေးထားတဲ့ မေ့ဆီက အာခေါင်ခြစ်ပီး အော်တဲ့ အသံ ထွက်လာတယ်။ လိဏှုသံ ပါနေတဲ့ ရေချိုးခန်းဆိုတော့ အသံက အကျယ်ကြီးရယ်။ “မေ.
.. မောင်သက်တို့ တော့ ကလေး တစ်ယောက် အမေ ကိုမှ ကြွေရသလားကွယ် ..... လို့ . လာလာ ဖေဖေလည်း လိမ္မာတယ် ပါးစပ်ဟ ဆိုတဲ့ ခပ်ရွှင်ရွှင် လေသံ ကလေးနဲ့ မေ တစ်ယောက် ထမင်း လှမ်းလှမ်း ခွံ့ ကျွေးခဲ့တာကိုး ဗျာ။ ဘ၀မှာ စားဖူး ခဲ့သမျှ ထမင်း အနပ်ပေါင်း များစွာမှာ ကျနော် အမြိန်ယှက်ဆုံးနဲ့ မမေ့နိုင်ဆုံး ထမင်းပွဲလေး ထင်ပါရဲ့။ တကယ်တမ်း တော့ ကျနော်ဟာ ကိုယ် မပိုင်တဲ့ ကမ္ဘာလေးတစ်ခုမှာ အချိုအချောင် ၀င်ကစွပ် လုပ်ရင်း ပျော်နေမိခဲ့တဲ့ ငမိုက်သား တစ်ကောင်ပေါ့ ညီအကို တိ့ရုာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ အချိန်တုံးကတော့ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ် မေ့လျော့ပီး အင်မတန် ကြည်နူး ပျော်ရွှင် နေမိခဲ့တာပေါ့။ ခုထိ မှတ်မိနေတာလေး တစ်ခု ရှိသေးတယ်ဗျ။ စားသောက် ပီးတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ... ခဏလေး ... နောက်တီး နောက်တောက် ပြန်ပြောလာရင်း .. ငါးမိနစ်လောက် စောင့်ဦး. ဆိုပီး လှစ်ကနဲ အခန်းထဲ ပြေးဝင် သွားတယ်။ အီနေတဲ့ သမီးလေးကို အရင် ချော့ရင်း ထမင်းခွံ့ နေရာက ထမီရင်လျားနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲ ၀င်သွားတဲ့ မေ က တယ်တော်တဲ့ ဖေဖေ လို့အော်ပီး နောက်သွားတော့ ကျနော့်မယ် ရှိန်းတိန်း ဖိန်းတိန်းကြီး ဖြစ်သွား သေးတယ်။ ရေမိုးချိုး ပီးတဲ့ မေ တစ်ယောက် သနပ်ခါး ရေကျဲလေး ပွတ်၊ မွှေးတေးတေး ကိုယ်နံ့လေးနဲ့ ကျနော်နဲ့ သမီးလေး ရှိတဲ့ ထမင်းစားပွဲနား ပြန်ရောက် လာတော့ ဘာမပြော ညာမပြောနဲ့ ကျနော့်ကို ချစ်လိုက်တာ ငါ့ ကောင်လေးရာလို့ တိုးတိုးလေး ကပ်ပြောရင်း ဖက်နမ်းတာ ခံလိုက်ရသေး တယ်။ ကျနော် လည်း မီးရောင် အောက်မှာ ရေမိုးချိုးပီးစ ကြည်လင်နေတဲ့ မေ့ မျက်နာဖူးဖူးလေး (နဖူးပေါ်က ဆံနွယ်စ တွေကို ဘီးကုတ် အ၀ါလေးနဲ့ အပြောင် သိမ်းထားတယ်) ကို ငေးကြည့်ရင်း မေ က အရမ်းချောတယ် ကွယ် လို့ သတိလက်လွှတ် လှမ်းပြော လိုက်မိသေးတယ်။ .. အို! ချောမှာပေါ့ မောင့်ချစ်သူပဲဟာ ...... မောင် . မေ ရေပြေးချိုးမယ်. လို့ ပြောရင်း တခစ်ခစ်နဲ့ ရယ်နေပြန်သေးတယ်။ အဲ့ဒီညက ထမင်းဝိုင်းလေးကို ကျနော် တသက်မမေ့ဘူးဗျ။ သမီးလေးကို ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ထားရင်း ချော့မော့ပီး ထမင်းခွံ့နေတဲ့ ကျနော့်ကို ..ပေါက်စနလေးလို ငြိမ်ငြိမ်လေး ခံနေရှာတယ်။ အားလုံး ပီးသွားမှ ၂ယောက် စလုံး ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲအိပ်ရင်း ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားရင်း မှိန်းနေ လိုက်ကြတယ်။ ၂ချီလောက် ဆက်တိုက် ဆွဲလိုက်ရတော့ နည်းနည်းတော့ ပင်ပန်းပီ ပေါ့ဗျာ။ တိုတိုပြောရရင် ဖက်ထားရင်း တစ်ရေး အိပ်ပျော်သွား လိုက်တာ ညနေစောင်း သမီးလေး တအီအီ လုပ်သံကြားမှ ၂ယောက်လုံးနိုးလာ တယ်ဗျ။ အဲ့ဒီတော့မှ လူးလှဲ ထကြရင်း သူက ကပိုကရိုနဲ့ ကလေးကို ပြေးချော့၊ ကျနော်လည်း မျက်နာလေး ဘာလေး သစ်၊ မှောင်နေပီ ဆိုတော့ မီးခလုတ်တွေ ဘာတွေဖွင့်၊ နေ့ခင်းက ချက်ပြုတ်ထားပီး မစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ကို ပြန်နွေး ပြုပီး ဒါနဲ့ ဗိုက်ကလည်း တကြုတ်ကြုတ် မြည်ပီး ဆာလာ တော့ကာ ထမင်း ပွဲ တစ်ခါထဲ ပြင်တော့တာပေါ့။ မေ က ကလေးပွေ့ထားရင်း ချော့နေရာက ကျနော်ရှိတဲ့ မီးဖိုခန်းထဲ ၀င်လာရင်း ပြုံးစိစိနဲ့ ချစ်မ၀တဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ လာ လာ ကြည့်နေတယ်ဗျ။ ကျနော်လည်း ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ခူးခပ် နေရင်းက မေနဲ့ ကလေးကို ကြည့်ရင်း ခံစားချက်က တစ်မျိုးပဲ။ ဘယ်လို ပြောရမလဲ ကိုယ့်ကိုယကို အိမ်ထောင်ကျ၊ ကလေးတွေ ဘာတွေ ရလိ့၊ု ဘ၀တစ်ခုမှာ အခြေချနေ သလိုလို ဘာလိုလိုကြီးရယ်။ ထမင်းပွဲ ပူပူနွေးနွေးလေး ပြင်ပီးတော့ စားတော့ မလားလို့ မေ့ကို လှမ်းမေးတော့ မေက . သမီးလေး ခဏပွေ့ထားနော်.
..................သမီးလေးကို ထိန်းရင်း စာအုပ် ကိုယ်စီနဲ့ စာဖတ်လိုက်(ကျနော်တ့ကို ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတွေ မဟုတ်လား) စကားစမြည်လေး လှမ်းပြော လိုက်နဲ့ တကယ့် လင်မယား စုံတွဲတစ်တွဲ လိုပါပဲ။ သမီးလေး အိပ်ပျော်သွားတော့ အခန်းထဲပို့ပီး သိပ်ထား လိုက်ခဲ့တယ်။ ဧည့်ခန်း ထဲက ဆက်တီခုံမှာ ကျနော်က ထိုင်၊ သူက ကျနော့် ပေါင်ပေါ် ခေါင်းအုံးရင်း အိပ်၊ နှစ်ယောက်သား ရုပ်မြင်သံကြားက လာနေတဲ့ ဇာတ်ကား တစ်ခုကို တူတူမော့ ဖြစ်ကြသေးတယ်။ ကျနော်တို့ ချာတိတ် ဘ၀က ၂ယောက်လုံး ကြိုက်ခဲ့တဲ့ Terminator2: ဇာတ်ကား လာနေ တာကိုး။ အဲ့ဒီမှာ ရယ်ရတာက ဇာတ်ကား လာတဲ့ အချိန်ဆို ၂ယောက်သား စိတ်ဝင်တစား ကြည့်နေ ကြပီး ကြော်ငြာထိုးပီ ဆို မေ က ဘာလုပ်တယ် မှတ်သလဲ? ကျနော့် ပုဆိုးကို ဆွဲဖြေပီး လိင်တံကို ဆော့လိုက် စုပ်လိုက် လုပ်နေတာဗျာ ......... အဟီး။ ဟိုကောင်က တောင်လာ ပါပီ ဆိုမှ ဇာတ်ကား ပြန်လာပီဆို ..။.................။ ........။... အင့်! ဆိုပီး ပါးစပ်ထဲက ဆွဲချွတ်ပီး သူ့ဖာသူ ဇာတ်ကားကို ဆက်မော့နေပြန်တယ်။ ကြော်ငြာ ပြန်လာတယ်နော်၊ ပုဆိုး ဆွဲချွတ်ပီး ရန်ရှာ ပြန်တယ်။ လူကို ဘယ်နှယ့် ဖီလင်မှန်း မသိပါဘူးဗျာ။ တောင်လိုက် ပျော့လိုက် တောင်လိုက် ပျော့လိုက်နဲ့ စဉ်းစားသာ ကြည့်ကြပါတော့ ညီအကိုတို့ရာ။ ။.......
. ... ကိုင်း အခု ပြောပြခဲ့တဲ့ အခြေနေ အတိုင်းဆို ခင်ဗျားတို့ မောင်ချမ်းကို ဘ၀ သာယာ စိုပြေနေပီ ပေါ့။ တကယ်လည်း ပျော်နေခဲ့တာကိုး။ တချို့ အိမ်ထောင် ကျသွားတဲ့ စုံတွဲတွေ ပြောဖူးတယ် ညားခါစ ကာလတွေဆို တစ်ရက် တစ်ရက် အချိန်တွေ ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်းမသိလိုက်ကြဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါ ဟုတ်လောက် တယ်ဗျ။ ခု ကျနော်အိမ်ထောင် ကျတာတောင် မဟုတ်သေးဘူး။ အချိန်တွေဘယ်လို ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်း မသိ ဖြစ်နေခဲ့တာပေါ့။ ဟိုအရင် ကျနော့် ညီအကိုတွေ ပြောဖူးသလို ကြောင်ခံတွင်းပျက် နဲ့ ဇရက်တောင်ပံကျိုး လိ့ပဲု ပြောပြော.. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခေါ်တာတောင် ဟေ့ရောင် ဘာညာ မင်းနဲ့ ငါနဲ့ ပြောနေကြကိုး။ ကျနော်က အဲ့လို တေးသရုပ်ဖော် အညှီအဟောက်တွေ ပြောပီး မူးမူးနဲ့ ပုံပြင်လေး ကတော့ ဒါပါပဲကွယ်လို့ အဆုံးသတ်ပီး ငါတော့ မရတော့ဘူး အိပ်ပီ ဆိုပီး မှောက်သွားတတ်တယ်။ ကျနော့် ဇာတ်လမ်းတွေ နားထောင်ထားတဲ့ သူတ့ေို တွကတော့ အောက်ခံ ဘောင်းဘီလေးတွေ တစိုစိုနဲ့ ငုတ်တုတ်လေးတွေ ကျန်ခဲ့ကြတာတဲ့ .... . ခွေးငတ်နဲ့ ဖိနပ်ပြတ်(ဒါကတော့ သိပ်မနိပ်ဘူး ထင်တယ် . ဟိ (ကျနော် သူတို့ အဲ့ဒါတွေ နားထောင်ပီး ဖီးလ် တက်နေမှန်း ရိပ်ကို မရိပ်မိ ခဲ့တာဗျ) အဲ့ဒီတုံးက ကျန်တဲ့ ကောင်မလေး၂ယောက်က အိမ်တစ်လုံး တူတငှူားထား ပီး မေ လည်း တခါတလေ လာ အိပ်တတ်သလို၊ ကျနော်လည်း ခုလို မူးပီဆို အိမ်မပြန်နိုင်တော့ဘူး သူတို့ ဧည့်ခန်းမှာပဲ သင်ဖျူးဖျာလေး ခင်းပီး အိပ်တော့တာဗျ။ တခါတလေဆို အရက်မူးမူးနဲ့ ပူတယ် ဟေ့ ဆိုပီး .. . ဟီး) အော စာရေးဆရာ ဖြစ်လာမယ့် ကျနော် မောင်ချမ်း ကလည်း သာမန် အချိန်သာ သောက်ရှက်ကြီးတာ မူးများ နေပီလားဆို အဲ့လို စွန့်စားခန်း တွေကို လေသံ အနိမ့်အမြှင့် အတိုးအကျယ်၊ တခါတလေ အမူအရာလေး တွေတောင် ပါလိုက်သေးတယ်(တေးသရုပ်ဖော်ပေါ့လေ) အဲ့လို အပီအပြင်ကို လျှောက်ပြောတော့ တာလေ။ သူတစိမ်း မိန်းကလေးတွေ ကိုတော့ ဘယ် ပြောရဲမလဲဗျာ။ အဲ့ဒီကောင်တွေ ကတော့ သူငယ်ချင်း အရင်းတွေ ဆိုတော့ ယောက်ျား/မိန်းမ ရယ်လို့ ခွဲခြားမှုမှ မရှိတာ... ဟီး) လို့ပဲဆိုဆို အရူးအမူးတွေ ဖြစ်ခဲ့ ကြရတာ ပေါ့လေ။ ကျနော်တို့ ၂ယောက်စလုံး ရဲ့ မျက်နာမှာ အပြုံးပန်းတွေ ဝေဆာနေတာ အမြဲတမ်းပဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လည်း အရိပ် တကြည့်ကြည့် လုပ်နေကြတာ တချိန်လုံးပဲ။ မနက်ဆို အစောကြီး အလိုလို နိုးနေကြပီး အိပ်ယာထဲမှာ တင်းတင်း ဖက်ထားကြရင်း တီးတိုး သဖန်းပိုးနဲ့ ငယ်ဘ၀ လေးတွေ စမြုံ့ပြန် ရင်း တခွိခွိနဲ့ မြူးတူးလို့။ သူပြန် ပြောပြ တာတွေက (ဟုတ်လား မဟုတ်လား တော့ မသေချာပါဘူး) ငယ်ငယ်က ကျနော် အရက်မူး လာတိုင်း သူတို့မေးသမျှ တဟီးဟီးနဲ့ ကျနော့် ရည်းစားတွေနဲ့ ဘယ်လိုအိပ်တာ ဘယ်လို လုပ်တာတွေ အကုန် လျှောက်လျှက် ပြောတာတွေ နားထောင်ရင်း ဖီလင် တက်ဖူးသတဲ့။ သူတို့ မိန်းကလေး ၃ယောက် ထဲမှာ မေနဲ့ နောက်ထပ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်က အဲ့ဒီအချိန်တုံးက ရည်းစားတောင် မထားဖူးသေးတဲ့ အချိန်ကိုး။ မူးကြောင် ရူးကြောင်နဲ့ ကျနော် တိုးတိုး တိုးတိုး ပြောပြတတ်တဲ့ ရင်သိမ့်တုန် စွန့်စားခန်းလေး တွေကို ကျနော့်ဘေး ဘယ်ညာမှာ ပူးပူး ကပ်ကပ် လေးတွေ နားထောင် ရင်း အောက်က အရည်တွေ စိုရွှဲလို့တဲ့။ (ဒါမျိုးကို မေထုန်လေး မှီဝဲတယ် ခေါ်မလားမသိဘူး .. ဟီ .
အခန်းထဲဝင်ပီး ဂွေသွားလှိမ့်ပီး ထည့်လာခဲ့. ဆိုပီး ပြန်ပက်လာလို့ (သူတို့ ဘဲတွေ ကြားသွားရင် ခက်ရချေရဲ့ဆိုပီး) မသာမလေးတွေ ပေါက်ကရ လျှောက်ပြော မနေနဲ့ လို့ ဟန့်ရသေးတယ်။ အံ့သြစရာ ကောင်းတာက . စိတ်လေ လိုက်တာဗျာ။ အာ! အဓိပ္ပါယ်မရှိတာကြီး. တော်ပါ .... တောင်းပန်ပါတယ် .. ငါတို့ လေ့လာချင်တယ် တဲ့. ဟီး။ နောက်ပိုင်း သူတို့တွေ လည်း ဘဲကိုယ်စီ ရသွားတော့ မှသာ အဲ့လိုကြီး တအားလုံးထွေးလို့ မသင့်တော့ တာမို့ ကိုယ်ရှိန် သတ်လိုက်ကြတယ် ဆိုပါတော့လေ။ ဒါတောင် သူတ့အိုမ်သွားလည် လို့ ဘဲကယိုစီနဲ့ ချက်ပြုတ် စားသောက် ကြည်နူးနေတာ တွေ့ရင် မကြားတကြားနဲ့ ဆွဲပီးပီလား လို့ ကျနော်က အသာလေး ကပ် စ လိုက်ရင်........အင်းကျီ တုံးလုံးချွတ်၊ ဂျင်းပန်ပါ ချွတ်ပီး ဘောင်းဘီတို လေးနဲ့ ကွေးကွေးလေး ထိုးအိပ်ချင် အိပ်နေတတ် တာမျိုးလေ။ အဲ့လိုမှောက်သွားတဲ့ ကျနော့်ကို ဘေးကနေထိုင်ပီး ငါတော့ သူ့ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ပီး ဟိ တက်လာတယ်.. ဟီး . ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ် နင့် လောက်တော့ ဖီးလ်မလာဘူးဟ .. ဘာလဲဟဆိုတော့.. ဆို ...... နင့်ဖာသာ သွားထုတ်လာမလား ငါတို့ ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပေး ရမလား .. ဟား။ တကယ် လုပ်မယ့် ရုပ်တွေဗျ။ ကျနော့်ကို ဆွဲလား ရမ်းလား တွေတောင် လုပ်နေကြပီ။ အဲ့ဒီညက ကျနော့် ခင်ဗျာ ဘောင်းဘီရှည် တောင် ချွတ်မအိပ်ရဲခဲ့ဘူး ခါးပတ်ကို တင်းတင်း ပတ်ပီး မှောက်အိပ် ခဲ့ရတာ ... ပေါ့ ... မလုပ်ကြပါနဲ့ ငါအရက်မူးရင် အဲ့လိုလုပ်လို့ မရလို့ပါ . ဟီး (မိန်းမတွေလည်း နှာဗူးထ တတ်မှန်း ခုမှ သိတာနော့်) သူတ့ကို လူများနေလို့သာ ၀မ်းဘိုင၀်မ်း ဆို တကယ်တက် အုပ် မအုပ် ပြောမရဘူး ရယ် အဟိ။ သူ အဲ့လို ပြောလာမှ အဲ့ဒီ အဖြစ်အပျက် တွေကို သေချာပြန် တွေးကြည့် မိသေးတယ်ဗျ။ ကျနော် အရက်သောက်ပီ ဆို အမြည်းလေး ဘာလေးတွေ ကြော်လှော် ပေးပီး ဘေးကနေ တပြုံးပြုံးနဲ့ မီးထိုး ပေးခဲ့ကြတာ ဒင်းတို့က အညှီ အဟောက် ဇာတ်လမ်းတွေ နားထောင်ပီး ဖီးလ် တက်ချင် လိ့ကိုး။ တော်တော် ဆိုးတဲ့ ဟာလေးတွေ။ ကျနော့် လွယ်အိတ်ထဲက ရတနာဝင်းထိန် စာအုပ်တွေ၊ ကွန်ဒုံး တွေလည်း ခဏ ခဏ အခိုးခံရတယ်။ ပထမတော့ ကိုယ့်ဖာကိုယ် ဘယ်လို ပျောက်သွားမှန်း မသိဘူး။ နောက်နေ့ သူတို့နဲ့  ပြန်တွေ့မှ ကိုကျားကြီး! အာရာဖတ်! ကိုအောင်ဒင်! အဲ့လိုတွေ ခေါ်ခေါ်ပီး နောက်ပြောင်လာမှ (အဲ့ဒါတွေက အောစာအုပ်ထဲက နာမည်တွေ လေ) ဒီကောင်တွေ ခိုးထားမှန်း ရိပ်မိတော့တာ။ ကွန်ဒုံးတွေ ကိုလည်း ဖောက်ပီး လျှောက်တိုင်းကြည့် ပီးရင် လာမေးကြသေးတာ ... ရော့ဒီမှာ ပလတ်စတစ်ခွက်. မထူးဘူးဟာ ဒီမအေဘေးလေးကို ငါတို့ ဘောင်းဘီ ဆွဲချွတ်ပီး တက်အုပ် ပစ်ရင် ကောင်းမလား ဘာညာနဲ့ ထိုင်ကြည့်ပီး ပြောနေကြတာ .. ဟား .. အမငီးဂျာ မူးမူးနဲ့ ဆောင့်ကြောင့် လေးထိုင် လက်အုပ်ကလေး ချီပီး ရှိခိုးဦးတင် တောင်းပန်လိုက်ရတာ. ဟီးဟီး တဲ့ . တဲ့ .. အေး ငါလည်းတူတူပဲ.. နင့် ဟိုရာဘာ အစွပ်လေ အဲ့ဒါ ငါတိ့ေုဖာက်ပီး ဆွဲထုတ်ကြည့်တာ အရှည်ကြီးပဲ ..... (အလိပ် လိုက်ကြီးကို ဆွဲဖြေ ပစ်လိုက်တာ နေမယ်) တကယ့် ကောင်တွေ ဗျာ။ တခေါက်သား ၃ ယောက်လုံး ကျနော်နဲ့ အရက် သောက်ချင်တယ် ဆိုလို့ (အဲ့ဒီတုံးက ဒင်းတို့က အူရိုင်းလေးတွေ) သူတို့အိမ်မှာ သေချာ စီစဉ်ပီး လေးယောက်သား သောက်ကြရော ဆိုပါတော့ မူးလည်း တော်တော် မူးလာကြရော ဘာထရစ်တယ် ထင်သလဲ။ ယောက်ျား သုတ်ရည်ဆိုတာ မမြင်ဖူးဘူး မြင်ဖူးချင်တယ် .. ဟဲ့! နင့်ဟာက အဲ့လောက်တောင် ရှည်သလားတဲ့. သေနာလေး ပြောချင်တာတွေ ပြောပီး ထိုးအိပ် သွားတယ် ... လို့ ငြင်းတော့ သောက်ရမ်းမူးနေတဲ့ အဲ့ကောင် တွေက သောင်းကျန်းတော့ တာပဲ.
...... ဟမ်! ဘာ .. ရောင်နီလာတော့မယ် ...... အိုင်တွေ့ခြေဆေး တဲ့ကောင်........... ပြောင်ချော်ချော် မျက်နာလေးနဲ့ .။ ... လင်းဆွဲလေး မောင်ရေ .... လို့ လည်း မထိတထိ စ တတ်သေးတယ် .. ဆိုပီး စိန်ခေါ်လာတော့ တာပေါ့။ ကျနော် ကလည်း မငြင်းပါဘူး။ ဘယ်အချိန် ကြည့်ကြည့် လုပ်ချင်စရာ ကိုယ်လုံး ကိုယ်ပေါက် ပိုင်ရှင် ချောချောလေးပါ ဆိုနေ ဘယ်ငြင်းမလဲနော့် အဟဲ။ ထုံးစံအတိုင်း အိပ်ယာက ထလာ ကြပီ ဆို ရေမိုးချိုး မနက်စာ တူတူစား၊ သူ့ကို အလုပ်လိုက်ပို့၊ ပြန်လာပီး ကလေးထိန်းရင်း ထမင်းဟင်း ချက်ပြုတ် အိမ်ထောင်မှု ထိန်းသိမ်းပေါ့။ မေ က နေ့လည်စာကို သူ့အလုပ်မှာပဲ စားတော့ တနေကုန် အိမ်မှာ ကျနော် တစ်ယောက်ထဲရယ်။ စာဖတ်လိုက် ခြံထဲ ဟိုလုပ် ဒီလုပ် လုပ်လိုက်၊ သမီးလေးကို ထိန်းလိုက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်း ရတော့တာ။ ညနေစောင်းမှ ရေမိုးချိုး သမီးလေးပါ ခေါ်ပီး မေ့ကို သွားကြို။ (မေ က ကျနော့်ကို မြင်တာနဲ့ မျက်နာလေးကို ၀င်း သွားတတ်တယ်) ကားပေါ်ရောက်တာနဲ့ ဘာမှပြောမနေဘူး ရေမိုးချိုးပီး ကာစ ကျနော့်ကို အလစ်ချောင်းပီး ရွှတ်ကနဲ အရင်ဖက် နမ်းပစ် တတ်တယ်။ အို! ငါ့ကောင်လေးက ရုပ် အတော်သန့်မှန်း ငါ့ဆိုင်က ကောင်မလေးတွေ ၀ိုင်းဝိုင်း ရှိုးမှပဲ သတိထား မိ တော့တယ် ....နင်ဟာ ဖာခေါင်းပဲ တဲ့။ စူပုတ်နေတဲ့ မျက်နာလေးကို ကြည့်ပီး ကျနော်က အို! နောက် မလုပ်တော့ ပါဘူးကွယ် ဒါတွေက အတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေ ခုဆို သက်ကျားအိုကြီး ဖြစ်နေပါပီ ဘာညာ ဆိုပီး ပါးလေးပွတ် အတင်း ဆွဲဖက်ပီး ချော့ရသေးတယ်။ ၅မိနစ်လောက် နေမှ ဦးကျောက်လုံး အပြုံးမျိုး ပြုံးရင်း နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လောက် ပွေပွေ ငါ့လက်ထဲ ရောက်တာပဲ မဟုတ်လား ငှဲငှဲ ဆိုပီး....... ထဖြစ်တာတုံး ဆိုတော့........ လေ။ သေချာတာက မေ တစ်ယောက် ကျနော်အနားမှာ ရှိနေတာကို အင်မတန် ကြည်နူးပီး ပျော်ရွှင် နေခဲ့တယ်ဗျ။ ကျနော်ကကော? ပျော်လွန်းလို့ အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်မိ ခဲ့တာပေါ့။ ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ကော ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်း ချစ်သူ ၂ယောက်ရဲ့ ဘ၀လေးကို ဘေးကနေ ကြည့်ပီး မပျော်ကြဘူးလားဗျာ? ။.. နင့်ရည်းစားတွေကို နင်အုပ်တာ ပြန်သတိရလာ ...၃ကောင်စလုံး ပထမဆုံးထားတဲ့ ရည်းစားဦးတွေ နဲ့ပဲ အိမ်ထောင်ပြု ကုန်ကြတာဗျ။ ကျနော်နဲ့သာ နေချင်သလိုနေ ၊ပြောချင်သလိုပြော လုပ်တာ ပွေပွေ ရှုပ်ရှုပ်တော့ တစ်ယောက်မှ မဟုတ်ရှာဘူး။ မေ ကလွှဲပီး ကျန်တဲ့ကောင်တွေ သူတို့ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်ပြေလို့ ပျော်ပျော် ရွှင်ရွှင်ပါပဲ။ အဲ့လို အတိတ်က ရယ်စရာလေးတွေ မနက် စောစောစီးစီး အိပ်ယာထဲမှာ ဖက်ထားကြရင်း စမြုံ့ပြန် တဟိဟိနဲ့ သဘောတွေကျ နေရာကနေ ရုတ်တရက်ထပီး မေ က ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို လက်သီးဆုပ် ကလေးတွေနဲ့ ထ ထုတတ် သေးတယ်။ .။. လို့ ငါ မနာလို လိ့ေုလ တဲ့ ၀ူးမန်းနိုက်ဇာ ................။............ ဟာဟ.
” တဲ့ အဲ့လိုကို ပြောချ ပစ်တာဗျာ။ လူကို နားရွက်တွေ ဘာတွေ ထူပူ တက်သွားတာ။ (တမင်သက်သက် ကျနော် စိတ်လှုပ်ရှားအောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်းတွေ ပြောပစ်တာဗျာ) ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ ကျနော် ရုန်းနေလျှက်န့ကဲို ပုဆိုးကို ဆွဲဖြေချပီး အတင်းစုပ် ပေးတော့တာဗျ။ ကိုယ်က မကြံစည်သေးပဲနဲ့ ရုတ်တရက် အလစ်ငိုက် အဲ့လို အလုပ်ခံရတာ ရင်တဖိုဖိုကြီးနော်။ ခုနက လို အပြောခံလိုက်ရလို့ ရှိန်းကနဲ ထူပူသွားတဲ့ အရှိန်နဲ့ ဘာမှန်း မသိခင်မှာ သူက ဒူးလေးထောက်ပီး တပြွတ်ပြွတ် စုပ်နေတာ ၄-၅ -၁၀ ချက်လောက် ရှိနေပီ။ ခြေဖျားထောက် ပီး အလိုလိုကို ကော့ထားပေး နေမိပီ။ ငံြု့ ကည့်လိုက်တော့ ထမီရင်ခေါင်းလျား၊ ဘီးဆံပတ် ကလေးနဲ့ မျက်နာမှာ ရေစို လက်လက်ကလေး ဖြစ်နေဆဲ အိမ်ထောင်ရှင်မ ချောချောလေးက ပြုံးစိစိနဲ့ ဒုံးပျံကို စုပ်လိုက် လျှာကစား လိုက် လုပ်နေတာဗျာ။ ဘယ် ရမလဲဗျာ ချက်ချင်း တဟင်းဟင်းနဲ့ အဖျားတက်သလို လိင်ဆိပ် . ဟီး။ စကားမစပ် အိမ်ထောင်ကျ ဘာပြုညာပြု မှတော့ ဒီထဲ လာပီး ကိုယ်တွေ့တွေ ဘာတွေ ရေးနေမလားဗျာ။ မိန်းမနဲ့ ကွိုင်ပူ ကုန်မှာပေါ့။ ကျနော် အရင်ကလည်း ပြောခဲ့ ဖူးပါတယ်။ နောက် နောင် မိန်းမ ယူဖြစ်လို့ကတော့ ဒါမျိုးတွေကို ထာဝရ စွန့်ခွါတော့မယ်လို့။ ခက်တာက မိန်းမက ဒီတသက်ရမယ့်ပုံ မပေါ်ချေဘူး ညီအကိုတို့ရေ။ ဒီတော့ကာ တသက်လုံး ဖတ်ဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကုန် သွားရင်တောင် တသက်လုံး ဟိုနားဒီနား လျှောက် ဖတ်ထားခဲ့တဲ့ ဘုတ်အုပ်ကလေး နည်းနည်းပါးပါးကို အခြေခံပီး မဟုတ်တရုတ် အောဇာတ်လမ်းတွေ လျှောက်ရေးဦးမှာ..... ဟဲ့ကောင်! ရေပြောင်အောင် သုတ်ပီး အ၀တ်အစား သွားဝတ်ချေ အအေးမိနေမယ် .ဟဲဟဲ ကိုယ့်ဆရာတွေ ကလည်း ဟိုဖက်မယ် ပြောထား လိုက်ကြတာ စုံစိ နေတာပဲ။ ဇာတ်သိမ်း ကိုတောင် ကြိုသိ နေကြသေးတယ်။ ကိုတတ်ွကလည်း မဟုတ် တရုတ် တွေဗျာ ဆရာကြီးနဲ့ ကျနော့်ကို သွားနှိုင်းပီး ပြောထားလိုက်တာ မတော် ကျနော် ချေးစိမ်း ပန်းနေပါဦးမယ် ငါ့ အကိုရာ . ငါ့ကို ငြီးငွေ့သွားမှာစိုးလို့ .... ဟီး ဟီး။ တောက်တီး တောက်တဲ့ ရေဇလုံတို့ ဘာတို့ ပေါ့ဗျာ။ ကျနော့်ဇာတ်လမ်းကိုဆက်ရရင် တရားဝင် အိမ်ယာ မထူထောင်ပဲ အိမ်ထောင် ကျနေတယ် လိ့ေုတာင် ပြောရမလားပဲ။ အမယ် လင်မယား ရန်ဖြစ်သလို၊ ရန်တွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကြသေးတာ ဆရာ။ မေ က အတော်ရီရတဲ့ ကောင်၊ ကျနော်နဲ့ အဲ့လိုဖြစ်ပီး ကြိုက်သွားတာနဲ့ ကျနော် မြင်ကာစက လို မဟုတ်တော့ဘူး။ တချိန်လုံး သူ့ကို သူ မလှ လှအောင် ရှိုးထုတ်တော့ တာဗျ။ မောင် .. အဲ့ဒီမယ် ရေချိုးရာက တက်လာတဲ့သူက ရေလဲထမီ ရင်ခေါင်းလျား၊ ဘီးဆံပတ်လေးနဲ့ ကော့တော့ တော့လေး အနောက်ကနေ လာဖက်ပီး ပွတ်သီး ပွတ်သပ် လာလုပ်၊ ကျနော်က .. “ထမင်းမစားသေးဘူး မောင့် ဂေါက်တံကြီး ကိုအရင်စားဦးမယ်လေ . ဆိုပီး အမျိုးမျိုး ကို ဒီဇိုင်းတွေ ပြောင်း၊ အိမ်မှ ၂ယောက်ထဲ ရှိတဲ့ အချိန် ကျနော် စိတ်မထ ထအောင် ဆိုပီး မပေါ့်တပေါ် ဆက်ဆီဖြစ်တဲ့ အ၀တ်ကလေးတွေ ၀တ်ပြ၊ အဲ့ဒါ အပြင် ဟိုဟာ လုပ်တဲ့ နေရာမှာလည်း အမျိုးမျိုးကို တီထွင် ဆန်းသစ် နေတော့တာ လေ။ ဥပမာလေးတွေ ပေးရရင် သူအလုပ်က ပြန်လာ ရေမိုးချိုး နေတုံး ကျနော်က ထမင်းပွဲလေး ဘာလေး ပြင်နေတုံး ဆိုပါတော့... မမှီ့ တမှီနဲ့ ခြေဖျားထောက် ကျနော့် နားရွက်နား ကပ်ပီး... ကျွတ်! ဒီကောင် ပြောရခက်တာလို့ ငေါက်လိုက်ရင် . လို့ ငေါက်နေတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ အတင်းနှိုက်ပီး ကျနော့် ဒုံးပျံကို ဆော့ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ ကျနော်က ဟိုယိမ်း ဒီယိမ်း လုပ်ပီး ရှောင်ရင်း ထမင်း အရင်စားမယ် ဆို...
. အားး မောင်ရာ ချစ်လိုက်တာ . အဲ့လိုတွေ အသံပြန် ထွက်လာပီး အလူးအလှိမ့် ခံရတော့ တာပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ ပက်လက်ခံ ရရှာ လေ တော့ကာ ဆံပင်တွေလည်း ပြေကျ ဖရိုဖရဲ ကပိုကရိုတွေဖြစ်၊ ကျနော်ကလည်း ပေါင်၂ချောင်းကို အသားကုန်ဖြဲပီး တစ်ကိုယ်လုံး အားနဲ့ ဆောင့် ဆောင့်ဗျင်းတာ ဆိုတော့ သူချိုဗူး အလုံးကြီးတွေက ဟိုပြေးဒီပြေးနဲ့ တုန်ခါနေတော့ တာပေါ့။ နောက်ဆုံး မခံနိုင်တော့မှ နို့၂လုံးကို အသားကုန် လှမ်းဆုပ်ကိုင် ချေမွှ ရင်း တဖန်းဖန်းဆောင့်ပီး ပန်းထုတ် ပစ်လိုက် မိတာပေါ့။ ကျနော်လည်း အားပါးတရ ပီးသွားတဲ့ အချိန်ဆို သူက နောက်ထပ် ၂ကြောင်းလောက် ရှုံပွပွနဲ့ ထပ်ပီးနေပီဗျ။ ၂ယောက်သား ၁၀မိနစ်လောက် ခဏထပ်ပီး မှိန်းနေလိုက်ကြသေးတယ်။ နောက်တော့ သန့်ရှင်းရေးလေး ပြန်လုပ်၊ အ၀တ်အစား ကိုယ်စီပြန်ဝတ်၊ ထမင်းစားဖို့ ပြင်တော့တယ်။ ထမင်းစားတဲ့အခါ မြိန်ရည် ယှက်ရည်ပဲ .. ဆိပီုး ခဏခဏ (မောဟိုက်နေတဲ့ အသံနဲ့ ) အော်အော်ပီး မေးသေးတာဗျ။ အဲ့လို တက်ကြမ်းပီ ဆို သူကြာကြာ မခံဘူးရယ်။ ခဏပဲ ကြာတယ် ဖြစ်လာပီ... လို့ မေ က ကျနော့်ကို လှမ်းပြောရင်း မချိုမချဉ်နဲ့ မျက်စိမှိတ် ပြသေးတယ်။ အဲ့လို အလစ်ချောင်းပီး အုပ်တဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေက အများကြီးရယ်၊ တခါနဲ့တခါ မရိုးရအောင် ကြံစီပီးမှကို အုပ် ဖို့ ...... အာ ... မောင် မေ့ ကို ချစ်လားဟင်..တက်လာတာပေါ့။ ကျနော့်ဒုံးပျံ သောက်ရမ်းတောင် မတ်လာပီ ဆိုမှ ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ခိုင်း၊ ကျနော့် အပေါ်တက် ခွပီး တက်အုပ်တော့ တာဗျ။ သူ့ကို ဘာမှကို မလုပ် ပေးလိုက်ရတာ။ အလုပ်ကနေ ပြန်လာကထဲက စိတ်ကူးလေး တယဉ်ယဉ် လုပ်လာတာ နေမှာပေါ့။ အိမ်ရောက်ရင် ဟိုကောင့်ကို ငါဘယ်လို ဗျင်းပစ်မယ် ဆိုပီး ကြိုတွေးလာပုံ ရတယ်။ သူ့အဖုတ်က ကျနော် ဘာမှမလုပ်ပဲ နဲ့ကို ပူနွေးပီး စိုအိနေတာ။ ထိုင်နေတဲ့ ကျနော့်ကို မျက်နာချင်းဆိုင် တက်ခွပီး တက်ထည့်၊ ရင်ခေါင်းလျားထားတဲ့ ထမီကို ချွတ်ပီး ဖင်တုံးလုံး လေးနဲ့ အမယ် ဆံပင် သေချာပြန်ပြင်ပီး ခပ်တင်းတင်း ပတ်ချည် လိုက်သေးတာ၊ သေချာအောင် ပေါ့လေ။ ပီးမှ ကျနော့် တင်းတင်းဖက် မျက်နာကို သူ့နို့အိအိကြီးတွေ အပ် (အမှန်က နို့နဲ့ ပွတ်တာ မျက်နာ တစ်ပြင်လုံး ကိ)ု ပီး အသေ ဆောင့်တော့တာ၊ ရေလည်ကြမ်းတာ ဆရာတို့ရေ၊ ကျနော်ဆိုရင် ပါးစပ်ကနေ တဟားး ဟားးး နဲ့ အကျယ်ကြီး အသံထွက် အော်နေမိတာ။ ဆောင့်တယ်၊ ဖိကြိတ်ပီး ပွတ်တယ်၊ မုနြ့် ကိတ်ဆုံ မွှေသလို မွှေတယ်၊ နှဲ့တယ်၊ ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် မြင်းစီးတယ် ဆက်တိုက်ကို အုပ်နေတာများ အအားကို မပေးတာ။ လုပ်နေရင်း နဲ့လည်း ကျနော့်နှုတ်ခမ်းကို ငုံ့ငုံ့ပီး စုပ်နမ်းလိုက်၊ . စားကောင်းလိုက်တာ . ကြမ်းလိုက်တာ. အို. ဗိုက် ချောင်သွားလို့လား မသိဘူးနော်. မောင် မေ့ ကိုချစ်လားဟင် .... လို့ ဆက်တိုက် အော်ရင်း ဒွန့်ဒွန့် ဒွန့်ဒွန့် ဖြစ်ရင်း ပီးသွား ပါလေရော။ ကျနော်က တန်းလန်းကြီး အဖုတ်ထဲ ဒုံးပျံ မာတောင့် တောင့် တပ်လျှက်ကြီး ဖြစ်နေကော။ သူက ကျနော့်ကို ဖက်ရင်း ပျော့ခွေ သွားတာကိုး။ ကိုင်း မထူးပါဘူးကွာ ဆိုပီး အဖုတ်နဲ့ ဒုံးပျံ တပ်လျှက်ကို မချွတ်ပဲ ထိုင်ရာကထ၊ သူ့ကိုယ်လုံးလေး ကိုပါ ဖင်အောက်ကနေ သိုင်းမ ပွေ့ချီရင်း အိပ်ခန်းထဲကို ခေါ်သွား လိုကတ်ယ်။ ကုတင်စောင်းပေါ် အသာလေး ပက်လက် တင်ပီး အသားကုန် ဆောင့်ပီး တဖန်းဖန်းနဲ့ အုပ်ပေးတော့ တာပေါ့။ ကြာလာ လေလေ ကျနော်က ငါ့ကိုလာ စ သွားတာ ဒီတစ်ခါ ငါ ကြမ်းတယ်ကွာ ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ တဒိုင်းဒိုင်း မြည်အောင် ပစ်ကျုံးတော့ ကာ ခုနက ပီးသွားတဲ့ အရှိန်လေးနဲ့ မှိန်းနေတဲ့ မေ တစ်ယောက် အမေ့. ကျွတ်ကျွတ်. ဖြစ်လာပီ...မောင်..
.. မောင့်ကို အုပ်ချင်လာလို့ .” ဆိုပီး အံ့သြသွားတယ်။ အဲ့ချိန်မှာကို ဒင်းက သူ့အင်းကျီရှေ့ကြယ်သီးတွေ ဖြုတ်ထားနှင့် နေပီ၊ ဘော်လီ အနီရဲရဲ ကြပ် ထုပ်ထုပ်ကို လည်း ဂျိတ်ဖြုတ်ပီးသား ဖြစ်နေပီဗျာ။ ဘာပြန်လာလုပ်တာလဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် လူက အိပ်ချင် မူးတူးစိတ်က ချက်ချင်း ပျောက်သွားပီး သူ့ရင်ခွင်ထဲကနေ ခေါင်းထောင်ထရင်း ဘာဖြစ်လာတာလဲဟင်လို့ လှမ်းမေးတာကို အမေးမခံ တော့ဘူး။ ကျနော့် ခေါင်းကို အသာလေး ဖိပီး မပေါ့်တပေါ် ပြူတစ်တစ်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ချိုဗူးတွေဆီ တွန်းပို့ရင်း .” ဆိုပီး နောက်လာမှ “ဟကောင် . မေလေး ... ခဏ လစ်လာတာလေ .. တဲ့။ တကယ်ဆိုးတဲ့ ဟာလေးဗျာ။ ဧည့်ခန်းထဲမှာတင် ကိစ္စ ၀ိစ္စပီးသွားတဲ့ နောက်၊ အ၀တ်အစား ကပိုကရို ဖြစ်နေတာလေးတွေ တွန့်ကြေနေတာလေးတွေ ပြန်ဆွဲဆန့် ( အ၀တ်တွေကို အကုန်မချွတ်ပဲ လုပ်လိုက်ကြတာ ) ကျနော့်ပါးကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းရင်း အလုပ်ကို ပြန်လစ်ဖို့ ပြင်တယ်။ ပြန်မထွက်သွားခင် ပြုံးစိစိနဲ့ "ကောင်းထှာ ဖျားတောင် ဖျားမလား မသိဘူး" လို့ ပြောင်ချော်ချော် လျှာလေး တစ်လစ်ထုတ်ပီး ပြောရင်း လစ်သွားကရော။ ကျနော့်မှာတော့ တဟားဟား အော်ရယ်ရင်း ကျန်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ဗျာ။ ( အဲ့ဒီ ကောင်းထှာ ဖျားတောင် ဖျားမလား မသိဘူး ဆိုတဲ့ ဟာသ က ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်က နောက်နေကြ လိင်ဟာသ တစ်ခုပါ ခင်ဗျား တို့လည်း ကြားဖူးမှာပါ အရူးနဲ့ အရူးမ လမ်းလယ် ခေါင်မှာ အုပ်နေကြတာကို မြင်မကောင်းလို့ တာလပတ်နဲ့ လူတွေက ၀ိုင်းအုပ်ထား ပေးကြတယ် ...ကြိုးစားတာဗျ။ ချစ်လည်း ချစ်စရာကောင်း သလို ရင်ဖိုစရာလည်း ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေး။ သူ့အကွက်တွေ ထဲမယ် ထူးဆန်းတဲ့ လုပ်ကွက်တွေ ရှိသေးတယ်။ ပြောရင် ဆုံးမယ် မထင်ဘူး။ တခါကဆို ဘာလုပ်တယ် ထင်လဲ။ နေ့လည်ခင်းကို ဆိုင်က အလုပ်သမလေး တစ်ယောက် ယောက်ဆီက ဆိုင်ကယ် တစ်စီးလောက် အသာလေးယူ (ကားက ကျနော် သူ့ကို လိုက်ပို့ပီး အိမ်ပဲပြန်ယူလာတာ) တိတ်တိတ်လေး ပြန်လာ၊ ဆိုင်ကယ်ကို ခြံအပြင်ဖက်မှာ အသာလေး ထောင်ထားခဲ့ပီး ဒိုင်လျှိုလေး အိမ်ထဲခိုးဝင် ကျနော့်ကို ပြန်လာ ချောင်းတာ၊ ကျနော်ကလည်း သူပြန်လာနေကြ မဟုတ်တော့ ဘယ်မျှော်လင့် ထားမလဲဗျ။ နေ့လည်ပိုင်း စားသောက်ပီး သမီးလေး တစ်ရေးတစ်မော အိပ်တဲ့ အချိန် ဆိုတော့ ဧည့်ခန်း ဆက်တီခုံ ရှည်ပေါ်မှာ လှဲရင်း စာဖတ်ရင်း ငိုက်သွားလိုက်၊ ဖျတ်ကနဲ နိုးလာလိုက်၊ စာ ဆက်ဖတ်လိုက် အဲ့လို လုပ်နေတာပေါ့။ တစ်ချက် မှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားတာ နည်းနည်းကြာသွားတယ်၊ ဆက်တီ ခုံရှည်ပေါ် ဘေးတိုက် လှဲနေတာ လက်ထဲက စာအုပ်ကလည်း လွှတ်ကျပီး ငိုက်သွားတာ၊ နည်းနည်းကြာတော့ ဆတ်ကနဲ နိုးလာ မျက်လုံးဖွင့် လိုက်တော့ . အိပ်အိပ်. ကျွတ်ကျွတ်. ချိုချိုတိုက်ရမလား. ဘာလုပ်တာတုံး ... ဆိုပီး ဖြစ်သွားတယ် မွှေးပျံ့ပျံ့ ကိုယ်နံ့ ရပါတယ်ပေါ့၊ ဘာမှလဲ မမြင်ရတော့ဘူး။ ဘယ်မြင်ရမလဲ အဲ့ သေချင်းဆိုး မလေးက ကျနော့်ကို မျက်နာချင်းဆိုင် ဘေးတိုက် လှဲအိပ်ရင်း ဖက်ထား တာကိုး၊ ကျနော့် မျက်နာက သူ့ရင်ညွှန့ထ်ဲ အပ်လျှက်ကလေး၊ ဒါကြောင့် မွှေးတေးတေး အနံ့လေးရနေတာ။ “သားသား ..... ဟမ်! ... .. မေမေ .... အဟိ . ပီးလည်း ပီးသွားကော အရူးမက အရင် တာလပတ်ထဲ ကနေ ၀ုန်းကနဲ ထွက်လာပီး ၀ိုင်းကြည့် နေတဲ့ လူတွေကို ပြုံးပြ၊ ထမီပြင်ဝတ် လိုက်ရင်း " ကောင်းထှာအေ ဒီနေ့ ဖျားတောင် ဖျားမလား မသိဘူး " လို့ ပြောလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ဟာသပေါ့ ) ..
ပီးပီလေ . တဲ့။ အဲ့လိုပြောပီး ဆောင့်ဆွဲ ခေါ်သွားတာ။ ဟိုကောင်မလေး တော့ ဘယ်လို ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် မသိဘူး။ လူတွေ အရှေ့မှာ ကျနော် ဒရန့်ဒရန့်လေး ပါသွားတယ်။ ကျနော်မှ ဘာမှ မလုပ်တာ ဆရာတို့ရေ။ သကြားလုံးဆိုလို့ ကောက်စားလိုက်မိတယ်။ စကားလာပြောတော့ လူမှုရေးအရ တစ်ခွန်း နှစ်ခွန်း ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ ဒါပဲလေ။ အဲ့ဒါကို ဒေါသူပုန် ထတော့ တာပါပဲ။ ကျနော်က ဘာဖြစ်မှာတုံး။ သူစိတ်တိုလေလေ တဟားဟား အော်ရယ် လေ လေ ပေါ့။ ကျနော်က ရယ်လေလေ သူက ဒေါသထွက် လေလေ။ တရှူးရှူးနဲ့ နဂိုက အသားဖြူ ဆွတ်ဆွတ်လေး ဆိုတော့ မျက်နာတွေကို ရဲပဒေါင်း ခတ် နေတာ။ “ရွှေပုဇွန်မှာ ကူဖီးလ်ဆို?” “မစားဘူး” “ဟမ်! ဆေးကျောင်းနားက အသုတ်စုံ အုပ်မယ်ဆို?” “တော်ဘီ” “ဘုရား အရင်ဝင် မလား .. လွန်ကုန်ပီ) ဇိုးကနဲ ဇတ်ကနဲ ကျနော့် လက်ကို ကောက်ဆွဲ ခံလိုက်ရလို့ မော့ကြည့် လိုက်တော့ မေ ဖြစ်နေတယ်။ စူပုတ်နေတဲ့ မျက်နာနဲ့ . ဒါဆို?” . အလစ်ကို ပေးလို့ မရဘူးနော့် ........ အမေဂျမ်း စီးနေတဲ့ မမလေးက ..ပြန်မယ် ... အကိုတဲ့။ ကျနော်ကလည်း ဘာရယ် မဟုတ်ဘူးလေ။ အေး ကျေးဇူး ညီမလေးရာ လို့ .... ဆိုပီး အခွံလေး ခွါ ကောက်စား လိုက်မိကော။ ပီးတော့ စကား ဆက်ပြောလာတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဘာမှန်းမသိ ညာမှန်းမသိ ဆက်ပြော နေမိတယ်။ အဲ့ဒီမှာဗျို့ . ဟိုင်း ဆိုပီး ကျနော်နဲ့ ကောင်မလေး ကြားထဲကို နောက်ဂျွမ်း ပစ်ပီးဝင်လာ (.. ဟီး . ဟီး ....ဒီဟာသက ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားထဲ ငယ်ငယ်ထဲက ပြောနေကြလေ။ ခုလည်း ကျနော့်ကို လာတက် အုပ်ပီး အဲ့လို ပေါက်ကရတွေ ပြောင်ချော်ချော် ပြောပီး ထွက်သွားလေရဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဖတ်ပီး ဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲ ညီအကိုတို့။ ကျနော် ရင်ဖိုခဲ့ သလို ပျော်ခဲ့သလိုပဲ ဖြစ်သလား။ ရယ်ချင် နေကြသလားပဲ။ ဆယ်ကျော်သက် သမီးရည်းစားလေးတွေ မဟုတ်ပေမယ့်၊ ငယ်စိတ်ကလေးတွေ မကုန်သေး တဲ့ လူလတ်ပိုင်း စုံတွဲလေး ဆိုတော့လည်း အဲ့လို ပေါက်ကရလေးတွေ လုပ်တတ်တုံးပဲ ဆိုပါတော့ဗျာ။ ရန်ဖြစ်ပီး သတ်တာတွေလည်း ရှိသေးတယ်။ သတ်တယ် ဆိုတာက သတ်တာ ပုတ်တာ နပန်းလုံးတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေဗျာ အလုပ်နားတဲ့ ရက်ဆို အပြင်လေး ဘာလေး ထွက်ကြတယ်။ သူက မျက်နာပေါင်းတင်၊ ဆံပင် နည်းနည်းပြင်မယ်၊ ခေါင်းလျှော်မယ် ဘာညာပေါ့။ ကျနော် လိုက်ပို့ပါတယ်။ ပီးတော့ကြာမယ် ဆိုတော့ (အဲ့ဒီဆိုင်က နာမည်ကြီးတော့ လူများလွန်းတော့ စောင့်ရတယ်) သူ့ကိုထားပီး သမီးလေးနဲ့ ခဏ ထွက်သွား မိတာပေါ့။ ခဏနေတော့ ဖုန်းဆက်လာတယ် ပီးတော့မယ် လာကြိုလာတဲ့။ ဒါနဲ့ အဲ့ဆိုင်ကိုပြန်သွား၊ သမီးကို ကားထဲမှာ ခဏလေး ထားခဲ့ပီး ဆိုင်ထဲ ၀င်ခေါ်ဖို့ သွားတော့ ကျေးဇူးရှင်လေးက မပီးသေးဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုယက်လည်း ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး အပေါက်ဝ နားမှာ လက်ကလေးပိုက်ပီး ဟိုငေး ဒီငေး လုပ်နေမိတယ်။ အဲ့ဒီမှာဗျာ... ကောင်မလေး တစ်ယောက်က စကား လာပြောတယ်။ အဲ့ဒီ ဆိုင်ကလား ဆိုင်ကို လာတဲ့ ဟာလား ဘာလား မသိပါဘူး။ သကြားလုံးလေး လက်ထဲ ထိုးထည့်ပီး စားလေ .
မေမေ့ ဆီလာ. ခုခေတ် ဟာမလေးတွေ ကလည်း အရှက်ကို နည်းလိုက်တာ ဘုမသိ ဘမသိ ၀င်ရောတာပဲ .. ဟာ .... နင့် ဆေးဆိုးပန်းရိုက် လုပ်တာက ကြာလို့ စောင့်နေတာ အူကို လိမ်နေတာပဲ ဆာနေတာ .” “ဘာဟီးလဲ ငသက်! ဘာဟီးလဲ” (လက်ကမြန်တယ်ဆရာ ကားမောင်းနေတဲ့ ကျနော့်နားထင်ကို လက်သီးတစ်လုံးဝင်လာတယ် ဒုတ်ကနဲနေတာပဲ) “ဟဲ့! သောက်ကောင်မလေး ကားတိုက်ကုန်မယ် သောက်ရမ်း လုပ်ရလား ခွီးးး” နားထင်ကို ပူကနဲ နေအောင် အကျွေးခံ လိုက်ရတော့ လူက နည်းနည်း ယိုင်ထွက် သွားတယ်။ မထင်မှတ် ထားပဲ ခံလိုက်ရတော့ ကားကို လမ်းဘေး ဆွဲချလိကု သလိုဖြစ်ပီး စိတ်ကလည်း ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ အခြေနေက မကောင်းတော့ဘူး ဆိုတာ ရိပ်မိပီး ကောင်းကောင်း မွန်မွန် ချော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြံနဲ့ အိမ်ကိုပဲ ပြန်လာခဲ့ရော ဆိုပါတော့။ အိမ်ရောက်တော့ ကားပေါ် ကနေ ၀ုန်းဒိုင်း ကျဲပီး ဆင်းသွားတယ်။ အဲ့ဒီ အချိန်ထိ ကျနော်က အေးဆေးပဲဗျ။ စိတ်လည်း တို မနေပါဘူး။ ဗိုက်ဆာ နေတာပဲ ရှိတာ။ ရယ်ချင်နေတဲ့ စိတ်ကို မနည်း အောင့်အီးပီး ပြုံးစိစိ ဖြစ်နေတုံးပဲ။ အိမ်ထဲ ရောက်တော့ သူ့ဖာသူ အ၀တ်အစား တွေလဲ၊ ဟိုလုပ် ဒီလုပ်တွေ လုပ်နေတယ်။ ဒုန်းဒိုင်း၊ ဂုံဂလွမ် တွေနဲ့ ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီးတွေပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က ပြုံးစိစိနဲ့ ထိုင်ကြည့်နေတာ။ ကျနော့်ကို မျက်နာချင်း မဆိုင်တော့ဘူး။ ကျနော်က ခပ်တည်တည်နဲ့ အနားကပ် သွားရင်ကို ရှောင် ရှောင် ထွက်သွားတယ်။ အိမ်ထဲမှာ ဟိုပတ်ရှောင် ဒီပတ်ရှောင်နဲ့ ........... ဆိုပီး ဖြစ်သွား သေးတယ်။ နောက်တော့လည်း တွေးကြည့် မိသွားတယ်။ အေးလေ . ဘာဆာတာလဲ..... အလကားပဲ” “ဟောဗျာ! ဒါဆို ဘာလုပ်ရမှာတုံး .... .. ပြန်မယ် အိမ်ကို မောင်း” “နင်က ကလေး လေးလား . ဟိုကောင်မလေးနဲ့လေ နင့်မျက်နာကြီးက ဖြီးနေတာ . အဲ့ဒါ .အဲ့တုံးက မဆာဘူးလား ဟမ်! ငါကြည့်နေတာ ကြာလှပီ........ ဆော့မနေနဲ့ .. ဒီနားမှာ . မေလေးရာ” “ပြန်မယ်.... ဟီးးးး ..” “ဒါဆိုလည်း ခိုတောင်မုန့်တီ သွား တွယ်မလား ဗိုက်က အတော်ဟာ နေတာ .... ဟီး . . နင့်အဖေ မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ တကယ်လည်း ဟုတ်တာပဲ ဟာ . အဟီး ..“စိတ်တွေ ပူလောင်နေတယ် သွားလည်း .. ဟ . ကျွတ်! လိမ္မာတယ် တော်တော့နော်?” “... .. နင့်အဖေ .... ဟီး။ ဒါနဲ့ သူ့ဖာ သူ နေပါစေ ဆိုပီး လွှတ်ထား ပေးလိုက်တယ်။ အနားကို မကပ် တော့ဘူး။ သမီးလေး ကို ထိန်းရင်း တွေ့တဲ့ စာတစ်အုပ် ကောက် ဖတ် နေလိုက်တယ်။ ကလေးကတော့ ဘာမှ နားမလည် သေးတဲ့ အရွယ် ဆိုတော့ ဘာမှမသိရှာပဲ အခါတိုင်းလို ကျနော့်နားမှာ တတောက်တောက်နဲ့ ဆော့ နေရှာတယ်။ သူ့ကိုလည်း သောက်ဖက် မလုပ်တော့ မှန်း သတိထားမိ သွားကော ဘာလုပ်သလဲဆို တော့ ကျနော့် အနားမှာ ဆော့နေတဲ့ သမီးကို အတင်း ကောက်ချီပီး အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ်။ ကလေးကို ပွေ့ရင်း အသံလေး စာစာ စာစာနဲ့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ သမီး . မဟုတ်ဘူး .. တဲ့။ ရုတ်တရက် တော့ ဘာလဲဟ ... ။ အိပ်ခန်း တံခါးကို .” “.” “ဘာဆာတာလဲ.
အတွက် စပါယ်ရှယ် လေးတွေ ၀ယ် လာတာကွ ... သူကို ချော့ရင်း တူတူ စားမယ် . ဆိုပီး ပြလိုက်တယ်။ ဆက်တီ စားပွဲပေါ် ကြက်မောက်သီးတွဲ ကို တင်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်ထုပ်၊ ကြာဆံကြော်ထုပ်၊ကူဖီးလ်ထုတ်တွေကို သူ့မျက်နာရှေ့မှာ ၀ဲပြရင်း . ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အောင့်ပီး ပါဆယ်ထုပ် လာ တာကို အဲ့လိုကြီး အလုပ်ခံ လိုက်ရတော့ ဒေါသက ထိန်းမရတော့ဘူး။ ဟာကွာ! လို့ .. ဗျာ) အဲ့လို ရုတ်တရက် ဒေါသကို မထိန်းနိုင်တဲ့ အကျင့်က မကောင်းဘူးဗျ။ ကျနော်လည်း သိပါတယ်။ ( ကိုရွှေဘလည်း အကြိမ်ကြိမ် ကျနော့်ကို ဆုံးမဖူးတယ် ဆင်ခြင်တုံတရား မရှိ လျှောက် လျှောက် လုပ်လွန်းလို့ ) ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း ကိုယ့်အကြောင်း ကိုယ်သိနေတော့ သူ့ရှေ့မှာ ဆက်ရပ် မနေတော့ပဲ အိမ်ရှေ့ ဆင်ဝင် အောက်ကို ထွက်လာခဲ့ပီး ဆေးလိပ် ထိုင် ဖွာနေမိတယ်။ ၁၅မိနစ် လောက် နေတော့ ကျနော့် အကျင့် အတိုင်း ရေချိုးခန်းထဲဝင် ရေအေးအေးတွေကို ခေါင်းကနေ တဗွမ်းဗွမ်း လောင်းချပီး ချိုး ပစ်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်း စိတ်ကြည်လင်ပီး အေးမြသွားတယ်။ ရေ၀ သွားတော့မှ ဒေါသက ကင်းစင်သွားတယ်။ ရေသုတ်ပီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မြင်းခေါင်းစွပ်ကျယ်နဲ့ သော့တံဆိပ် ပုဆိုးအပြာ အဟောင်း တစ်ထည် ကောက်စွပ် ခြံထဲမှာ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက် ရင်း မေ့ကို ဘယ်လို ပြန်ချော့ရမလဲ စဉ်းစားခန်း ၀င်နေမိတယ်။ ခုနက ကျနော်ထပီး ၀ုန်းဒိုင်းကျဲ မိလိုက်တာ သူလန့်သွား လောက်ပီဗျ။ အိမ်ထဲပြန် ၀င်လာတော့ သူတို့ သားအမိ နှစ်ယောက် ကို ဧည့်ခန်းထဲမှာ တွေ့တယ်။ သမီးလေးက အိပ်ယာ ၀င်ခါနီး ထုံးစံအတိုင်း တအီအီနဲ့ ဂျီကျနေပီ။ မေက ရေမိုး ချိုးပီးဟန်နဲ့ သနပ်ခါး ရေကျဲလေးပွတ် ဆံပင်ကို မြင်းမြီးလေး နောက်စေ့မှာ ချည်၊ အိမ်နေရင်း ဘလောက်စ်အပြာ၊ ထမီ . ဆိုပီး ဖားပြလိုက်တယ်။ အဲ့ဒီမှာ ဘာ ထ လုပ်သလဲ ဆိုတော့ အထုပ်တွေကို ဆွဲယူပီး နံရံဆီကို ပစ်ပေါက် ပလိုက်တယ် ဗျာ။ ကျနော်က တစ်ကိုယ်လုံး တုန်နေအောင် ဗိုက်တအား ဆာနေလျှက်နဲ့ စားမလာပဲ ...... ဂွမ်း . ဆို ပစ် ပေါက်လိုက် ကရော။ သိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဘာမှ မဖြစ်ရင် ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် ဒေါသက ထွက်ပီဆို မရဘူးဗျာ။ နံဘေးနားမှာ ရှိတဲ့ ကုလားထိုင် တစ်လုံးကို ခြေထောက်နဲ့ အားရပါးရလွှဲပီး ကန်ချိုးလိုက်ကရော။ သူ့ကိုတော့ လက်ဖျားနဲ့ မထိပါဘူး။ (ကျနော့်ဘ၀မှာ ဘယ်မိန်းမ ကိုမှ လက်န့ေဲတာင် မရွယ်ဖူးခဲ့ ပါဘူး . တစ်ခွန်းပဲ ပြောပီး ဘယ်ဖက် လက်က ကိုင် လာတဲ့ မုန့ည်ှင်း ချဉ်ထုပ်နဲ့ ဟင်းချိုရည် ထုပ်ကို နံရံဆီ . ငါ့မေလေး .၀ုန်းကနဲ ဆောင့်ပိတ် သွားတဲ့ အလံနီ သူပုန်မလေးကို ကြည့်ပီး ကိုင်း! ကောက်ချင် သလောက် ကောက် စေသတည်း ဆိုပီး လက်လျှော့ ထားလိုက်တော့ တယ်ဗျာ။ ကောက် ဖတ်နေတဲ့ မဂ္ဂဇင်း အဟောင်းထဲက ၀တ္ထုတိုလေးကို စိတ်ဝင်စား နေမိတာနဲ့ အချိ်န် ဘယ်လိုကုန် သွားမှန်း တောင် မသိဘူး။ မှတ်မှတ် ရရ တင့်တယ်ရဲ့ "သူကလဲသူ ကျနော်ကလဲ ကျနော်" ဆိုတဲ့ ၀တ္ထုဗျ။ ဖတ်လို့လည်း ပီးသွားကော ခံတွင်း ချဉ်ချဉ်နဲ့ စီးကရက် တစ်လိပ်လောက် ကောက် ဖွာရင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကဲခတ် လိုက်တော့ သောက်ကျိုးနဲ မိုးချုပ်စ ပြုနေပီဗျ။ ဗိုက်လည်း ဆာလွန်းလို့ အောင့် တောင့်တောင့် တောင်ဖြစ်နေပီ။ ဒါနဲ့ မထူးပါဘူး ဆိုပီး အပြင် ထွက်လာခဲ့တယ်။ တရုတ် ဆိုင်ကနေ အသားဖတ် များများနဲ့ ခေါက်ဆွဲ ကြော် တစ်ထုပ်၊ ကြာဆံကြော် တစ်ထုပ် ပါဆယ် ဆွဲလာ ခဲ့တယ်။ နေ့လည်က ကူဖီးလ် စားချင်တယ်လို့ ပြောထားတာ သတိရလို့ ၀င်ဝယ်တဲ့ အပြင် သူ့အကြိုက် ကြက်မောက်သီး တစ်တွဲပါ ဆွဲလာ ခဲ့သေးတယ်။ အိမ်ပြန် ရောက်လာတော့ သူပုန်မလေးကို ဧည့်ခန်းမှာ ငူတူတူလေး ထိုင်နေတာ တွေ့ကရော။ အိပ်ယာထစ မကြည်မလင် ရုပ်ကလေးနဲ့။ ရယ်ပြ လိုက်ရင်း လက်နောက်ပစ်ပီး ဖွက်ယူလာတဲ့ ဟာတွေကို ဟော့ဒီမှာကွ. ..
... အားကိုး အားထား မရှိ တစ်ကောင်ကြွက် မို့ အားငယ်ရတဲ့ အထဲ . ဟီ ...” “ ကြာဆံကြော် ထုပ်ပဲ ပေါက်သွားတာ. ဟီး .... “. မောင် ဗိုက် တအား ဆာနေတာမလား . မဆိုးပါနဲ့ တော့ကွယ် . ဟ . မျက်နာချင်းကပ် မျက်လုံးချင်း စိုက်ကြည့်ပီး.. လိမ္မာပါတယ်.. ..တပတ်နွမ်းလေး လဲ ထားနှင့်တယ်။ မျက်နာက မကောင်းဘူး။ နွမ်းဖတ်ဖတ် ကလေး ဖြစ်နေတာ မြင်ရတယ်။ အခါတိုင်းဆို ကလေးကို ကျနော် ချော့သိပ်နေကြကိုး။ ခုဟာက သူ့လက်ထဲမှာ ကော့လှန် ကော့လှန်နဲ့ ဂျီကျနေတော့ အတင်းချော့ရင်း ခဏနေတော့ သူတို့ သားအမိ ထိုင်နေတဲ့ အရှေ့မှာ ရပ်ပီး ခပ်တည်တည် လက်ပိုက် ကြည့်နေတဲ့ ကျနော့် မျက်နာကို ညှိုးငယ်ငယ်လေးနဲ့ တစ်ချက် မော့ ကြည့်ရင်း ... ဘာလုပ်ရမှန်း မသိ . မေမေ . တိတ်ပါ သမီးရယ်. ဟိ။ ဆံပင်တွေ ချည်ထားတဲ့ ကြိုးလေးကို ဖြုတ်ပေး၊ သာသာလေး ပွေ့ပီး ကုတင်ပေါ်ကို တင်ပေး၊ ကိုယ်ပါ ကုတင်ပေါ် ရောက်မှ ကိုယ်လုံး အိအိ ထွေးထွေးလေး ကို ပွေ့၊ နဖူးလေးကို မေးစိနဲ့ ပွတ်၊ လက်မောင်း ချောချော အိအိလေးတွေကို ပွတ်ပေး၊ အင်းကျီ အောက်ကနေ လျှိုပီး ကျောပွတ်ပေး၊ ခြေထောက် တစ်ချောင်းနဲ့ခွ၊ တင်ပါးကို ချိတ်ပီး အတင်း ကိုယ့်ဖက်ကို ဆွဲထား .. .. ။ ဘာ စကားမှ မဆိုပဲ တဟင့်ဟင့် နဲ့ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ မျက်နာအပ်ပီး ရှိုက်နေတဲ့ မေ့ ကို ကျနော် ကျောလေးပွတ၊် တစ်ဖက်က သမီးကို ပွေ့ပီး ချော့ အဲ့လို လုပ်ရင်း သမီးက အိပ်ပျော် သွားတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ မေ့ကို အသာလေး ဆွဲခွါလိုက်ရင်း သမီးကို သွားသိပ်လိုက်မယ် လို့ အမူအရာ ပြရင်း အိပ်ခန်းထဲကို ကလေးပွေ့ရင်း ထ ထွက်လာ ခဲ့တယ်။ ကလေး သိပ်ပီး အိပ်ခန်းထဲက ထွက်လာတော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ မေ မရှိတော့ဘူး။ ဘယ်များ ရောက်သွား ဘာလိမ့် ဆိုပီး ဟိုကြည့် ဒီကြည့် လုပ်နေတုံး ငိုထားလို့ မျက်နာက သနပ်ခါး ရေကျဲ ပွတ်ထားတာ လေးတွေ ပျက်နေတဲ့ ရုပ်ကလေးနဲ့ မီးဖိုခန်း ထဲက ထွက်လာတယ်။ လက်ထဲ မှာလည်း ကြွေရည်သုတ် ဇလုံကြီး တစ်လုံး ကိုင်လို့။ လက်တစ်ဖက်က ရေနွေးကြမ်း မတ်ခွက်လေးနဲ့။ ဆက်တီခုံပေါ် တူတူ ထိုင်ရင်း ကျနော့်ကို ဇလုံထဲက ဟာတွေခွံ့ မယ် လုပ်တော့မှ ကြည့်လိုက်တော့ ခေါက်ဆွဲကြော်တွေဗျ။ “ ဟောဗျာ. ခေါက်ဆွဲကြော်က ဘာမှ မဖြစ်သွားဘူး. သမီးနဲ့အပြိုင် တဟင့်ဟင့် ရှိုက်နေတဲ့ မေမေ လှလှလေး ကိုပါ ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်ပီး ချော့ရတော့ တာ ပေါ့ဗျာ။ အမလေး ချော့တော့မှ ငိုလိုက်တာ အာဗြဲနဲ့။ ဂျီ ကျနေတဲ့ သမီးတောင် တိတ်သွားတယ် ..” အဲ့လို ပြောရင်း ငိုပါလေရော လား ဗျာ။ (တမင် ကျနော့်ကို ချွဲမှန်း နောက်မှ ပြန်စဉ်းစား မိပေမယ့်) အဲ့ဒီတုံးကတော့ ကျနော့် ရင်ထဲ ကျဉ်ကနဲ ဖြစ်သွားပီး သူ့လက်ထဲက သမီးလေးကို ဆတ်ကနဲ ဆွဲပွေ့ .. တော့ဘူးကွယ် ......... အဲ့ဒီတော့မှ အချော့ ဇာတ်လမ်းလေး က စရတော့ တာ ဆရာတို့ ရေ ... သမီးမှာ အဖေမရှိ သလို ... ဘယ်လိုလုပ် ကောင်းမှာတုံး. မေမေ့မှာ လည်း . အောက်ပြုတ် ကျထားတာတွေ မလား ငါ့ကောင်.....ငိုချင် လာပီနော်.” ဆိုပီး ခွံ့လာလို့ စားလိုက် ရတယ်။ ကောင်းထှာ ဗျာ။ ကျနော့်ကို တစ်လုတ် ခွံ့လိုက်၊ သူ တစ်လုတ် စားလိုက်။ ရေနွေးကြမ်းလေး မှုတ်သောက်လိုက် ကြနဲ့ မြိန်လိုက်တာ။ စားသောက်ပီးစီး သွားကြ တော့မှ အိမ်တံခါးတွေ ပိတ်၊ ခြေလက်ဆေး၊ မျက်နာသစ်၊ သွားတိုက်၊ အိပ်ယာဝင်... အဲ့လို အင်ထရိုလေးတွေ ၀င်ပီးတော့မှ .
.. မောင် သနားပါတယ် တနေကုန် ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ လှိမ့် ခံ နေရရှာတယ်” “မောင် ဟိုနေ့လည်က ဥစ္စာလေ.. ဟီး . ဟီး။ အမှန်က ဒီလိုဗျာ။ အပေါ်က ရေးပြခဲ့တဲ့ စကားတွေ အပြန်အလှန် ပြောနေကြတုံး ကထဲ ကျနော့် လက်တွေက သူ့ချိုဗူးတွေကို ပွတ်သပ် ချေနေသလို၊ ထမီလေးကို ဖြေလျော့ပီး အဖုတ်ကို နှိုက်နေတာကိုးဗျ။ သူ့လက်ကလည်း ကျနော့် ပုဆိုးစကို ဆွဲဖြေပီး အောက်က ကျနော့် ဒုတ်ကို လျှောတိုက်ပီး ဆော့ကစား ပေးရင်း ပြောနေ ကြတာလေ။ အပေါ်က စစ်ပြေငြိမ်းရေး ကမ်းလှမ်းချက်တွေ အပြန်အလှန် ကြေငြာပီးတဲ့ အချိန်မှာ အောက်က စစ်တိုက်ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပီ ... အဲ့ဒါ ဘုရားစူးပါဗျာ ..” “အင်းပါ ...... ဟဲ .. ဟဲ။ အဖုတ်လည်း အရည် ရွှဲနေ သလို၊ ဒုံးပျံကလည်း မိုးပေါ် ထောင်ပီး နီရဲ တင်းပြောင် နေပီ။ ဒူးထောက်ပီး အဖုတ်ဝ တေ့ အသာဖိ ထည့်လိုက်တာနဲ့ အေးဆေး လမ်းကြောင်း အတိုင်း အိကနဲပဲ။ မေ ကလည်း အောက် ကနေ ပြန်ကော့ ပေးရင်း ကျနော့်လက်၂ဖက်ကို အတင်း ဆွဲပီး ဘလောက်စ် အင်းကျီကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရင်း ဗလာဖြစ်နေတဲ့ ရင်နှစ်မြွှာ အပေါ် တင်ပေးတယ်။ ချိုဗူးကိုင်ရင်း ချစ်ပေးပါ ပေါ့ .” “ဟုတ်ပါဘူး .. ငါက ကလေးအမေ ..” “ဟင့်အင်း! မေက အရင်ပြဿနာ လုပ်မိတာပါ.” “နာပါဘူး အေး ဆေး ... ကိုင်း ကြေစိ့ကွုာနော်.. ဘယ်လောက် လှတယ် ပြောပြော.. ဘယ် ကောင်မလေးမှ နင့် လောက် မလှပါဘူး. ဘာမှ မဟုတ်မှန်း သိတယ် ဖြေရှင်းစရာ မလိုဘူး . မောင်ရာ ... မေးချင် နေကြပီလား .. အကုန်လုံး နင့်ကို ငေးနေတာ” “အပိုတွေကွယ် . ဟီ . မင်းတို့ ဟာကြီးက ..... နေ့ လည်က မောင့်ကို ပိတ်ထိုး လိုက်မိတာ ဘွာတေးကွာ ချစ်လို့ ထိုးမိတာနော် သနားပါတယ် တော်တော်နာ သွားသေးလား .. မေ သိတယ် မလား ငါ့ စိတ္တဇကို ဟာ ဟ . အဲ့ဒီ ဆိုင်ထဲမှာ ရှိနေသမျှ မိန်းမတွေ နင့်ခြေဖျား တစ်ယောက်မှ မမီဘူး. ဘယ်လိုကြီးလဲလို့ ...... ဟင် .” “အို! ငါကလည်း အပျိုပေါက်လေးတွေ ကြိုက်တာမှ မဟုတ်တာ.. မေ့အသက် ၂၇နှစ် ရှိပီဟ .. ခုတော့ မမေလေးရဲ့ ကောင်လေး ဖိုးသက်ပေါ့ကွာ ....... တစ်ခုလပ် ကြီးဟာ.. နင့် ဖာ နင် ကလေးအမေ မကလို့ ဘာကြီး ဖြစ်နေနေ..” “ဟုတ်ပါ့ .” အဲ့လို လေးတွေ အပြန်အလှန် ပြောရင်းနဲ့ ကျနော်က ထထိုင်လိုက်ပီး မေ့ ပေါင်ကြားထဲ ဒူးထောက်ပီး နေရာ ယူလကိုတော့ တာပါပဲ။ .. ဟိ . ငိုပြုရာ ကနေ ခုလို ချော့ရင်း မော့ရင်း အဆင်ပြေ သွားလို့ ပြန် ချစ်ကြရင်း အုပ်ရတဲ့ အရသာက သိပ်ကောင်းတယ် ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိပါတယ်လေ။ ဟုတ်တယ် မလား။ . အို နေပါပီ အပျိုလေးတွေ နဲ့ နှိုင်းလောက်စရာ မရှိတော့ပါဘူး . မောင့် ကို စိတ်ဆိုးလားဟင် .... နင် အဲ့လို ကောင်မလေးတွေနဲ့ စကားပြောတာ မြင်တော့ အရမ်း အူတို မိတာ .“မေလေး ...... ။ ဟဲဟဲ! ဒီစာကို ဖတ်နေတဲ့ ညီအကိုတွေ ထဲမယ် အိမ်ထောင် သယ်တွေ ပါမှာပါ။ ရန်ဖြစ်ကြ၊ သတ်ကြပီး .” “ခွီးး . မောင်ရာ. ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ငယ်ငယ်က မောင် ပွေတာ ရှုပ်တာ ကြောင့် မေ ခုထိ မောင့်ကို မယုံနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတာ နေမယ် .” “အန်တီလေး ၀င်နီရဲ့ ကောင်ပေါက်စလေး ဖိုးသက် လား.. ဟ .
မဆီမဆိုင်တွေ ထ ထ ပြောတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကိုတောင် သတိရမိ သေးတယ်။ အဲ့ဒီလို
ရန်ဖြစ်ရာက ပြန်တည့်ပီး အုပ်ရတဲ့ အရသာကို ဘာပြောလဲ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ အရသာမျိုးကို ကြက်သား
အုန်းထမင်းနဲ့ မလဲဘူး ဆရာတဲ့ ... ဟီး။ .. အီ .. စိမ့် .. နေအောင် ကောင်းချက်များ ပြောပါတယ်။
ဟီး ချောဒီးဂျာ။ ကျနော် နားလိုက်တာ ၃-၄ ရက် ဖြစ်သွား ပြန်တယ်။ စောင့် စောင့် ဖတ်နေရတာ
စိတ်ကော ရှည်ကြသေးရဲ့ လား မသိဘူး။ အမှန်က သိပ်လည်း ပြောပြစရာ မကျန်တော့ ပါဘူး။ ပွဲက သိမ်းခါနီး
နေပါပီ။ ဒါပေမယ့် ကြည်နူးစရာ လေးတွေ မှတ်မိသမျှ ပြန်ရေးပြ နေတာလေ။ ဆိုလိုတာက ဒီနေရာကို ၀င်ဖတ်နေတဲ့
ကျနော့် ညီအကိုတွေ ကို ကျနော် ချစ်လို့ မြန်မြန် ပွဲ မသိမ်းသေးတာ ပါဗျာ။ တကယ် ပြောတာပါ ကျနော် ခင်ဗျား
တို့ကို ချွဲတာ မဟုတ်ရပါဘူး ဗျာ။ ဘယ့်နှယ့် အောဇာတ်လမ်းလည်း မဟုတ် အုပ်တဲ့ အခန်းတွေလည်း
ဟုတ်ဟုတ်ငြားငြား မပါ ... ယုတ်စွ အဆုံး ဆော့ဖ်ကိုး အော ဇာတ်လမ်းမှာ ဆရာကြီး တစ်ဆူဖြစ်တဲ့ "အဂျင့်" စာတွေ
လို လည်း တငွေ့ငွေ့နဲ့ ဖီးလ် တက်ချင်စရာလည်း မကောင်းတဲ့ ဟိုရောက် ဒီရောက် လျှောက်ပြော နေတာ မျိုးကို
လာလာ ဖတ်နေကြတဲ့ ခင်ဗျား တို့ကို ကျေးဇူးလည်း တင်သလို.. တချို့ ညီအကိုတွေ ဟိုဖက်မှာ ပြောထား သလို
၀ုန်းကနဲ ဆွဲသိမ်း လိုက်ရင် လည်း ခင်ဗျားတို့ စိတ်ထဲ တစ်မျိုး ခံစားရမှာလည်း စိုးသေးတယ် ဗျ။ သို့သော် ကျနော်
ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှ ကို အမှန်တိုင်း ရေးပြ ပါတော့မယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကျနော့်ကို သနားတာထက် စိတ်မကောင်း
ဖြစ်သွားကြမှာပဲ စိုးတာ ... ဟီး။
"နာက" ညီလေး .. မင်း .. အကိ့စ
ုာတွေ စောင့်ဖတ်နေသေးတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာ ပါတယ်။
ကိုဆူပါရေခဲ မေးထားတဲ့ မေးခွန်းကို ဒီမှာပဲ ဖြေလိုက်မယ်ဗျာ။ မေ့ သမီးလေးက အဲ့ဒီ အရွယ်မရှိသေးပါဘူး ခင်ဗျားက
ကျနော် ပေါက်ကရ ရေးသမျှ အကုန် မှတ်မိနေတာပါလား ... ဟား ... ဟား။ ကို"ပေါကို" ဏှာဗူးစုံတွဲလေး
ဘာလေးနဲ့ .. ဒီမယ် လောကမှာ .. အပြင်းထန်ဆုံးသော အချစ်က ... တဏှာ အချစ်ဗျို့။.. ခင်ညားကြီး နားမလည်
ချင်ယောင် ဆောင်မနေနဲ့ ... ဒါဗြဲ ... ဟွန်း။ ကိုင်း! တော်ပီ။ ဇာတ်လမ်း ... ဆက်ရအောင် .. လား .. ညီအကို တို့ရာ။
အများကြီး ထပ် ပြောပြစရာ မကျန်တော့ ပါဘူး။ ကျနော့်ကို သူ တော်တော်
ချစ်မိသွားမှန်း ကျနော ရိပ်မိခဲ့သလို။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်လည်း အပေါ်ပို့စ်တွေမှာ ပြောခဲ့သလို သူနဲ့ကျနော်
ညားနေတာလို့ တောင်ထင်နေမိပီဗျ။ တကယ်ဆို အဆင်မပြေ စရာ ဘာမှလည်း မရှိပါဘူး။ အင်မတန်
ချစ်တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ။ အူမက စ ချေးခါး မကျန် အကုန် တစ်ယောက် အကျင့် တစ်ယောက်
စိတ်အကုန် ထွင်းဖောက်မြင်နေတဲ့ သူတွေပဲဟာ။ ကျနော် ဘယ်လို ခံစားနေရသလဲ။ သူ့စိတ်ထဲ ကျနော့်ကို
ဘယ်လောက် တွယ်တာ နေပီလဲ ရိပ်မိ နေကြပီပဲ ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ မျှော်လင့်တိုင်းလည်း ဖြစ်မလာ
တတ်တာတွေ အများကြီးပဲ မဟုတ်လား ညီအကို တိ့ရ
အမှန်က ကျနော့်ဖက်က အရူးအမူး ဖြစ်လာ ရတာလည်း သူကျနော့် အပေါ်
ဆက်ဆံလာတဲ့ ပုံစံတွေကြောင့် ဆိုလည်း မမှားဘူးရယ်။ ဘယ်လိုတွေလဲ ဆိုတော့ကာ ဥပမာ အဲ့ဒီ ရန်ဖြစ်
စိတ်ကောက် သတ်ကြ ရန်ဖြစ်ကြတဲ့ နေ့ ပီးတော့ နောက် တနေ့ မနက် သူ့ကို အလုပ်လိုက်ပို့တယ်
ဆိုပါတော့။ ကားပေါ်က ဆင်းခါနီးမယ် ထုံးစံ အတိုင်း အပြုံး ချိုချိုလေးနဲ့ ကျနော့် နဖူးကို မွှေးမွှေးပေးရင်း
အိမ်ကို တန်းပြန်နော် .. ဟေ့ကောင်! ဆိုပီးပြော လာတော့ ... ... ဟေ့ . အေး! ပြန်သေးဘူး မနေ့က
ကောင်မလေးနဲ့ တွေ့စရာ ရှိသေးတယ် ... လို့ ပြောင်ချော်ချော် လုပ်ရင်း နောက်လိုက်တော့ ရုတ်တရက်
ဒေါသ ထောင်းကနဲ ထွက်လာဟန် လေးနဲ့ ကျနော့် ရှပ်အင်းကျီ ရင်ဘတ်ကို လှမ်းဆုပ် ကိုင်ပီး ဆောင့်ဆွဲ
လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ချင်း ဆိုသလိုပဲ ဒေါသ မျက်နာလေးက အရောင်မှိန် ကျသွား ရှာတယ်။
သက်ပြင်းလေး ခပ်တိုးတိုး ချတယ်။
... နင် တကယ် လုပ်ရင်လည်း ငါ ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ မောင်ရယ် .. တဲ့
အဲ့ဒီ စကားတွေကို သူ့မျက်ဝန်း ညိုညိုလေးတွေနဲ့ ဆွေးရီရီလေး ကျနော့်ကို ငေးကြည့်ရင်း အသံ
တုန်တုန်ရီရီ လေးနဲ့ ပြောလာ တယ်ဗျာ။ ပြောပီးတာ နဲ့ မျက်နာကို အပေါ် အတင်း မော့ ထားတယ်။
( ငယ်ငယ် ကထဲက တစ်ခုခု စိတ်ထိခိုက် စရာ ကြုံလာတိုင်း မျက်ရည် ကျတော့မယ် ဆို သူလုပ်တတ်တဲ့
မေ .. ဟေ့ကောင်! တော်တော့ ... ငါ .. အလကား .. လျှောက်စ နေတာ သိရဲ့သားနဲ့ ..
အရူးမလေး.. လို့ ပြောရင်း ကျနော့်စိတ်ထဲ သနားစိတ်တွေ လျှံတက်လာလို့ အတင်း ဆွဲဖက်ပီး
ချော့လိုက်မိတယ်။ အဲ့ဒီတော့မှ ဒင်းကလေးက မျက်ရည်တွေ ရစ်ဝဲနေတဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ ပြုံးရင်း သိပါတယ
်.. ငါအရမ်း ၀မ်းနည်းသွား လို့ ဟ ..ဆိုပီး .. ချွဲချွဲလေး ပြောရင်း ကျနော့်ကို အကြာကြီး စိုက်ကြည့် နေတတ်
သေးတယ်ဗျ။ တော်တော် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးနော့်။ ဒီလောက် ချစ်နေကြ မှတော့
ဘာလိုသေးလဲ ပေါ့။ ပွဲက သိမ်းနေပီ ပဲဟာ။
လိုတိုရှင်း ဆက်ပြော ရရင် တောကို ခဏပြန်သွားတဲ့ မေ့ အဒေါ် ဒေါ်ကြီး ပြန် ရောက်လာ
ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခါတိုင်းလို တူတူ အိပ်လို့ မရတော့ ဘူးပေါ့။ လူကြီး အရှေ့မှာ ဆိုတော့ အနေထိုင်
ဆင်ခြင်ရတာကိုး။ ဒေါ်ကြီး ပြန်မလာခင် တစ်ရက် နှစ်ရက် လောက်မှာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် အားရအောင်
ချစ်လိုက်ကြမယ် ဆိုပီး သောင်းကျန်း ကြသေးတယ်။ ပြန်လည်း ရောက်လာကော တစ်ရက် နှစ်ရက်
လောက်တော့ ကိုယ်ရှိန် သတ်လိုက် ကြတာပေါ့လေ။ ရက်နည်းနည်း ကြာလာတော့ ဟိုဟာ
မလုပ်ရတာထက် တူတူ မအိပ်ရတာကို တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်လာ ကရော။ ညားကာစ လင်မယားတွေ ခွဲအိပ်ရတဲ့
အခါ ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်မျိုး ဖြစ်မယ် ထင်တာပဲ။
် ည်း အိမ်ထောင်မကျဘူး သေးတော့ သေချာတော့ မပြောပြ တတ်ပါဘူးလေ ... ဟီ .. ဟိ )
ဒီတော့ အမျိုးမျိုး ကြံရတော့ တာပေါ့။ ချာတိတ်လေး ချာတိတ်မလေးတွေ ညဖက်
လူခြေတိတ်မှ ချိန်း တွေ့တာလိုတွေ လုပ်ကုန်ကြရော။ ညသန်းခေါင် ဒေါ်ကြီးနဲ့ သမီးလေး(သူတို့က
တစ်ခန်းသပ်သပ်အိပ်ကြတာ) အိပ်မောကျနေတဲ့ အချိန် လောက်မှ
မေ့အခန်းထဲ ကျနော် တိတ်တိတ် ကလေး ခိုးဝင်ပီး တူတူ အိပ်ရတာမျိုး ( မနက်မိုးလင်းခါနီးမှ အသာလေး
ထပီး ကိုယ့် အခန်းထဲ ကိုယ် ပြန်လစ်ရတာ တော့ ကသိ ကအောက် နိုင်တယ်ဗျာ ) ဟိုဟာ လုပ်တာတောင်
ခါတိုင်းလို စိတ်ရှိတိုင်း မလုပ်ရဲဘူး။ ကြိတ်ပီး ကပ်တွန်းလေး ဆွဲ၊ ကုတင်ပေါ်မှာ ၀ုန်းရင် အသံတွေ
ထွက်မယ် စိုးတော့ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ၂ယောက်လုံး မတ်တပ် ရပ်ပီး မော်တော်ဆပ် ရတာမျိုးလေးတွေ ပေါ့။
သိပ် အဆင်မပြေ ပေမယ့် လို့ ရင်သိမ့်တုန် ဖီလင်လေးတော့ အရသာ ဗျ။ ခိုးစားရတာ ဆိုတော့လေ ... ဟိ
နေ့စဉ် ရက်ဆက် ကြီး လည်း မေ့ အိမ်မှာ ဆက်နေ နေလို့ မဖြစ်သေးတော့
တစ်ပတ်ကို၂ရက် ၃ရက် ကိုယ့်အိမ် ကိုယ်ပြန် အိပ်ရသေးတယ်။ အဲ့ဒီမှာ ကျနော့် ရောဂါက စတော့တာပဲ။
မေ့ ကိုယ်လုံး အိအိထွေး ကို ဖက်မအိပ်ရတဲ့ ညတွေ၊ မေ့ ကိုယ်နံ့သင်း ချိုချိုလေး မရတဲ့ အခါ၊ မေ့
ဆံပင်ရှည်လေး တွေထဲ မျက်နာအိပ်ပီး မအိပ်ရတဲ့ အခါ၊ တရေးနိုး လာတိုင်း ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ ကနေ
မျက်လုံးလေး မှေးထားလျှက် မှိန်းနေရာက ကျနော့် ရိပ်ပီးစ အငုတ်ကလေး တွေ ထွက်နေတဲ့ မေးဖျားက
စူးရှရှကို လက်ဖ၀ါး လေးနဲ့ မေ လှမ်းပွတ်တာကို မခံရတော့တဲ့ အခါ၊ ရောင်နီလာခါစ အလင်းရောင်
အောက်မှာ လှချင်တိုင်း လှနေတဲ့ ကပိုကရို မျက်နာဝိုင်း စက်စက် ကလေးကို မမြင်ရတော့တဲ့
. ငါ တစ်ယောက်ထဲ အိပ်တာ အိပ်လို့ ကောင်းကောင်း မပျော်တော့ ဘူးဟာ ရူးတော့မယ် . လို့ ကယောင် ကတမ်း အော်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးရှိတဲ့ အိပ်ယာထဲမှာ မဟုတ်မှန်း သိလိုက်ရတဲ့ အခါတိုင်း ကျနော် ခြောက်ခြားစ ပြုလာပီ။ ကြက်အိပ် ကြက်နိုးတွေ ဖြစ်ပီး မနက်လင်းတာနဲ့ ရေမိုးချိုးပီး မေ့ဆီ ပြေးတော့ တာပါပဲ။ မနက်စာ တူတူ စားရင်း ဒေါ်ကြီး အလစ်မှာ . မြန်မြန်မောင်းကွာ မောင်နဲ့ တူတူဖက် အိပ်ချင် နေပီ တဲ့။ ကျနော့် အိမ် ရောက်သွား တာနဲ့ အိပ်ခန်းထဲ တန်းသွားကြတာပဲ။ အိမ်ကြီး တစ်ခုလုံး ဘယ်သူမှ မရှိဘူး ဆိုတော့ကာ အရင်လို လွတ်လွတ် လပ်လပ် မချစ် ရတော့တာကို အတိုးချပီး ခပ်ကြမ်းကြမ်း တစ်ခါလောက် ချစ်လိုက် ကြသေးတယ်။ ၂ ယောက်လုံး အ၀တ်တွေ အကုန် ချွတ်ပီး တစ်ကိုယ်လုံး နမ်းစုပ် တ ဟင်း ဟင်း အော်ငြီးရင်း၊ ကျနော့် ကုတင် စောင်းပေါ် သူ့ကို ပွေ့တင်ပီး အသားကုန် ဆောင့်၊ ခေါ်မကြား အော်မကြား ခြံဝင်းထဲက အိမ် ဆိုတော့ စိတ်ကို လွှတ်ချလိုက်ပီး လေးဖက် ထောက် ဆံပင် အရှည်ကြီးတွေကို ဆွဲပီး တအား ကြမ်းကြမ်းဆောင့် မေ့ ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး တွေကို လက်နဲ့ ပွတ်သပ် ဆုပ်ချေလိုက်၊ လက်ဖ၀ါးနဲ့ မနာအောင် ခပ်စပ်စပ် ကလေး တဖန်းဖန်း ရိုက်ရင်း ပါးစပ်က အော်ချင်တာတွေ အော် (မေ ကလည်း ခုမှ လွတ်လပ် သွားတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အသားကုန် ဆောင့်ခိုင်း ပီး သူကိုယ်တိုင်ကပါ အသေအော်တာ ဆူညံနေတာပဲ) ပီးသွားတော့မှ အ၀တ်တွေတောင် ပြန်မ၀တ် နိုင်တော့ပဲ ၂ယောက်စလုံး ဖင်တုံးလုံးလေးတွေ နဲ့ ဖက်ရင်း အိပ်ပျော် သွားကြ တော့ တာပေါ့။ တစ်နာရီ ကျော်ကျော် လောက် မှေးလိုက်ကြပီး ပြန်နိုး လာကြတော့မှ အိပ်ယာထဲမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခပ် တင်းတင်း ဖက်ရင်း ကျေနပ် နှစ်သိမ့် နေကြတယ်။ ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲမှာ မျက်နာလေး အပ် နေရတော့ သူက ကြည်နူး နေသလို၊ မေ့ ကျောပြင်၊ လက်မောင်း ချောအိအိလေး တွေကို ပွတ်သပ်ရင်း သူ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို ခွ ထားရတော့ ကျနော်လည်း ကျေနပ် နေတာပေါ့။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပြုံးပီး စိုက်ကြည့်လိုက် နမ်းလိုက်နဲ့ ဇိမ်တွေ့ လိုက်တာဗျာ။ (ခု ပြန်ပြောရင်းနဲ့ တောင် လွမ်းလာပီ .. ဟီး ) ဧည့်ခန်း စားပွဲပေါ် သူ့ကို ပက်လက် တက် အိပ်ခိုင်းထားပီး ရင်ဘတ်ပေါ်က ..... မေ.... ဖက်ထားပါ.... ဟင့်အင်းကွာ... မောင် .မနက်ခင်းတွေမှာ ကျနော် နေမရ ထိုင်မရတွေ ဖြစ်လာတတ်ခဲ့ ပီဗျာ။ ပွေ့ဖက်ထားရာက လွှတ် ထွက်သွားတိုင်း မျက်လုံးလေး မဖွင့်ပဲ .... တူတူပဲ . မောင့် အိမ်ကို မောင်းတဲ့။ ဟမ်! အလုပ်က ဘယ်လို လုပ်မှာတုံး ဆိုတော့ နေ့လည်မှ ပြန်လာမယ် ဟာ လျှာမရှည်နဲ့ ငါက သူဌေး ဘယ်သူ့မှ ဂရု မစိုက်ဘူး. အဟင့် ) ကျနော် ပြောသလို ပဲလေ လူမရှိ သူမရှိ ၂ယောက်ထဲ ကမ္ဘာလေး ဆိုတော့ ထပ် သောင်းကျန်း ကြ ပြန်သေးတာ။ အိမ်အပေါ်ထပ်၊ တက်တဲ့ အတွင်း လှေကား မှာ လက်ထောက် ပေးပီး အနောက် ကအုပ် တာတို့၊ ဧည့်ခန်းထဲ သွားပီး သူ့ကို ဆက်တီခုံမှာ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ပေါင်ကား ခိုင်း ထားပီး ကျနော်က ခွေးခြေလေးနဲ့ ကြမ်းပြင်ပေါ် စိတ်ပြေနပြေ ထိုင်ပီး အဖုတ်လျှက် ပေးတာတို့၊ အိမ်ထဲ သွင်းထားတဲ့ ဒေါက် ထောက်ထားတဲ့ ယောကျာ်းစီး ဆိုင်ကယ်ပေါ် တက်ခွပီး လုပ်ကြတာတို့ ( ပြောရင်းနဲ့ မျက်စိထဲ ပြန် မြင်လာပီး ရယ်ချင်လာ ပြန်ပီ ကျနော်တို့ တော်တော် ဆိုးခဲ့ တာဗျာ ..... လို့ မျက်နာ ငယ်လေး နဲ့ ပြောမိတော့ မေ ကလည်း . ဘယ်ရောက်သွားတာတုံး .. လို့ အိပ်ရေး ပျက်ထားတဲ့ မျက်နာလေးနဲ့ ညှိုး ငယ်ငယ်လေး ပြောတတ် လာတယ်။ အဲ့ဒီနေ့မျိုးဆို သူ့ကို အလုပ် လိုက်ပို့တော့ သူ့ အလုပ်တိုက် အရောက်မှာ ခဏစောင့်ဦး ဆိုပီး ကားပေါ်က ဆင်းသွားတယ်။ ၁၅မိနစ် လောက် ကြာတော့ ပြန်ထွက်လာပီး ..
. ဟိ။ ဒါတောင် မိုးချုပ်လို့ ညစာ စားသောက်ပီး၊ သူက သူ့ဖာသာ စာရင်းဇယားနဲ့ အလုပ်ရှုပ်၊ ကျနော်က သတင်းလေး ဘာလေး ထိုင်ကြည့်ရင်း ပျင်းလာလို့ ပြန်တော့မယ့် ဟန်နဲ့ ထိုင်ရာက ထ လိုက်ရင် သူ့အလုပ် စားပွဲကနေ လှမ်းကြည့်ပီး မျက်နာရိပ် မျက်နာကဲ က မပြန်နဲ့ဆိုပီး လုပ်ပြ လာသေးတာ။ ဒီမှာ အိပ်မှာ လိုလို ပြန်မှာ လိုလို လုပ်နေရာက ဒေါ်ကြီးတို့ အိပ်သွားမှ ခပ်တည်တည်နဲ့ အိမ်တံခါးတွေ လိုက်ပိတ် လိုက်ပီး မေ့ အိပ်ခန်းထဲ လှစ်ကနဲဝင် အိပ်ယာထဲကနေ စောင့်နေ လိုက်တော့တာဗျ။ ခဏနေတော့ ခြေလက် ဆေး၊ သွားတိုက် မျက်နာသစ်ပီး တဲ့ မေ က အသာလေး အိပ်ခန်းထဲဝင်လာ အတွင်းခံလေးတွေ ချွတ်ချ၊ စွပ်ကျယ် အပါး၊ ထမီ အပါးလေး ကောက်ဝတ်ပီး ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲ ၀င်လာ တော့တာပဲ။ နေ့လည်က အားရအောင် လုပ်ထား ကြပီးသား ဆိုတော့ ဘာမှ မလုပ်တော့ ပါဘူး။ ၀ နေကြပါပီ။ ဖက်ပီး အိပ်ချင်တာပါ ဆိုနေမှ ဗျာ။ တစ်ယောက် နားရွက် နား တစ်ယောက် ပါးစပ်လေး ကပ်ပီး တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ချစ်စကား လေးတွေ ပြောလိုက်၊ အသံ မထွက်အောင် ကြိတ်ပီး ရယ်လိုက်၊ စလိုက်၊ နောက်လိုက် ကလေးတွေ လုပ်ပီး တင်းတင်းဖက်ရင်း အိပ်ပျော်သွား ကြတာပဲ။ ( မိုးလင်းခါ နီးတော့ လင်းဆွဲ ကြိတ်ဆွဲလေး တစ်ခါ ထဆွဲတယ်ဗျ ဟီး ဆွဲတယ် ဆိုတာ ကလည်း ကျနော်က ဆွဲချင်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ကျနော် ဆတ်ကနဲ လန့်နိုး လာပီ ဆို ဒင်းက ကျနော့် ဟာကို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုပ်ပီး သောင်းကျန်း နေပီကိုး ဒီတော့လည်း အိပ်ချင် မူးတူးနဲ့ ထ ဆွဲရတော့ တာပေါ့ လုပ်ချင် လွန်းလို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ လေ .. လိ့။ု အဲ့မှာ သူက ...... ဟာ .. အဲ့လိုမျိုး ရှုပ်ရှက် ခတ်နေအောင် ကို သောင်းကျန်း ကြတာဗျ။ လုံးဝ အီစိမ့်သွားပီး ၀သွားမှ ၂ယောက်သား ကျနော့် အိပ်ခန်းထဲ ပြန်ဝင်သွားကြပီး မောမောနဲ့ အိပ်တော့ တာပေါ့။ နေ့ခင်း၂ချက်ကျော် ၃ချက်လောက်မှ တူတူ လူးလဲထ၊ ရေလေး ဘာလေး ချိုးပီး သူ့အလုပ်ကို ပြန်လစ်ကြတော့တာ။ ကျနော်လည်း တခါထဲ ထိုင်စောင့်ပီး ပြန်ကြို လာခဲ့ တာပေါ့။ မေ့ အိမ် ပြန်ရောက်တော့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ၂ယောက်သား အလုပ် ရှုပ် လာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ . ဟိ ...ကျနော်က တက်ခွ၊ သူ့ ချိုဗူး ၀ါဝင်းဝင်းကြီး ၂ခုနဲ့ ကျနော့် ဒုံးပျံကို ညှပ် ခိုင်းထားရင်း ရှေ့တိုး နောက်ဆုတ် လုပ်တာတို့၊ အဲ့ဒီ စားပွဲပေါ်မှာပဲ ကျနော်က ပက်လက် အိပ်ပီး မေ က ဆံပင်ရှည်လေး တခါခါနဲ့ မြင်း တက်စီး ခိုင်းတာတို့ . ငှဲ) ဒီလို အခြေနေတွေ ဖြစ်နေပီ ဆိုတော့ ကာ ရှေ့ဆက် မလွယ် တော့ဘူး။ မလွယ်တော့ဘူး ဆိုတာက ဒေါ်ကြီးရှေ့မှာ လေဗျာ။ သူ့ အဒေါ်ရှေ့မှာ ကျနော်တို့ အဲ့လို ဖြစ်နေတာကို လူကြီးက တနေ့ နေ့တော့ သိသွား မှာပဲ။ အမှန်က ရိပ်တောင် ရိပ်မိနေ ပါပီ လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီလောက် မူပျက် နေကြတာ။ ဒေါ်ကြီး အနေနဲ့လည်း ကျနော် ၀င်ထွက် နေတာကို သဘော အကျသားပဲ။ သားလေး ဖိုးသက်ဆိုတာ ပါးစပ်ဖျား ကမှ မချတာလေ။ ဟိုးအရင် ကထဲက ကျနော့်ကို တူသား နောင်မယ် လို ချစ်လာတဲ့ အဖွားကြီးပဲ ဟာ။ ကျနော်လည်း ဒီလို တိတ်တိတ်ပုန်း ဖြစ်နေရတာ မကြိုက် ချင်တော့ဘူး။ ယူလိုက်ချင်ပီ ဗျာ။ လမ်းပေါ်မှာ လေလွှင့် နေတဲ့ ကျနော့် ဘ၀ကိုလည်း အဆုံးသတ် ချင်ပီ။ အရေးကြီးဆုံး အချက်က ကျနော် မေ့ကို ရင်နင့်အောင် ချစ်မိနေပီ ကောဗျာ။ တစ်ခုလပ် ကလေး တစ်ယောက် အမေ ချောချောလေး အရှေ့မှာ မားမား ရပ်ပီး တစ်ဘ၀လုံး စောင့်ရှောက် ချင်နေပီ။ ညအိပ်တိုင်း ကျနော့် ရင်ခွင်ထဲကို ငုံ့ကြည့် လိုက်ရင် အဲ့ဒီ အပြစ် ကင်းစင် တဲ့မျက်နာ ၀ိုင်းစက်စက် ကလေးကို အမြဲ မြင်ချင်နေပီဗျာ။ ဒါနဲ့ သိပ်စဉ်းစား မနေတော့ဘူး။ တရက်မှာ မေ့ကို ကျနော်ပြောလိုက်တယ်။ “ မေ! ငါ့အိမ်ကို လှမ်းအကြောင်း ကြားလိုက်တော့မယ် .
.” “ ဟောဗျာ! ငါတို့ ကိစ္စ ကိုပေါ့........ ထပ်မပြောနဲ့တော့....” တဲ့ ...” လို့ ဒရောသောပါး မေးလိုက်တော့ သက်ပြင်း ဟင်းကနဲ ချရင်း........ ဘာလဲဟာ ဘာလို့ ခေါင်းခါနေတာလဲ ...... .။............. ငါ့ကို မနောက်နဲ့နော်. “မောင်ရာ ငါ နင့်ကို ချစ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ ကိစ္စတော့ မဖြစ်ဘူးဟ...မျက်လုံးလေး ..။ နောက်တစ်ပို့စ် ဆိုပီးပါ ပီ ညီအကို တိ့ရုာ။ သိပ်လည်း ရေးစရာ မကျန်တော့ သလို အသေးစိတ် တွေလည်း မရေး ပြချင် တော့ပါဘူး။ အဲ့ဒါတွေ ပြန်ပြောရတာ စိတ် ဆင်းရဲတယ်ဗျ။ နက်ဖန် တစ်ပို့စ်တင်ပီး ဇာတ်သိမ်း လိုက်မယ်နော်။ ငါ နင့်ကို လွမ်းတယ် "မေ" channko ..။.. ကျနော် ကယောင် ကတမ်းနဲ့ သူ့ပုခုံး၂ဖက်ကို စုံကိုင်ပီး အော် လိုက်မိတယ်။ “မေ! နင် အဓိပ္ပါယ် မရှိတဲ့ စကားတွေ ပြောနေတယ် ကွာ ..” ဆိုတော့ မျက်နာက ကွက်ကနဲ ပျက်သွားတယ်ဗျ။ ကျနော့်ကို သေချာ မကြည့်ပဲ မျက်နာ လွှဲထားရင်း ခေါင်းခါတယ်။ ရင်ဘတ် ထဲမှာကို ထိတ်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ “မေ! ဘာတုံးဟ ........ ငါတသက်လုံး ဘယ် မိန်းမကိုမှ ဒီစကား မပြောဖူးသေးဘူး..... ငါ အိမ်ထောင်ပြုချင်ပီ သူတို့ နင့် အဒေါ်ဆီမှာ လာ ကြောင်း လှန်းပေးဖို့ အဲ့ဒါလေ.....” ။........ ၀ိုင်းသွားပီး ဘာကိုလဲဟင်? တဲ့ ..
.. မောင် ငါ့ကို အရမ်း ချစ်မှန်း သိပါတယ် ငယ်ငယ်က ကောင်ရှုပ်လေးလို မဟုတ်တော့ မှန်းလဲ သိပါတယ် . တသက်လုံး ဒီအတိုင်းနေမယ်ကွာ မေနဲ့ မောင် ညတိုင်း တူတူ အိပ်မယ် ဒါဆို ရပီ မဟုတ်လား . ငါ့ကိုယ် ငါတောင် ရွှံသလိုလို ဖြစ်သွားတယ် . ငါ့ကိုမယုံလို့လား” “မဟုတ်ပါဘူး . ဘာလဲကွာ! ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပီလဲကွာ! . တိတ်တိတ်ပုန်း လင်မြှောင်လေး ပေါ့ ... .. အဲ့ဒါ မျိုးတော့ ငါ့ကို လာမလုပ်နဲ့ ငါ ယောကျာ်းဟ ငါ့မှာ အတ္တမာန ရှိသေးတယ် နင် ငါ့ကို ခိုင်မာတဲ့ အကြောင်း ပြချက် ခုပေး အဓိပ္ပါယ် မရှိတာတွေ မကြားချင်ဘူး” အဲ့လိုမျိုး ပွဲကြမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာ မယုံကြည် နိုင်လောက်ဖွယ် တိုက်ဆိုင်မှုက ဖြစ်သေးတယ်။ ဖုန်းဝင် လာတာဗျ။ ပွဲကြမ်းနေတော့ ကာ မကိုင်ဘူး။ မကိုင် လေ လေ ဆက်တိုက်ခေါ် လေ လေ ဖြစ်လာတော့ လူက စိတ်တိုတိုနဲ့ ကောက်ကိုင် လိုက်ကော။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ခေါ်မှန်းလဲ ..” “သြော် . ဆိုတဲ့ ၀ါကျ ၂ကြောင်း ကို တတွတ်တွတ် ရွတ်ရင်း မေ့အရှေ့မှာ ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက် နေမိတယ်။ တစ် တင်္ဂ ရူးသွားသလား တောင် မှတ်ရတယ်။ စီးကရက် ၃-၄လိပ် ကုန်တော့ မေ က သူ့ဘေးမှာ လာထိုင်ဖို့ ခေါ်တယ်။ ၀င်ထိုင်လိုက်တော့ လူက အငြိမ်မနေဘူး။ တုန်တက် နေတာ။ မေ က ကျနော့် ကျောပြင်ကို လက်နဲ့ ခပ်ဖွဖွ ပုတ် ပေးနေတာကို ခါချသလို လုပ် သူ့လက်တွေကို ဆွဲဖယ်လိုက် ရင်း ကျနော် မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက် ထုတ်နေမိတယ်။ “မေ! ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆို” “အင်းလေ... .” ( သူ့ အင်းလေ ဆိုတဲ့ အသံက တုန်ပီး အဖျားခတ်နေတယ် ) “ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့ ?” “ချစ်တိုင်း လက်ထပ်စရာ မလိုပါဘူး မောင်ရာ” “မေ. . နင် ငါ့ကို အရူးစကားတွေမပြောနဲ့ဟာ ... ငါ မခံနိုင်တော့ဘူးးးး” “ကျွတ်! ငါတို့ လက်ထပ်စရာ လို လိ့လုား . ဘာလဲ..” “ဒါဆို ဘာကြောင့်လဲ!!!!! မေ.... နောက်ဆုံးအပိုင်းပါပဲ ညီအကိုတို့။ မုဒ် သွင်းထားတာ ဘဒ္ဒ၀ိဇ္ဇာ လေးလုံး ရှိနေပီ။ ပေါက်ကွဲ သံစဉ်တွေ လာပါပီ ခင်ညာ။ မေ အဲ့လို ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ကျနော် ရင်ဘတ် တစ်ခုလုံး ဗလောင် ဆူသွားတယ်ဗျာ။ Boxing စကားနဲ့ ပြောရရင် left hook: မိသွားတယ်ပေါ့။ ထိချက် ပြင်းတယ် ဆရာ။ ထင်မှ မထင်မှတ် ထားတာကိုး။ သူပဲ ကျနော့် ကို ဒီလောက် ချစ်ပြ တွယ်တာ ပြနေတာ ကြီးလေ။ ကယောင် ကတမ်းနဲ့ ဘာမှကို ပြန်မပြော နိုင်တော့ပဲ ထိုင်လိုက် ထလိုက်ကို ဖြစ်နေခဲ့တာဗျ။ မှတ်မှတ် ရရ အဲ့ဒီ စကားတွေ ပြောနေခဲ့စဉ်က မေ တို့ ခြံထဲက စံပယ်ခြုံလေး ဘေး ခုံတန်းလေးပေါ်မှာ ညနေစောင်း အချိန်။ မေ က ကျနော့် စကားတွေ နားထောင်ပီးတာနဲ့ အဝေးကိုပဲ ငေးနေတော့တာ။ ကျနော်က ထရပ်ပီး ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ စီးကရက်ဖွာလိုက် .....
. မောင်! နင်အိမ်ထဲ ခဏသွားပေး. ငါတသက်လုံး ဘယ် မိန်းမကိုမှ ဒီလို အောက် မကျို့ဖူးဘူး။ ငါ့ ရည်းစားဟောင်းတွေ အကုန်လုံး နဲ့ တုံး ကလည်း တခါမှ လက်ထပ် ပါရစေလို့ ခွင့်မတောင်း ခဲ့ဖူးဘူး။ ခုတော့ ငါ့ကို အိပ်ရုံတင်ပဲ တော်ပီ ဆိုတဲ့ မိန်းမနဲ့ တွေ့လို့ အသည်းကွဲ ရတော့မယ် ဟာ ဆိုပီး မေ့ မျက်နာကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း တမင်ရွဲ့ ပီးကို ပြောနေလိုက်တယ်။ မေ က ကျနော်နဲ့ ဖုန်းပြောနေတာ ဘယ်သူမှန်း ရိပ်မိသွားပီး မျက်နာ အတော် ပျက်စ ပြုလာပီ။ ဖုန်းထဲက မိခိ ကတော့ တဟားဟား နဲ့ ကျနော့်ကို နောင်ပြောင် နေတုံးပဲ။ ဖုန်းထဲကနေ အင်တာဗျူး လာလုပ် နေသေးတယ်။ “ဟဲ့! နင့်ကို အိပ်ရုံတင် ကြံတယ်ဆိုတော့ အပျိုပေါက်စလေး ဟုတ်မယ် မထင်ဘူး ဖိုးသက် ဟုတ်လားဟ ဟီဟိ” “အင်း မဟုတ်ဘူး ကလေးတစ်ယောက် အမေ” “ဟယ် ကလေးတစ်ယောက် အမေကြီး လား ခွီး နင် အတည် လိုချင်နေတယ် ဆိုမှတော့ တော်တော် ချော တော်တော်လှ တဲ့ မိန်းမ သေချာပေါက်ဖြစ်ရမယ်” “ဟုတ်တယ် ချောမှ ချော လှမှ လှ .. ဆိုပီး ရှောင်ခိုင်း ... မိခိလား! အေး ငါဗျိုင်းလေး .. . တဲ့။ ခိခိ ဆိုတဲ့ကောင်မလေး . သူက အိမ်ထောင် ကျပီး နယ်မှာ တာဝန်ကျနေတာ ။ မေရယ် ခိခိရယ် မိဝါရယ် ဆိုပီး ရဲသုံးဖော် ဆိုတာ ကျနော့် ပြောမနာ ဆိုမနာတွေ ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ သိပီး သားပဲ။ ကျနော် လည်း အခွင့်ကြုံတာနဲ့ မထူးဘူး ဆိုပီး အတော်ပဲ မိခိရယ် ဒီမှာကွာ မိန်းမတစ်ယောက်က ငါ့ကို အုပ်ပီး မယူနိုင်ဘူး လုပ်နေလို့ အဲ့ဒါ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေပီ လို့ ဟီး။ အဲ့လို ပြောထည့်ပစ် လိုက်ကော။ ဟိုဖက်က ဖွီးးး ကနဲ အသံနဲ့ ချောင်းဆိုးသွားသံ ကြားလိုက်ရတယ် ( လက်ဖက်ရည် သောက်ရင်း ဖုန်းပြော နေတာတဲ့ ) ခဏနေမှ မြတ်စွာဘုရား! ငါ လက်ဖက်ရည် တောင် သီးကုန်ပီ ဘာတွေလဲ ဖိုးသက်ရာ....... ဟဲ့! သေနာလေး နင့်အသံက လူသတ်ခါနီး အသံ ဖြစ်နေပါလား ဘာတွေ ဖြစ်နေတာလဲ . အဟီး။ သူလည်း ဘယ်လိုမှ မျှော်လင့် မထားတဲ့ အသံကြား လိုက် ရမှာ ကိုးဗျ။ ဟုတ်တယ်! အင်း! ဆိုပီး ၂ခွန်းလောက် စကားပြော အပီးမှာ ကျနော့်ကို မော့ကြည့် လာပီး .. တဲ့။ ဟိုဖက်က ကောင်မတော့ ဘယ်လောက်တောင် ရှော့ခ်ရသွားမလဲ မသိဘူး ... နင် ငါ့ကို ကူညီမလား သူငယ်ချင်း?” “အမ်! ငါက ဘာကို ကူညီရမှာတုံး ငကြောင်” “ကြည့်ပြောပေးကွာ . ငါ မိခိနဲ့ စကားပြော ဦးမယ် . နင့် ဟာကလဲ အဆန်း တကြယ်တွေ ထဖြစ်ပြန်ပီ သေသေချာချာ လျှောက်တင်စမ်း ငါ့ကို ဆိုပီး ပြန်မေး လာတယ်။ အေး ငါလည်း ဒါမျိုး မကြုံဖူးဘူး သူငယ်ချင်း .. ခဏကိုင်ထား” “ဟဲ့! သောက်ပလုတ်တုပ် ဘာတွေတုံး” စပ်မြင် ကပ်ကပ်နဲ့ မျက်ရည် တစိုစို၊ နှပ်ချေး တရွတ်ရွတ် လုပ်နေတဲ့ ကျနော့် အရှေ့မှာ ထိုင်နေတဲ့ မေ့ လက်ထဲ ဖုန်းထိုး ထည့်ပေး လိုက်တယ်။ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ဖုန်းကို လှမ်းယူပီး ကျနော့်ကို မော့ကြည့်နေတဲ့ မေ့ ကို ပြောလေ လို့ ပိတ်ဟောက် လိုက်မှ ဖုန်းကို နားရွက် နားကပ်ပီး ငိုထားလို့ နှာခေါင်းသံ ပါနေတဲ့ အသံနဲ့ .သေချာသတိမထားမိလိုက်ဘူး။ ဘယ်သူဖြစ်နေတယ်ထင်လဲဗျ။ ကျနော် ပြောပြော နေတဲ့ ကျောင်းနေဖက် သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး ၃ ယောက် ထဲက တစ်ယောက်ဗျာ။ ပွဲက ကောင်းချက် အဲ့ လို။ .....
ဒါပေမယ့် ငါ့အဘွားလည်း သေတော့မှာပါ သိပ်မနေရတော့ပါဘူး လို့... ကျနော်လည်း ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ အိမ်ထဲ ၀င်လာပီး ဧည့်ခန်းထဲ ငုတ်တုတ် ထိုင်နေမိတယ်။ တစ်နာရီကျော် နှစ်နာရီ လောက်တောင် ကြာမလား မသိဘူး။ မေ အိမ်ထဲ ၀င်လာတယ်။ ကျနော့်ဖုန်းကို ဆက်တီ စားပွဲပေါ် အသာလေး တင်ပီး သူ့အိပ်ခန်းထဲ ၀င်သွားတယ်။ ဘာမှလဲ မပြောဘူး။ ကျနော် ချက်ချင်းထပီး လိုက်သွားတော့ သူ့ အိပ်ခန်း တံခါးကို အတွင်းကနေ ဂျက်ချ ထားတယ်ဗျ။ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ တာနဲ့ ခုနက သူငယ်ချင်း မိခိကို ဖုန်းပြန် ခေါ်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်း ဖုန်းကိုင်တယ်။ ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်တာလဲဟာ...လာတော့ ... ဟီဟိ။ ဘာဗူးတွေလဲ ဆိုတော့ လက်တိုဂျင် နို့မှုန့်ဗူးတွေ လေဟာ. နင်ချမ်းသာတာ ငါသိပါတယ် .. ဆိုတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အသံ အရင် ကြားလိုက် ရတယ်။ ငါ့ကို အကုန် ပြောပြသွားတယ် နင်တို့ဟာ ကလည်း ငါဘာပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး တဲ့။ အမော တကောနဲ့ ကျန်တာတွေ နောက်မှ ပြောတော့ မေ နင့်ကို ဘာပြောသွားလဲ လိ့ေုမးလိုက်တော့ .. ငါဂိုဏ်းချုပ်ဆီ ဖုန်းဆက်ဦးမယ် စိတ်မပူနဲ့ ဆိုပီး ဖုန်းချသွားတယ် ( ဂိုဏ်းချုပ်ဆိုတာ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ကိုပြောတာ သူတို့ အထဲမှာ အသက် အကြီးဆုံး တစ်ယောက် ) ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း လစ်လာခဲ့ရော ဆိုပါတော့။ နောက်နေ့ ကြတော့ ဖုန်းတွေ တဂွမ်ဂွမ်ဖြစ်နေတယ်။ ဂိုဏ်းချုပ် မိဝါဆီက ဖုန်း၊ မိခိ ဆီက ဖုန်း တစ်ယောက် နဲ့ ပြောလိုက်၊ နောက် တစ်ယောက်နဲ့ ဆက်ပြောလိုက်။ ရှုပ်ရှက်ကို ခတ်နေတာပဲ။ အမှန်က သူငယ်ချင်း အချင်းချင်း သူတ့လို ည်း ညားစေချင် ကြတာပေါ့ဗျာ။ အရင်ကထဲက သူတို့တွေ ကျနော်နဲ့ မေ့ ကို ပေးစားချင် နေကြတာ ဆိုလား။ ခပ်ပေတေတေ လုပ်နေတဲ့ ကောင်ရယ်၊ အိမ်ထောင်ပျက်ပီး အားကိုး အားထား မရှိတဲ့သူ ရယ် မထူးပါ ဘူးဟာ ငါတို့စပ်ပီး ပေးစားလိုက်ကြအောင် ဆိုပီး ခဏခဏ နောက်နေကြဆိုလား။ ခုလို သူတို့ ကွယ်ရာမှာ ဒီလိုဖြစ်ကုန်တယ် ဆိုတော့ ကြားကြားချင်း ၀မ်းတွေသာ လိ့ေုပါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဘယ်လိုပဲ ကြားထဲက ကြောင်းလှမ်း စေ့စပ်ပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ဘာမှ ဖြစ်မလာခဲ့တော့ ပါဘူးလေ။ မေ က ခေါင်းမာတယ်။ တသက်လုံး သူန့လဲာအိပ် လာ ရတယ်။ မလိုချင်တော့တဲ့ အချိန် ကြိုက်တဲ့ မိန်းမ သွားယူချေ သူ့ကိုတော့ လက်ထပ်ဖို့ရာ ဒီတသက် မဖြစ်နိုင်ပါ တဲ့။ ဒါပါပဲဗျာ။ ဒီကြားထဲ ကျနော်လည်း အတင်း ကြိုးစားခဲ့ ပါသေးတယ်။ အသေးစိတ်တွေ မပြောချင်တော့ဘူး။ မေရယ် နင့်သမီး ငါ့သမီးပေါ့ဟာ။ ငါလည်း နင့်သမီးလေးကို ဒီလောက်ချစ်တာ မဆိုင်တာတွေ မတွေးစမ်းပါနဲ့ ဘာညာ ဆိုပီး ချော့မော့ ပြောတာလည်း မရပါဘူး။ တခါတလေ အရက်မူးမူးနဲ့ ပြုံးစိစိလုပ်ပီး ရိသဲ့သဲ့တွေလည်း လုပ်ဖူးခဲ့တယ်။ ...... မန်းလေးက အိမ် အပြင် ရှမ်းပြေက ခြံတွေလည်း ငါ့ကို အမွေပေးမှာ သိလား. သက်ပြင်းရှည် ချသံနဲ့ အင်းး အဓိက က နင့်ကို မကြိုက်တာ မဟုတ်ဘူးဟေ့ မလိုချင်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူ့သမီးလေး ပထွေးရမှာစိုး လိ့တဲု့ ဆိုတဲ့ အသံ ကြားလိုက်ရ တော့မှ ဇာတ်ရည်လည် သွားတော့တယ်။ လူလည်း ဘာလုပ်ရမှန်း မသိတော့ဘူး။ နင် စိတ်အေးအေး ထားပီး အိမ်ပြန် အိပ်တော့. ၈ဗူး ၉ဗူးလောက် ရှိတယ် သူ့ကုတင် အောက်မှာ ထည့်ထားတာ အထဲမှာ ရွှေထည် စိန်ထည်တွေ ငါ ဘိန်းစားတုံး ကတောင် တစ်ဗူး ခိုးရောင်းဖူးတယ် နည်းတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မဟုတ်ဘူး စိတ်ကူး မလွှဲနဲ့ . ကဲ! ဒါဆို ဘယ်လိုလဲ ငါ့ကို ယူမှာလားလို့ ငါမညာဘူး နင်မယုံရင် ငါ့အဘွားကို ဖုန်းဆက် မေးကြည့် ဘာညာဆိုပီး မူးမူးနဲ့ အဲ့လိုတွေ ပေါက်ကရ လျှောက်ပြောခဲ့ တာတွေ။ . မေ! ငါနင့်ကို ပိုင်းလုံး လုပ်မှာကြောက်လို့ လားကွယ်. သူသေရင် နို့ခြောက်မှုန့်ဗူးတွေ အကုန် ငါရမှာပါလို့ ..
. အဟီး ) သူစကား ပြောမတတ်လို့ ပါဗျာ။ အမှန်က ယောကျာ်းသား ရှိတော့ မိန်းမသားတွေ လုံခြုံတယ် ဆိုတာ မျိုးကို ပြောချင်တာပါ။ မေလေးနဲ့ လည်း သားကို ကြိတ်ပီး သဘောတူပီး သားပါကွယ် တဲ့။ ဒါပေမယ့်ကွယ် ကလေးမလေးက စိတ်ဒဏ်ရာကြီးတယ် ကော ကွယ် တဲ့။ သမီးလေး ကိုယ၀်န်ကြီးနဲ့ ခါးပတ်နဲ့ချွတ် အရိုက်ခံရ၊ မူးမူးနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမကို လေးဖက်ထောက် ခိုင်းပီး ခွစီး လို စီး အဲ့လိုတွေ သူ့ယောကျာ်းက နှိပ်စက်တာ ခံခဲ့ရရှာတာ တဲ့။ ဒီလောက် ချောတဲ့ မိန်းမ ရထားရက်န့ကဲို မိန်းမတွေလည်း ရှုပ်ဆိုလား နောက်ဆုံး ပိုက်ဆံပုံပေးပီး ကွာလိုက်ရတယ် တဲ့။ ဒီတော့ ကလေးမလေး ကြည့်ရတာ နောက် အိမ်ထောင်မပြုရဲတဲ့ စိတ်ရောဂါ ရနေဟန် တူပါရဲ့ကွယ်တဲ့။ ကျနော်က သူ့ငယ် သူငယ်ချင်းပါ ဒေါ်ကြီးရာ၊ ပီးတော့ သူ့ယောက်ျားဟောင်းလို သူ့ပိုက်ဆံတွေ မက်လို့ ကြိုက်တာမှ မဟုတ်တာ အဲလို့တွေ လုပ်မလားဗျ လို့ ပြောလိုက်တော့ ဒေါ်ကြီးက သားကို ယုံပါတယ်ကွယ်။ ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်က အဲ့လိုဆိုတော့ ခက်သားပဲကွယ် တဲ့။ နောက်တော့ သက်ပြင်းချရင်း ဒီရက်ပိုင်း မေတစ်ယောက် ညတိုင်း မအိပ်ပဲ ငိုသံ တအိအိ ဒေါ်ကြီး ကြားပါတယ် စိတ်မကောင်းဘူး ကလေးတို့ ၂ယောက် စလုံးကို ဒေါ်ကြီး သနားပါတယ် လို့ ပြောရင်း ပုခုံးပေါ် တင်ထားတဲ့ တဘက်ပိုင်း လေးနဲ့ . ဒေါ်ကြီး စိတ်မကောင်းဘူး သားလေးရယ် .. အိမ်း! ရှမ်းသူပုန် မင့် မလဲ ခုထိ ၀ဋ်ကြွေးဆပ်တုံး ပါလား မထူးပါဘူးကွာ ........ တဲ့။ .. ..... သား ဒီမှာရှိသွားတဲ့ ၄-၅-၆လ အတွင်းမှာ အင်မတန် အားကိုးရလို့ ခြံလည်း လုံတယ်လေ တဲ့ ( ဂိန်! ကျနော်က ခွေးလိုလိုကြီး ဖြစ်မနေဘူးလား .. တဲ့ ( ကြပ်ချက်ဟီးဟီး )။ ဒကာ့ .. ငါ့ ဆီမယ် အပီးအပိုင် သင်္ကန်းသာ ၀တ်လိုက်ပါတော့ . ဥစ္စာက အဆင့်တွေ တော်တော်ကျ လာလိုက်တာ ခုဆို တစ်ခုလပ်မလေး ကတောင် မလိုချင် တော့တဲ့ အခြေနေ ဖြစ်လာတယ် နောက် နောင်ဆို ကလေး ၃-၄ယောက် အမေ မုဆိုးမနဲ့များ ညားမလားပဲ . တဲ့။ ဦးပဇင်း ကလည်းဗျာ စိတ်ညစ်ရတဲ့ အထဲ ပေါက်ကရ တွေလို့ ပြောပီး အော်ရယ် နေမိတယ်။ နည်းနည်း နေသာထိုင်သာ ရှိလာတော့မှ ပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျနော် အရှုံးပေးလိုက်ပီဗျာ။ မေ့ အနားမှာလည်း ဆက် မနေနိုင်တော့ဘူး။ အဝေးဆုံးကို ထွက်သွား လိုက်တော့မယ်။ ခေါင်းမာတာက မေ တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ဘူး။ ကျနော်လည်း တူတူပဲ။ အိပ်တော့ အိပ်မယ် လက်မထပ်နိုင်ဘူး ဆိုတာ အင်မတန် အတ္တမာနကို ထိခိုက်တဲ့ စော်ကားမှုလို့ ကျနော် ယူဆသွားပီဗျ။ တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပြောရရင် ကျနော် နောက်ဆုံးအကြိမ် မေ့ဆီကို သွားတွေ့ လိုကပ်ါတယ်။ သူ့ ဆီလာတယ် လို့တော့ အကြောင်း မပြဘူးပေါ့လေ။ ဒေါ်ကြီးကို လာ ကန်တော့တာ ကျနော် ခရီးထွက်တော့ မယ်ပေါ့ ဖိန့်ဖိန့်။ ခပ်တည်တည်နဲ့ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ ကောက်ဝယ်လာတဲ့ လက်ဆောင်လေးနဲ့ ဒေါ်ကြီးကို ဧည့်ခန်းမှာ ကန်တော့နေတဲ့ အချိန် မေ က မီးဖိုခန်းထဲမှာ ချက်ပြုတ် နေရာက တစ်ချက် ထွက်ကြည့်ပီး ပြန်ဝင်သွားတယ်။ ဒေါ်ကြီး ကတော့ ကျနော့်ကို စိတ်မကောင်းတဲ့ မျက်နာလေးနဲ့ ကြည့်ပီး ခပ်တိုးတိုးနဲ့ ပြောရှာပါတယ်။ .နောက်ဆုံးတော့ ကျနော် ရှုံးသွားတယ်ဗျာ။ စေ့စပ် ကြောင်းလမ်းရေး ပွဲစားလုပ်တဲ့ ဟိ၂ုကောင်လည်း လက်မြှောက် အရှုံးပေး သွားတယ်။ ငှက်ပျောတုံးသာရှာပီး ဖက်အိပ်လိုက်တော့ ဖိုးသက်ရေတဲ့ အဟင့်။ ကျနော် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရေးခဲ့သလို ပါပဲ။ အလက်ဇန်းဒါးသည်ဂရိတ် ဆိုတဲ့ကောင်က အသက် ၃၀မှာ ကမ္ဘာ တစ်ခြမ်းကို အောင်နိုင်ခဲ့ သတဲ့ ကျနော် ဆိုတဲ့ကောင်က အသက်၃၀ မပြည့် တပြည့်မှာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ တစ်ခြမ်းကိုတောင် မအောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကောင်ပေါ့ဗျာ။ ရှုံးတယ်။ ဒါပါပဲ။ တစ်ပတ် ဆယ်ရက်လောက် တစ်ဖက်ကမ်း စစ်ကိုင်းဖက် ကူးပီး ဦးဇင်း ရွှေဘဆီ သွားအိပ်နေ လိုက်ခဲ့သေးတယ်။ ကိုယ်တော် ကလည်း အဖြစ်အပျက်တွေ အကုန်ကြားတော့ ..
မျက်လုံးထောင့်က မျက်ရည်စ တွေ သုတ်နေတယ်။ ကျနော်လည်း ဘာမှ မပြောတတ်ပါဘူး ဗျာ။ ဒေါ်ကြီး ထသွားတော့ မီးဖိုခန်းထဲ ၀င်ပီး မေ့ ကို ၀င်နှုတ်ဆက်တယ်။ ညနေ စောင်းဆိုတော့ ဘီယာသောက် သွားမလားတဲ။့ ဒါနဲ့ အကြော်အလှော်လေး တွေ ယူ ရေခဲသေတ္တာ ကိုမွှေ လိုက်တော့ ကျားတံဆိပ် ဘီယာ ၃လုံးတွေ့တယ်။ ငါတို့ ၂ယောက် မလောက်မင ဖြစ်မယ် ဆိုပီး သူ့အတွက် အဲ့ဒီ၃လုံးကို ပေးလိုက်ပီး အရင်က ကျနော် သောက်လက်စ ခေါင်းကျိုးစပဲ ရှိသေးတဲ့ ဂျေဒီတစ်ပိုင်းကို ယူလာခဲ့ရင်း ခြံထဲဆင်းထိုင် သူက ဘီယာသောက်၊ ကျနော်က ၀ီစကီမော့ပေါ့။ ရေကို မရောတော့ပဲ တစ်ပက်ပီး တစ်ပက် ချပစ်လိုက်တယ်။ သူလည်း ကျနော့်ကို ဘာစကားမှ မပြောဘူး။ ဘီယာကို ကျိုက်လိုက်၊ ငါးမုန့် ခြောက်ကြော်၊ မြေပဲလှော် ကောက်ဝါးလိုက် လုပ်ပီး ကျနော့်မျက်နာကိုပဲ ဆွေးရီရီ ငေးနေတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျနော် သူ့အပေါ် အင်မတန် နာကျည်းထားတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ သူကျနော့်ကို ငေးနေမှန်း သိသိနဲ့ မသိချင် ယောင် ဆောင်နေမိခဲ့တယ်။ “နင်ဘယ်ကို ထွက်သွား မလိ့လဲု” “အဝေးကြီးကို” “ငါ့ဆီ ပြန်လာဦးမှာလား လို့ မမေးတော့ပါဘူး” “မမေးတာ အကောင်းဆုံးပဲ” အဲ့လို မပွင့် တပွင့်တွေ ပြောရင်း ဆက်ပြောစရာ စကား မရှိတော့ဘူး။ ၀ီစကီပုလင်း ကော၊ ဘီယာပုလင်း တွေကော ပြောင်သလင်း ခါသွားပီ။ အမှောင်ထုထဲမှာ ကျနော်တို့ တငုတ် တုတ်တုတ်ကလေးတွေ ထိုင်ပီး တိတ်ဆိတ်နေကြတယ်။ တော်တော်ကြီး ကြာလာတော့ သူစကား စ လာပြန်တယ်။ “ဘယ်နေ့သွားမှာလဲ” “နက်ဖန်” “လိုက်ပို့ရမလား” “နင့်မှာ အဲ့လောက် သတ္တိရှိမယ် လို့ ငါမထင်ဘူး” စကားပြောသံတွေ ပြန်တိတ် သွားကြပြန်တယ်။ ငါးမိနစ်၊ ဆယ်မိနစ်၊ ဆယ့်ငါး၊နှစ်ဆယ်။ ပြောလိုက်တော့ လေဟာ။ ...... မောင်မရှိရင် သေလိမ့်မယ် သိလား။ ခဏလေး စောင့်ပါကွာ မေ မောင့်ကို တချိန်ချိန် လက်ထပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ့မယ်။ ခုချက်ချင်းတော့ မေ မပြောတတ်သေးလို့ပါ။ မေ့ကို ထားမသွားပါနဲ့ကွယ် . မောင်ရေ .မေလေး ... လို့ ပြောလိုက်လေ။ ပြောလိုက်စမ်းပါ ငိုသံပါပါလေး နဲ့ တစ်ချက်ရှိုက်သံ ပေးပီး ပြောလိုက်။ ငါ နင့်ကို အတင်း ပွေ့ပီး ငါ ဘယ်မှ မသွားတော့ဘူး ဟာ လို့ ချက်ချင်း ပြောဖို့ ၀န်မလေး ပါဘူးကွာ။ ငါစောင့်နေတယ် ပြောလိုက်တော့။ ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆို ပြောလိုက်စမ်းပါဟာ။ ကျနော့် စိတ်ထဲမှာ အဲ့လိုတွေ အော်ဟစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမပြောဘူးဗျာ။ ကျနော် မျှော်လင့်သလို ပြောမလာဘူး။ စကားတော့ ပြောလာတယ်။ ကျနော် မမျှော်လင့်ထားတဲ့ စကားတွေ။ ..
...........။.. အဟီး။ ဒေါ်နန်းမေမေကြည် တစ်ယောက် ကလည်း မောင် ကျမတို့ သားအမိကို ထားသွားတော့ မလိ့လုားရှင် ဆိုပီး ငိုသံပါလေးနဲ့ ပြေးလိုက် မလာခဲ့ပါဘူး။ တစ်ထပ်တိုက်ပုလေး ရှိတဲ့ ခြံဝင်းထဲကနေ ဝေါကနဲ မောင်းထွက်သွားတဲ့ ယောက်ျားစီး ဆိုင်ကယ်အိုလေးပေါ်မှာ ကျနော် တစ်ယောက်ထဲရယ်။ တခါက အဲ့ဒီ ဆိုင်ကယ်အိုလေးရဲ့နောက်မြီးမှာ ထိုင်ရင်း ကျနော့် ကျောပေါ် ပါးလေးအပ်လို့ မှီတွယ်ခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက် အဲဒီညက ပါမလာ ခဲ့တော့ဘူး။ သ ထာဝရ ကျန်ရစ် ခဲ့ပီ။ channko ။............. .. လိမ်လိမ် မာမာနေရစ် ခဲ့တော့နော်လို့ ( ၀င်းဦးလေသံတွေ ဖမ်းပီး ပြောလိုက်တာ ဟိ ဟိ ) သမီးလေးကို လက်ထဲက ချပေးလိုက်ပီး မေ့ မျက်နာကို တစ်ချက်မှ မကြည့်တော့မှ ချာကနဲ လှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။ သမီးလေးက ဘာမှမသိတတ်တဲ့ အရွယ်လေး ဆိုတော့ ဗမာ ရုပ်ရှင် ကားဟောင်းထဲတွေ ကလို . ....... ဦးဦး ဖေဖေ ဆိုပီး ဗြဲကနဲ အော်ငိုပီး ပြေးလိုက် မလာဘူးရယ် ......“မောင်!” “အင်း “မေ့ ကို တစ်ခါချစ်သွား ချင်သေးလား” “ဘာပြောတယ် ဟားဟား ရှိကြီးခိုးပါရဲ့ တော်ပါတော့ ဗျိုင်းလေးရာ” (ကျနော့် ရယ်သံက အရူးရယ်သံလို လို ဖြစ်နေတာ သေချာတယ်ဗျ) “ဒါဆို မေ မောင့်ကို နမ်းလို့ ရမလား” “ယုဒ က ခရစ်တော်ကိုနမ်းတဲ့ အနမ်းမျိုးလား မရဏအနမ်း ဟားဟား” (ကျနော် တော်တော်မူးနေပီဗျ) ဘာမှမပြောတော့ပဲ ခြံထဲကနေ အိမ်ထဲ ပြန်ဝင်လာကြတယ်။ ဧည့်ခန်းထဲ ရောက်တော့ စားပွဲပေါ်က ဆိင်ုကယ်သော့ ကိုလှမ်းယူရင်း ဆော့နေတဲ့ သမီးလေးကို ကျနော်ပွေ့ချီရင်း ပါးဖောင်း ဖောင်းလေးကို ဘယ်ပြန် ညာပြန် နမ်းပီး နှုတ်ဆက်နေမိတယ်။ ဘီယာ အရှိန်ကြောင့်လား ဘာကြောင့်လား မသိဘူး မျက်နာလေး နီရဲနေ တဲ့ မေ တစ်ယောက် ကျနော်နဲ့ သမီးလေးကို ကြည့်ပီး ဆတ်ကနဲ မျက်နာကျက်က လေးပေ မီးချောင်းကို မော့ကြည့်နေတယ်။ ( မျက်ရည် မကျအောင် မျက်နာကို မော့ထားတယ် ) သမီးကို မြှူနေရင်း ခပ်အုပ်အုပ်အသံနဲ့ ပြောလိုက်မိသေးတယ်။ နောက်ဆို လေးလေး မင့်ကို အရင်လို မစောင့်ရှောက် နိုင်တော့ဘူး သမီးလေးရာ.........။..........။ ... ဟုတ်ကဲ့။ ပီးပါပီလို့ ပြောထားမှပဲ ဇာတ်လမ်း ဆက်ရမယ့် အခြေနေ ဖြစ်လာပြန်တယ်။ ဟိုဖက်က ညီအကိုတွေ ပြောထားတာ လေးတွေ ဖတ်ပီး ကျနော် မအောင့်နိုင်တော့ ဘူးဗျာ။ ဆက်ပြောမှကို ဖြစ်တော့မယ်။ အထူးသဖြင့် အော ကိုယ်တွေ့လေး ဆိုပီး ရင်တုန်စရာ၊ စိတ်ရွှင်စရာလေးတွေပဲ ....
.. ဟဲ။ သူများကို နိုင့်ထက် စီးနင်း ပြောတယ်ပဲ ထင် ထင် ကျနော့် အမြင် အတိုင်း ပြောရရင် အဲ့ဒီကောင်က စော်တကာကို ကပ်ကပ် နူးပီး သာဖန် စား ကြူစား နေတာ ရုပ်က စစ်ပြေးရုပ်ဗျ .ဖြစ်စေချင်တော့ကာ တချို့ဟာတွေ ဖျောက်ပီးရေးခဲ့ လေတော့ ခင်ဗျားတို့ ဘ၀င် သိပ်ကျဟန် မတူဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုကြပ်နဲ့ ကိုဇော်ဦး တိ့ဟုာကို reply: ပြန်ချင်တာ။ ဟိုဖက်မှာ မပြန်ချင်တော့လို့ ဒီအောက်မှာပဲ ဆက်ရေး လိုက်တော့မယ်။ ကိုသရဲပြောတဲ့ နောက်ယောက်ျား မယူဘူးလားဆိုတဲ့ ကိစ္စကို အရင်ပြောရရင်. ဟုတ်ကဲ့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ရေးတဲ့ ဇာတ်ကွက် ကတော့ ဇာတ်လမ်း ကိုးဗျာ။ ဇာတ်မနာ နာအောင် လုပ်ပေး ရတာပေါ့။ သူ့ယောကျာ်း ပိုင်းလုံးကောင်က တသက်လုံး ပြန်လာမပေါင်း နိုင်တော့ပါဘူး။ သေဘီလေ။ အကယ်၍ မသေသေးလို့ ကျနော်နဲ့ မျက်နာချင်းဆိုင် တွေ့ရင်လည်း ကျနော့် လက်ချက်နဲ့ သေမယ် ထင်တာပဲ ဟီး။ ဟိုးအရင် သူတြို့ ကိုက် ကထဲက ကျနော် သတိ ပေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပါသေးတယ်။ ယောကျာ်း ချင်းချင်း ပဲဗျာ။ ဒီကောင့် သောက်ကြောင်း ကောင်းကောင်း သိတာပေါ့။ အင်မတန် နှုတ်ချို လွန်းပီး စကားလေး ပြောလိုက်တိုင်း တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ မိန်းကလေးတွေကို လက္ခဏာကြည့် ဗေဒင်တွက်ပေးမယ် တိ့၊ု ကျနော်က အင်မတန် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိသားစုက လာတာခင်ဗျ ဘာညာ ဆိုပီး မျက်ရည်ချူ တဲ့ စကားတွေ လူတကာကို လျှောက်ပြော။ စာရိတ္တမောင် လိုလို အကွက် တွေလုပ်။ မိန်းမတွေ ကလည်း အများစုက ခပ်ပိန်းပိန်းလေး တွေလေ။ အဲ့မှာ သနား သလိုလို ဘာလိုလိုဖြစ်၊ ဆေးလိပ်မဖွာ၊ အရက်မသောက် (အမှန်က လူရှေ့မှာ မလုပ်တာ မအေဘေးက) လူကောင်း သူကောင်းလေး ဆိုပီး အယုံလွယ်။ ဟဲဟဲ! အဲ့လို မိန်းကလေး တွေတော့ ဒီကောင့်လက်ချက်နဲ့ "တင်ပဆုံ ဂိုင်းကန်" သွားမယ် သာမှတ်။ ဂိုင်းကန်သွားတဲ့ မိန်းမ တွေလည်း များပီ။ (လေတံခွန် ဂိုင်းကန်ရင် ဘာဖြစ်သွားလဲ ခင်ဗျား တို့ သိမှာပါ) ချစ်လို့ ကြိုက်လို့ အိပ်မိသွားတဲ့ ရည်စားတွေလို မှတ်မနေနဲ့။ အဲ့လိုလည်း ဖြစ်ပီးပီဆို အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြ ပိုက်ဆံ ချုစား တော့တာ ပါပဲ။ ဘယ်သူမှ မသိပေမယ့် အဲ့ဒီတုံးက မိုက်တိ မိုက်ကန်း အပေါင်းအသင်း စုံတဲ့ ကျနော်က ကောင်းကောင်း သိပါ့ ဒီကောင့် သောက်ကြောင်း။ ရေမထွက် တော့တဲ့ မိန်းမဆို ဗွမ်းပစ် လိုက်ကရော။ ထားလိုက် ပါတော့ဗျာ။ မေ နဲ့ ဒီကောင် လာ ပတ်သက်နေမှန်း ကျနော် သေသေချာချာ မသိလိုက်ဘူးဗျ။ ကျနော်က သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ တော်တော် နောက်ကျသွားပီ။ မေ့ ကို ကျနော် ခေါ်မေးတဲ့ အချိန်မှာ ငါ သူနဲ့ခြေလွန် လက်လွန် ဖြစ်ကုန်ပီ နင် ငါ့ကို တားလည်း မမှီတော့ဘူး တဲ့။ ထပီး ကန်ချင်တဲ့ စိတ်ကို မနည်း ထိန်းထားရ တယ်ဗျာ။ တကယ်ဆို မေ့လို ကောင်မလေးမျိုး (အဲ့ဒီတုံးက တော်တော် ငယ်သေးတယ်) က အဲ့လို အရူးကွက်တွေ လျှောက်လုပ်တဲ့ ကောင်ကို ဘယ်လို အနား အကပ်ခံပီး ဘာလို့ အဲ့လိုတွေ အဖြစ်ခံ လိုက်ရတာလဲ ကျနော် နားကို မလည်ခဲ့ဘူး။ နင့်ဖာနင် ဘယ်နှစ်ခေါက် အိပ်ပီး အိပ်ပီး ဖြတ်လိုက်တော့ ဆိုတာကို ဟင့်အင်း ဆိုပီး ငြင်းတယ်ဗျာ။ ဟိုကောင့် မှိုင်းမိ နေတာကိုး။ မေ့ မိဘတွေ ကလည်း လူကြီးတွေပဲဗျာ။ ဟိုကောင့်ကို အိမ်ခေါ်သွားတာ နောက်ထပ် ခေါ်မလာပါနဲ့ တဲ့။ ရုပ်ကို ကြည့်တာနဲ့ ဘာကောင်ဆိုတာ ရိပ်မိသွားပုံ ရတယ် . ဟီး။ တကယ် ပြောတာ။ ARMY RUN(M) လို့ ဒီကောင့်ကို ကျနော်တို့ မကြား တကြား ခေါ်နေကြ။ အဲ့လို ခေါ်တိုင်း မကျေနပ်သလို ဘုကြည့်ကြည့် ပေမယ့်လို့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ကို လန့်တော့ ဘာမှ မပြောရဲဘူးရယ်။ ( ကျနော်နဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဟာသထဲမယ် တခါက ပြောဖူးတဲ့ ကျောင်းနေဖက် ဘော်ဒါ၂ကောင်က အဲ့ဒီ ခေတ်က ဥပဒေမဲ့ ဒေသလို့ . ဟဲ .....
... ကျနော် ပြောရတော့မယ်။ ကျနော့် လက်ပေါ်မှာ တင် အရွယ်လေး ရလာတဲ့ သမီးလေး ပါဗျာ။ ကျနော့် သမီးလေး။ ကိုးလလွယ် ဆယ်လဖွား မဟုတ်ခဲ့ ပေမယ့် (ဟီး မောင်ချမ်း ကနေ မချမ်း ဖြစ်သွားပလားဟင်) ကျနော့် လက်ပေါ်မှာတင် လေးဖက် သွားရာက တတောက်တောက်နဲ့ လမ်းစ လျှောက်တတ် လာတဲ့ သမီးလေး။ သူ့အမေက မိုးလင်းကထဲက ထွက် မိုးချုပ်မှ ပြန်ရောက်လာ တတ်လေ တော့။ ကျနော့်ပဲ ထိန်းခဲ့ရတာ။ နောက်ဆုံးဗျာ ကျနော် လူပျိုကြီး အဲ့ဒီ ကလေး ပုစိကွေးလေးကို ကိုယ့် သမီးလေးလို့ ထင်မှတ် မှားလာရာ ကနေ သူ့အမေကိုပါ အတည် ကြံခဲ့မိတာပါ။ ... ဟီး။ အဲ့ဒီခေတ်က ဘူတာကြီး နားမယ် ဥပဓိရုပ် သိပ်မကောင်းရင် ခေါ်ခေါ်စစ်တဲ့ ခေတ်ဗျ။ စစ်ပြေး၊ တပ်ပြေးတွေ များလွန်းလို့။ အဲ့ဒီအချိန်က ယောကျာ်းနဲ့ ပတ်သက်ပီး မေ က အရိုင်းလေးပဲ ရှိသေးတယ်ဗျ။ အဲ့ဒီမှာ ဒီကောင် ဘယ်လို ၀ိုက်ပစ်တယ် မသိဘူး။ နောက်ဆုံး ကျောင်းတက် နေရင်းနဲ့ကို ခိုးပြေးသွားတာ။ သူဌေးသမီးလေး အပိုင်ကြံ ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့။ ဘာတတ်နိုင် မှာလဲဗျာ။ တိုတို ပြောရရင် မေ့ မိဘ တွေလည်း တစ်ဦး တည်းသော သမီး ဆိုတော့ ပြန်ခေါ်ပီး ပေးစား လိုက်တယ်ပေါ့။ ဂြိုဟ်ကောင် လည်း အိမ်ပေါ် ရောက်သွားကော အဘိုးကြီး အဘွားကြီးလည်း ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့် ဆုံး။ အဲ့ဒီမှာ ဆရာသမားက အစွယ်ထုတ် ပြတော့တာပါပဲ။ ကျန်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့ လည်း သိပီးသားပဲ။ ပိုက်ဆံ အပုံလိုက် ပေးပီး ကွာပစ် လိုကရ်တယ်။ ဒါပါပဲ။ သေသွားတာ ကတော့ ကျနော်လည်း သူများပြောလို့ သိရတာ။ အကုသိုလ်တွေ များလွန်းတော့ သက်ဆိုး မရှည်တာ နေမှာပါ။ အဲ့ဒီလို အိမ်ထောင်ရေးမျိုး ရင်ဆိုင်ခဲ့ ရတဲ့ တစ်ခု လပ်မလေးက နောက် ယောကျာ်းယူဦးမယ် လို့ ကိုသရဲ ယူဆ သလားဗျာ။ သူ့ကို ဘာမဆို အလိုလိုက်၊ တုန်နေအောင် ချစ်ပြ (သူငယ်ချင်းဘ၀ကထဲက) ၊ ဆိုးနွဲ့ သမျှလည်း ခံ၊ ဘာမဆို အကုန် သိတယ် လို့ ( သူ့အထင်ကို ပြောတာနော်) ယူဆ ခံထားရတဲ့ ကျနော့်ကို တောင် ငြင်းလိုက်မှ တော့ ဘယ်သူ့ သွားယူ ဦးမှာလဲ။ လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပီး သူ့ခံယူချက် ကလည်း ရှင်းတယ် ဆရာ။ ကျနော်နဲ့ အိပ်ရတာ သူကြိုက်တယ်။ ကျနော် မရှိတော့ ရင်ကော ဆိုတော့။ မိန်းမတွေက (ရတနာဝင်းထိန် စာအုပ်တွေထဲ ကလိ)ု တချိန်လုံး ဆာလောင်နေတာမျိုး မဟုတ်ဘူး တဲ့။ ပီးတော့ ဘ၀ကို တစ်ယောက်ထဲ ရုန်းကန် လှုပ်ရှား နေရတဲ့ မိန်းမ ဘ၀မှာ အဲ့ဒီကိစ္စကို တွေးမိအောင် အားတဲ့ အချိန်က ခပ်ရှားရှား ရယ်တဲ့။ နောက်ဆုံး လိင်စိတ် ဖြစ်လာရင် တောင် လက်နဲ့ပွတ်ရင် ရတာပဲ တဲ့။ ချစ်တဲ့ ယောကျာ်းနဲ့ အိပ်ရတာ မဟုတ်ရင် ဘာမှ မထူးဘူး တဲ့။ အဲ့ဒါ သူပြောခဲ့သမျှ အတိုင်း ပြန်ပြောပြတာ။ ကျနော်တော့ သူ နောက်ထပ် အိမ်ယာ ထူထောင်လိမ့်မယ် လို့ မထင်တာ အမှန်ပဲဗျ။ ကိုင်း! ကိုကြပ်နဲ့ ကိုဇော်ဦး။ ကိုဇော်ဦး ကျနော့်ကို နောက်မှန်း ကျနော် သိပါတယ်ဗျာ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ စကားကြောင့် ကျနော် မပြောပဲ ချန်ထား ခဲ့တာလေး ပြောရတော့မယ်။ ဒီလို ကောင်မျိုး ယူလိုက်လို့ ကတော့ သမီး ရှေ့ရေး ရင်လေးစရာ ဆိုတာ။ အင်းဗျာ. ဟီး .နာမည်ကြီးတဲ့ နေရာမှာ ဆေးသွားရှာရင်း ဖျံကျ သလိုလို လာလုပ်တဲ့ လူမိုက်တွေနဲ့ အသေအကျေ ခုတ်ကြ ထစ်ကြ သတ်ကြ ချကြ ဖြစ်ဖူးတော့ တစ်ကျောင်းလုံးက မိုက်ကန်းကန်း ကောင်တွေ ဆိုပီး သတ်မှတ်ခံ ထားရတော့ မလှန်ရဲဘူးပေါ့ လေ) တခါတလေ အရက်မူးမူးနဲ့ ကျနော်တို့ ထိုင်နေတဲ့ ရှေ့ အဲဒီကောင် စော်တွေ ဘာတွေနဲ့ တွဲပီးဖြတ်လာရင် ဟေ့ရောင်! ဘူတာကြီး ရှေ့မသွားနဲ့နော် မင့်ကို စစ်ပြေး ဆိုပီး ဖမ်းသွားဦးမယ်လို့ ပေါ်တင် ပြောပေးနေကြ .
ဟီ . ဟိ။ တော်ပါပီဗျာ။ ခင်ဗျားတို့လည်း စိတ်ဆင်းရဲ ပါတယ်။ ဒီပို့စ် နောက်ဆုံးပဲ တကယ် ရပ်လိုက်တော့မယ်။ ပျော်ပျော် ပါးပါး လောင်တီး စေမယ့် ကိစ္စလေးတွေပဲ ဆက်ပြောရအောင် ညီအကို တိ့ရုာ နော့်။ ခင်ဗျား တိ့ကိုလည်း ကျနော် မကျေနပ်ဘူးဗျာ။ ဘယ့်နှယ့် တသက်လုံး ခင်ဗျားတို့ အပျင်းပြေဖတ်ဖို့ တနေကုန်စာတွေ ထိုင်ထိုင် ရေးခဲ့တဲ့ ကျနော့်ကြ မသနားကြဘူး။ ဟိုဟာမပဲ ဂရုဏာ သက်နေကြတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကို ချစ်ရတာများ မတန်ချက် .ကိုကြပ် ပြောထား တယ်ဗျာ။ စာချုပ်တွေ မလို ဘာမလို ဆိုတာ။ အဲ့ဒါ ကျနော် ဘာလုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့မှန်း မသိလို့ ပြောနေတာ ထင်တာပဲ။ ကျနော် ရူးကြောင်ကြောင်တွေ ဖြစ်လာတာဗျ။ မေနဲ့ လက်ထပ်မယ်။ သမီးလေးရဲ့ အဖေ အဖြစ် ခံယူမယ်။ မေ့ ဖက်က ဒေါ်ကြီးက လွှဲပီး ဘာ အသိုင်းဝိုင်းမှ မကျန်တော့ဘူး။ ဒီတော့ ဘယ်သူ မှ ကျနော် ဘယ်သူ ဆိုတာ မသိနိုင်တော့ဘူး။ ကျနော့် သမီးလေး ကြီးပြင်းလာတဲ့ အခါ ကျနော်က သူ့အဖေပဲ လို့ ထင်မှတ် နေစေရမယ်။ အဲ့လိုမျိုးတွေ တွေးမိလို့ အဲ့ဒီစကားတွေနဲ့ အဲ့လို အရေးဆိုခဲ့ မိတာဗျ။ ကိယု့်သွေးလည်း မဟုတ်ပဲ ကျနော့်မှာ ချစ်လိုက်ရတာ တုန်နေပီ။ ဖခင် မရှိပဲ ကြီးပြင်း ရတော့မယ့် ဒီသမီးလေးကို ဂရုဏာ ပိုနေမိပီ။ ကျနော့်ကို သောက်ရူးလို့ ပြောလဲ ခံပါ့မယ်ဗျာ။ အဖေတစ်ခု သားတစ်ခု ထဲက စိန်မြင့်ကြီးလို စိတ်မျိုး ၀င်နေတာ .... ဟိ။ အဲ့ဒီမှာ ဘယ်သူမှ မသေပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေခိုင်း လိုက်တော့ ပေါက်ကွဲ သွားတယ် မှတ်တယ်။ ခုကိုယ်တွေ့မှာ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပီး သေလိုက်ရင် အရမ်းလှသွားမယ် ဆိုပီး လာကြပ်နေတယ် . ဟိ .... ဟီး။ ....ဟီး။ (ဟိုအေဘေး မိုးမြေကပါ အဆင်းဘီးတပ်လိုက်သေးတယ်) အဲ့ဒီညက လူကသာ မူးနေတာ ဆိုင်ကယ်ကို သတိနဲ့ပဲ ဖြေးဖြေးလေး မောင်းခဲ့တာဗျို့။ မတော် ဟိုတိုက် ဒီတိုက်ဖြစ်ခဲ့ရင် သူ့ကြောင့် ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပီး သိက္ခာကျလို့ဗျာ . အဟီး။ ကိုပေါ ကလည်း ကျနော့်ကို အငြှိုး ထားနေတာ မှတ်တယ်။ မှတ်မိပါသေးတယ်။ အရင် ကျနော့် သူနာပြုဆရာမလေး ဇာတ်လမ်း ဇတ်သိမ်း ခါနီးမယ် ကိုချမ်းကိုလေး ဒါမျိုး အပြင်မှာ မရှိခဲ့၊ မဖြစ်ခဲ့ဖူးတာမှ မဟုတ်တာ ၂ယောက်လုံးနဲ့ ညားလိုက်ပါဗျာ ဆိုပီး တောင်းဆိုတာလေ ...... ဟီး။ နောက်ဆုံးဗျာ ကုန်ကုန် ပြောရရင် ကျနော်တို့ ကွဲရတဲ့ အခါ ရင်အနာဆုံးက ကျနော် ချော့မသိပ်ရင် မအိပ်ပဲ ဂျီကျ တတ်တဲ့ သမီးလေးကို လွမ်းလွန်းလို့ အဝေး တစ်နေရာကနေ ရူးမတတ် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီအချိ်န်ဆို ငါ့သမီးလေး ငိုနေရှာ မလား ဆိုပီး မခံနိုင်တဲ့ အဆုံး အခန်းတံခါးပိတ် မီးအမှောင်ချ၊ အခန်းထောင့်မှာ ခွေခွေလေး လှဲ အိပ်ပီး ကြူကြူပါအောင် တအီးအီးနဲ့ ငိုခဲ့ဖူးတယ်။ ကျနော် တသက်လုံး ရည်းစားတွေနဲ့ ခဏခဏ ကွဲခဲ့တုံး ကတောင် ဒီလောက် ၀မ်းမနည်းခဲ့ဖူးဘူး။ အဲ့လိုလည်း ၀မ်းနည်း ပက်လက် မငိုခဲ့ဖူးဘူးဗျ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူ့အမေ တစ်ယောက်ထဲ ဟိုဒင်း ပါတာမှ မဟုတ်တာဗျာ။ မိန်းမများ ပေါလွန်းလို့။ သူ့ဖာသူ သေလောက် အောင် ချော သေလှအောင်လှ နေပါစေ သူ့ထက်လှတဲ့ မိန်းမတွေ ကမ္ဘာပေါ်မယ် သန်းချီပီး ရှိနေသေးတာပဲ။ ကျနော့် ဖာသာ သူ့ကို သေလောက်အောင် ချစ်ပါစေ ကိုယ့်ကို မကြင်နာနိုင်တော့ရင် လည်း သွားစေသတည်း ပေါ့။ တကယ် တမ်းတော့ သမီးလေးကြောင့် ကျနော့်ကို လက်မခံနိုငဘ်ူးလို့သာ ပြောခဲ့ပေမယ့် သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြောင့် သာလျှင် ကျနော့်သမီးလေး ဖခင်မဲ့ သွားရတာ သူမသိဘူး ဗျ။ ကျနော်တို့ သားအဖရဲ့ ချစ်ခြင်းကို ခွဲပစ်ရက်တဲ့ မိန်းမ။ ကိုကြပ်က ကျနော့်ကို နောင်တ ရပါပီ လုပ်ခိုင်း လိုက်မှ ဒါတွေလျှောက်ပြောမိ ပြန်တယ် ...
ကိုင်း.. ဒီကိုယ်တွေ့ ဒီတင်ပဲ ပီးပါကြောင်း နိဂုံး ချုပ်အပ်ပါသည်။ ကံမွဲသူ မောင်ရှင်ချမ်းစ် .
Documents Similar To Channko and His Friend Full
More From awsayar
Mate in Two_Dobrinetsky 1Uploaded by javier
ptk 1Uploaded by Dian Putrian Permata Sari
True Independence NeedsaReading PeopleUploaded by riyan wahyudi
Acuerdo Ministerial 135Uploaded by Paul Erazo
Soal UN 2018 IPS Paket5[www.m4th-lab.net].pdfUploaded by MardianaZulfa